သန္တာလင်း ( ခေါ် ) အပျိုစင်ရဲ့ပေးဆပ်ခြင်း အိပ်နေရင်းက ဆတ်ကနဲ နိုးလာတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က အေးစိမ့်နေသည် ... ညကတည်းကရွာတဲ့မိုးက အခုထိရွာနေဆဲ ... တိုက်ခန်းလေးဆိုတော့ အအေးဓာတ်လေးက စိမ့်နေသည် ... မျက်စိတစ်ဖက်ကို ဖွင့်ရင်း ကုတင်ခြေရင်းက နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၈း၀၀ ဖြစ်နေပြီ ... အလုပ်က ၉း၀၀ နာရီတက်ရမှာ ... နောက်ကျလို့ကတော့ မန်နေဂျာရဲ့ အဆူခံရတော့မယ် ... အိပ်ရာက ၀ုန်းကနဲ ထရင်း ရေချိုးခန်းထဲ အမြန်ဝင်ကာ မျက်နှာ အမြန်သစ် သွားအမြန်တိုက်လိုက်သည် ... ည၀တ် အကျီ င်္ရဲ့ ကျယ်သီးတွေကို တစ်လုံးချင်း ချွတ်လိုက်သည် ... ၀င်းဝါနေသော ရင်သားတွေက အိကနဲ ထွက်လာသည် ... မှန်ထဲမှာ ပေါ်နေတဲ့ ကိုယ့်ရင်သားတွေကို ကိုယ်ကြည့်ရင်း အနည်းငယ်တော့ ကျေနပ်သွားသည် ... လုံးသည် .. ကျစ်သည် ... ဖြူသည် ... မို့သည် ... မောက်သည် ... နို့သီးလေးက ပန်းရောင်လေး ... အသီးလေးက အတွင်းထဲ နည်းနည်းဝင်နေသည် ... လှတာတော့ အရမ်းလှသည် ... နေမမြင် လမမြင် ... ဖုံးဖုံးဖိဖိထားလို့လားမသိ ... အနာတစ်စက်မရှိ ... မှဲ့ ခြောက်တစ်စက်မရှိ ။
ရင်သားနှစ်ခုကို ဆပ်ပြာတိုက်ရင်း အနည်းငယ် ပွတ်သတ်မိတော့ စိတ်ထဲမှာ ဘာလိုလို ဖြစ်သွားသည် ... ဒါပေမယ့် ဘာမှန်းသေချာမသိ ... လက်တစ်ဖက်မြှောက်ရင်း ချိုင်းကိုလည်း သေချာပွတ်လိုက်သည် ... ရုပ်ကလေးက လှတပတ ... လူကြားထဲမှာ ချိုင်းက အနံ့ထွက်လျှင် ရှက်လို့ သေလိမ့်မည် ... ချိုင်းမွှေးတွေကို spa သွားပြီး နှုတ်ထားတော့ ပြောင်ရှင်းနေသည် … ဒီဘက်ပြီးတော့ ဟိုဘက် ... ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်လေးကိုလည်းတိုက်သည် ... သူများတွေလို ဗိုက်ခေါက်ထွက်မနေ ... ဘယ်ထွက်မတုန်း ... တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း GYM ကစားတာကိုး ... ဆပ်ပြာတိုက်ရင်း ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ရောက်သွားတော့ ဒါကလည်း တစ်မျိုး ... အမွှေးပါးပါးလေးတွေနဲ့ နုအိဖောင်းမို့နေတဲ့ အသားစိုင်လေး ... မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အလျှို့ဝှက်ဆုံး ပစ္စည်း ... အပေါ့သွားလည်း ဒီထဲက ထွက်သည် ... ရာသီလာလည်း ဒီထဲက ထွက်သည် ... ကလေးမွေးရင်လည်း ဒီထဲက ထွက်တယ်တဲ့ ... ရှုပ်ထွေးလွန်းလို့ သေချာတော့ နားမလည် ... ဒါပေမယ့် သေချာတော့ ဆပ်ပြာတိုက်လိုက်သည် ... နေ့တိုင်းဆပ်ပြာတိုက်လို့လားမသိ ... အောက်က ပစ္စည်းလေးက ဖြူဝင်းနေသည် ... ပေါင်လေးနည်းနည်းကားလိုက်တော့ အတွင်းသားလေးက ဟ တယ်ဆိုရုံလေး ဟလာသည် ... ဆပ်ပြာနဲ့ အနည်းငယ် သေချာ ပွတ်လိုက်တော့ ... စိတ်ထဲမှာ တမျိုးပဲ ...ရှုပ်ပါတယ် ... နောက်မှ စဉ်းစားတော့မယ် ... ရုံးက နောက်ကျနေပြီ ... ဟင်း ... နောက်မှာ ဆပ်ပြာတိုက်ဖို့ ကျန်သေးတယ်။ ကားစွင့်နေတဲ့ တင်သားတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်မှ ... ဖင်မှာ အနာပေါက်မှာတော့ ကြောက်သည် ... အသန့်ကြိုက်လို့ပဲလား ... ဂရုစိုက်လို့လား မသိ ... တစ်ကိုယ်လုံး အနာမရှိ ... အမာရွတ်မရှိ ... သွယ်လျတဲ့ ပေါင်တွေ ခြေထောက်တွေကိုလည်း သေချာ ဆပ်ပြာတိုက်သည် ... အားလုံးပြီးသွားတော့ ရေပန်းက တ၀ုန်းဝုန်းကျနေတဲ့ ရေအောက်မှာ ပွတ်သပ်လိုက်သည် ။
မျက်နှာသုတ်ပ၀ါနဲ့ အမြန်သုတ်ရင်း နာရီကြည့်တော့ ၈း၂၀ ... ဒီနေ့တော့ မန်နေဂျာ မမရဲ့ ပွစိပွစီ အပြောတော့ ခံရတော့မယ် ... အတင်စီးတော့ မခံနိုင် … အမြန်သွားမှ … ဘော်ဒီ -ိုးရှင်းကို တစ်ကိုယ်လုံး လူးရင်း ဘရာစီယာကို တင်းတင်း ၀တ်လိုက်သည် ... တင်းတင်း မ၀တ်လို့ မဖြစ် ... နို့မို့ဆို လမ်းလျှောက်ရင် တုန်တုန် တုန်တုန်နဲ့ အနေရခက်သည်။ လမ်းမှာတွေ့သမျှ ယောက်ျားတွေရဲ့ အရောင်လက်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေက မခွာတော့ဘူး ... ရှက်စရာကြီး ... ရင်သားတွေက အနည်းငယ်ထွားတော့ ဘရာစီယာကြားထဲကနေ အနည်းငယ်မို့ထွက်နေသည် ... အဲဒါကတော့ မတတ်နိုင် ... ရုံးတက် အကျီ င်္လေးက အစိမ်းနုရောင်လေး ... ကိုယ်နဲ့ ကွက်တိ ချုပ်ထားတော့ အားလုံး အိုကေ ... စကဒ်ကို ကောက်ဝတ်လိုက်တော့ … ဟိုက် … မေ့နေပြီ … အတွင်းခံ ၀တ်ဖို့ … ဟွန်း မ၀တ်သွားမိလို့ကတော့ အောက်က ဟောင်းလောင်းကြီး ဖြစ်နေမှာ … မနေတတ်ပါဘူး … ပင်တီ အသားရောင်လေးကို အသာစွတ်လိုက်သည် … ဒီတင်သားတွေကလည်းနော် … တစ်နေသည် … စကဒ်အမည်းရောင်လေးကို ကောက်ဝတ်သည် … သေချာတိုင်းပြီး ဒေါက်တွေ ထည့်ထားတော့ လုံးစက်နေတဲ့ တင်သားတွေက အိအိတင်းတင်းလေး … သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်မကို အားကျသည် … နင့်အိုးက စဥ့်အိုးကျနေတာပဲတဲ့ … လမ်းသွားရင် ယောက်ျားတွေ ကျွန်မ နောက်ကိုကြည့်ပြီး မျက်စိမခွာတော့ဘူး … နှာဘူးတွေ … မကြားတကြားလည်းပြောသေးတယ် … အိုးက ရှယ်ပဲတဲ့ … ဘာတွေ ရှယ်မှန်းတော့ မသိ … ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ ကျေနပ်သည်။
မျက်နှာကို ခရမ်နည်းနည်းလိမ်းပြီး အပြီးသတ်လိုက်သည် ... မိတ်ကပ်တို့ ... နှုတ်ခမ်းနီတို့ ... မဆိုးချင်ပါဘူး ... မကြိုက်လို့ ... သဘာဝအတိုင်းလေးပဲ ကြိုက်တယ် ... လက်ကိုင်အိတ်ထဲ ... ဟမ်းဖုန်းထည့် ... မနိမ့်မမြင့် ဖိနပ်လေးကို ရွေးလိုက်သည် ... အိမ်အကူ ကောင်မလေး မိနှင်းထည့်ထားပေးသော မုန့်ဘူး နှင့် ထမင်းချိင့်ထည့်ထားသောခြင်းလေးကို လှမ်းယူပြီး
``အော် ဟုတ်ပ ... တံခါးတွေ သေချာ သော့ခတ်ထားနော် ... ဘယ်သူမှ ဖွင့်မပေးနဲ့ သိလား ... ဖေဖေတို့ ခရီးထွက်တာက ပြန်လာအုံးမှာ မဟုတ်သေးဘူး´´
မိုးရွာထဲမှာ ထီးလေး ဆောင်းပြီး လမ်းလျှောက်ရတာကိုတော့ သဘောကျသည် ... အလုပ်က အိမ်နှင့် နီးလို့သာ တော်တော့သည် ... နို့မို့ဆို အလုပ်နောက်ကျသည်နှင့် အထုတ်ခံရမည်မှာ သေချာသည် ...
လမ်းထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ဖြတ်တော့ နည်းနည်းတော့ သတိထားရသည် ... ကိုယ့်နောက်ပိုင်းကို အရသာခံပြီး ကြည့်နေမယ့် လူတွေကိုတော့ နည်းနည်း စိတ်တိုမိသည် ... သတိထားလျှောက်နေရင်းကြားက တင်သားတွေက မသိမသာ လှုပ်ရှားသွားသည် ... အပျိုဆိုတော့ တင်သားကျစ်ကျစ်လေးတွေက သိပ်မလှုပ်ရှား ... မယမ်းခါ ... ဒါကိုပင် ကိုယ်တော်တွေက သွားရေကျနေသည် ... အကဲဆုံးက ချာတိတ်တစ်ယောက် ... မနက်တိုင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်ပြီး ကြွေပြနေသည် ... တစ်ပတ်လောက်တော့ ရှိပြီထင်တယ် ... မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကျော်သွားတော့မှ လက်ထဲက လက်ကိုင်ပ၀ါလေးကျသွားသည် ... ဒုက္ခပါပဲ ... ကုန်းကောက်လိုက်ရင်လည်း သူတို့ အကြိုက်ဖြစ်တော့မယ် ... စကဒ်နဲ့ ကုန်းကောက်ဖို့က နည်းနည်းခက်သည် ... ကုန်းလိုက်သည့်တိုင် တင်သားတွေက သိတယ်မလား ... တင်းနေတာကိုး ... သူတို့ရှေ့မှာ ဖင်ကုန်းပြတယ် ဖြစ်နေအုံးမယ် ... နဂိုကမှ နှာဘူးတွေ ... မျက်လုံးတွေက ခွာမှာမဟုတ်ဘူး ...
ထားလိုက်ပါတော့ ... ဆက်လျှောက်လာတော့ အနောက်ကနေ ချာတိတ် ပြေးချလာသည် ...
``မ ... မ´´
ရပ်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကောင်လေးက မဆိုးပါဘူး ... ချောတော့အချောသား ... မျက်လုံးကို တည့်တည့်စိုက်ကြည့်ပြီး လက်ကိုင်ပ၀ါလေးကို ကမ်းပေးရင်း
``မ ... မ လက်ကိုင်ပ၀ါကျကျန်ခဲ့ပြီ´´
``မလိုပါဘူး ... ငါက သက်သက် ပစ်ထားခဲ့တာ´´
``ဟာ မကလည်း မာနကြီးလိုက်တာ ... ကျကျန်ခဲ့တာပါဗျာ ... စေတနာနဲ့လည်း ကောက်ပေးရသေးတယ်´´
``မလိုချင်ပါဘူး ... ရုံးနောက်ကျနေတဲ့ဟာကို ... မင်း လိုက်မလာနဲ့နော် ... ချာတိတ်´´
``ကျွန်တော်က ချာတိတ် မဟုတ်ဘူး ... ကျွန်တော့်နာမည်က ကောင်းလင်းဆက် ... မ နာမည်က သန္တာလင်းဆို´´
``ဒီမှာ ဟိတ် ... မင်း ဘာသာ ကောင်းလင်းဆက်မကလို့ ငရုတ်ကောင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငါ စိတ်မ၀င်စားဘူး ... ဆက်မလိုက်လာနဲ့နော် ... ငါ့လက်စောင်းက အုတ်ခဲ ငါးလုံးကျိုးတယ် ... မယုံရင် စမ်းကြည့်မလား´´
``ဟာဗျာ ... မ ကလည်း´´
ခပ်တင်းတင်းနဲ့ ထွက်လာခဲ့တယ် ... ကောင်လေးကတော့ နည်းနည်းတော့ ကျွတ်သွားတယ်နဲ့ တူတယ် ... ဆက်လိုက်လာရင်တော့ လင်းလင်းလက်စောင်း အကြောင်းပြရသေးတာပေါ့ ... အမှန်ကတော့ ... ခြောက်လိုက်တာပါ ... အုတ်ခဲငါးလုံးကွဲဖို့ ဆိုတာ လွယ်တာ မှတ်လို့ ... အုတ်ခဲ မကျိုးခင် ... လင်းလင်း လက် ... အရင် ကျိုးလိမ့်မည် ... စိတ်ထဲက ... ချာတိတ်ကို ... ကြိမ်းမောင်းပြီး ... ဆက်လျှောက်လာသည် ... ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း သတိပေးနေမိသည် ...
သွားပါပြီ ... လက်ကိုင်ပ၀ါတစ်ထည်တော့ ... နောက်ဆို အိတ်ထဲ ထည့်ထားရမယ် ...
လင်းလင်းတို့ ရုံးခန်းဆိုတာက သုံးထပ်တိုက်လုံးချင်းလေး ... လှိုင်သာယာတို့ ... တခြားမှာတော့ ဂိုဒေါင်တွေ ဘာတွေရှိသည် ... လင်းလင်းတို့ က စာရင်းဌာနဆိုတော့ ဒီမှာပဲ ရုံးတက်ကြရသည် ... ခြံထဲမှာတော့ ကားတွေ ထားသည် ... အောက်ထပ်မှာတော့ ဒရိုင်ဘာတို့ တခြားလူတွေ ရုံးတက်ကြသည် ... လင်းတို့က ဒုတိယထပ် ... ဆရာက တတိယထပ် ... ဆရာဆိုတာက လင်းတို့ ဘော့စ်ကို ပြောတာပါ ...
မန်နေဂျာ အစ်မ မသူဇာကို နှုတ်ဆက်ရင်း ပြုံးပြလိုက်သည် ...
``အစ်မကလည်း အချင်းချင်း မြှောက်နေပြန်ပြီ ... အစ်မက ပိုလှပါတယ်နော် ... ကော်ဖီသောက်မလား လင်းလင်း ဖျော်တိုက်မယ်လေ´´
``အစ်မက ကော်ဖီ မသောက်ချင်ဘူး ... ရေခဲမုန့်ပဲ စားချင်တာ ... ဘယ်တော့မှ စားရမှာတုန်း ... စောင့်နေရတဲ့လူတွေကို အားနာပါအုံး´´
``ဟာ ... အစ်မကလည်း ... စကားပြောရင်း ဖောက်လာပြန်ပြီ ... မရှိသေးပါဘူး အစ်မရယ် ... လင်းလင်းမှ စိတ်မ၀င်စားတာ´´
``အံမယ်လေး ... လင်းလင်းကသာ စိတ်မ၀င်စားတာ ... သတင်းတွေကြားပါတယ်နော် ... လာကြိုက်သမျှလူတွေကို အကုန်ငြင်းမှတော့ ဘယ်စွံပါ့မလဲ´´
``မသိပါဘူး အစ်မရယ် ... လာပြောလူတွေကို ဒီက ရင်မှ မခုန်တာ ...´´
ကလင် ... ကလင်
``ခဏနော် အစ်မ ... ဖုန်းလာနေတယ်´´
မြတ်စွာဘုရား ... စောစောစီးစီး ... ဆ ဆရာပါလား ...
``အမိန့်ရှိပါရှင့် ... လင်းလင်းပါ ဆရာ´´
``ဟုတ် ... ဟုတ်ကဲ့ ... လုပ်ထားပါ့မယ်ရှင့်´´
``ဟုတ်ကဲ့ ... စိတ်ချပါ ဆရာ´´
ဆ ဆရာ၏ မှာကြားချက်များကို ချက်ချင်း ချရေးပြီး မသူဇာကို လှမ်းပေးလိုက်သည် ...
``အစ်မရေ ... ဆရာက ... ဒီစာရင်လေးတွေ လုပ်ပေးပါတဲ့ ... မနက်ဖြန်လိုချင်တယ်တဲ့ ...´´
``ကျေးဇူးပဲ လင်းလင်းရေ ... အစ်မတို့ ဒီလ လချုပ် အခုထဲက စလုပ်ထားရမယ် ... နောက် သုံးရက်ဆို လကုန်ပြီနော် ...´´
``ဟုတ် ... အစ်မ´´
ဟုတ်ပ ... ဒီနေ့က ၂၈ ရက် ဇန်န၀ါရီ .. အိ ... နောက် သုံးရက်နေရင် လကုန်တော့မယ် ... အလုပ်ကတော့ များပြီ ...
စာရင်းတွေ လုပ်နေရင်း ကွန်ပျူတာက ဘာဖြစ်သွားသည် မသိ … ရပ်သွားသည် … စိတ်ညစ်ပါ့ …
``လင်းလင်း … ကွန်ပျူတာ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ´´ မသူဇာက လှမ်းမေးသည်။
``မသိဘူး အစ်မ … လုပ်နေရင်း ရပ်သွားတာပဲ´´
ကွန်ပျူတာ စပယ်ရှယ်လစ် အောင်ကျော်ထက် ကို ခေါ်ရတော့မည် … အမှန်က ဒင်းက ကိုယ့်စားပွဲရှေ့မှာ ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရမှာ … အောက်ထပ်မှာ သွားပြီး ကားဒရိုင်ဘာတွေနဲ့ လေပန်းနေတယ်ထင်တယ် … ဖုန်းတစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပြီး
“မောင်လေးရေ … အစ်မ ကွန်ပျူတာ ဘာဖြစ်သွားလဲ မသိဘူး … တစ်ချက်လောက် လာကြည့်ပေးပါအုံး …”
“လာပြီ အစ်မရေ … လာပြီ”
အောက်ထပ်မှ တဒုန်းဒုန်းနဲ့ ပြေးတက်လာသည် … ဒီအလုပ်မှာ အောင်ကျော်ထက်ကိုတော့ လင်းလင်း အခင်ဆုံး … အလုပ်မှာ တခြား ယောက်ျားလေးတွေက အီစီကလီ လုပ်ချင်သည် … နည်းနည်းခိုင်းမိရင် … များများ အခွင့်အရေးယူချင်သည် … အောင်ကျော်ထက်ကတော့ ဒီလိုမဟုတ် … လင်းလင်းကို အစ်မ တစ်ယောက်လိုပဲ ပြောသည် … ဆက်ဆံသည် … သူ့မျက်လုံးတွေမှာ မရိုးသားတဲ့ အရိပ်အယောင်မရှိ … နောက်ပြောင်တတ်သည်က လွဲရင် … မိန်းကလေးတွေကို စိတ်မ၀င်စားတာ သေချာသည် … ဒီမှာ လုပ်တာ တစ်နှစ်ကျော်ပြီ … သတိထားမိတာက သူ စွဲလန်းနေတာက ကွန်ပျူတာ … အလုပ်မှာ ရှိတဲ့ လုံးလုံးကျစ်ကျစ် ကောင်မလေးတွေကို စိတ်မ၀င်စားပဲ … လေးထောင့်ပုံးကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေတာက နည်းနည်းတော့ ဂေါက်နေပြီထင်တယ် …
“ဟဲ့ ငါက ဘာဖြစ်ရမှာတုန်း … ဖြစ်တာက ဒီမှာ” ကွန်ပျူတာကို လက်ညှိုးထိုးလိုက်သည် …
“ကျွန်တော်ကလည်း အဲဒါကိုပဲ မေးတာပါ အစ်မရယ်”
“အေးဟယ် … စာရင်းတွေ ထည့်နေရင်း ရပ်သွားတာပဲ … ဒီနေ့ ရိုက်ထားသမျှတော့ ကုန်ပြီ ထင်ပါတယ်”
“အေးဆေးပေါ့ အစ်မရယ် … နှစ်ခါရိုက်တော့ ပိုမှတ်မိတာပေါ့”
“နင့်အဘ … လကုန်လို့မှ စာရင်းမပြီးရင် … နင့်ဆရာက ငါ့ကို နှစ်ခါရိုက်လိမ့်မယ်”
လင်းလင်း စားပွဲက ညာဘက်မှာ နံရံပဲရှိတော့ ဘယ်ဘက်ကပဲ အ၀င်အထွက်လုပ်လို့ရတယ် … နေရာက နည်းနည်းတော့ ကျဉ်းတယ် … သူက ဘယ်ဘက်မှာရပ်ရင်း ဘာတွေ လျှောက်ရိုက်နေမှန်းမသိဘူး … လုပ်တော့လုပ်နေတယ် … ကြားကအနေရ ခက်တာက လင်းလင်း … အနားမှာ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က ကပ်ပြီး ရပ်နေတော့ စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းတော့ တမျိုးပဲ … ရှိန်းကနဲ လိုလို ဖိန်းကနဲ လိုလို … သူကတော့ ဘာမှ မသိ … လေးထောင့်ပုံးကိုပဲ အာရုံစိုက်နေသည် …
“ရတယ် အမ … ပြီးပြီ”
ဘေးကနေ ကိုယ်ကိုကိုင်းပြီး မောက်စ်ကို တစ်ချက် လှမ်းကိုင်လိုက်တော့ သူ့လက်နဲ့ လင်းလင်းရင်ဘတ်လေးက မသိမသာလေး ပွတ်ဆွဲသွားတယ် … စိတ်ထဲမှာတော့ ထောင်းကနဲ ဒေါသထွက်သွားတယ် … ဒါပေမယ့် သူ့ကိုကြည့်တော့လည်း ကိုယ့်ကို ရှိတယ်လို့တောင် မထင် … ကွန်ပျူတာကိုသာ အသေအချာ ကြည့်ပြီး လုပ်နေသည် … နောက်ဆုံး သူ့လက်ပြန်အရုတ် ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သားလေးနဲ့ သူ့တံတောင်ဆစ်နဲ့ နည်းနည်း တိုက်မိသွားသည် … ကိုယ်ကတွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားရင်း ပေါင်နှစ်လုံးကြားက လျှို့ဝှက်နေရာလေးက စိကနဲ ညှစ်လိုက်မိသည် … သူကတော့ သိတောင်မသိ …
“အိုကေနော် အစ်မ … အားလုံးရပြီနော်”
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်သားကို တံတောင်ဆစ်နဲ့ တိုက်မိတာ သူကတော့ မသိ … ခံရတဲ့ မိန်းကလေးရင်ထဲမှာတော့ နည်းနည်းလေး ၀ုန်းဒိုင်းကျဲသွားတယ် … လင်းလင်း မျက်နှာလေး ပန်းရောင်လေး သန်းသွားသည် … ဘေးက တခြားလူတွေကတော့ သတိမထားမိ … စိတ်ထဲမှာတော့ နည်းနည်း ရှက်သွားသည် …
“ဟာ ရပါတယ် … ဒါတွေက မိုင်နာပါ”
အောင်ကျော်ထက် အောက်ထပ်ကို တဒုန်းဒုန်းနဲ့ ပြေးဆင်းသွားသည် … ဒီကောင်လေးနဲ့တော့ ခက်တော့တာပါပဲ … ပြောရင်လည်း ငါအလွန်ဖြစ်အုံးမယ် … ပြောလို့ကလည်း မဖြစ် … တမင်သက်သက် အခွင့်အရေးယူတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး … ထားလိုက်ပါတော့ …
နေ့ခင်း သုံးနာရီလောက် ကော်ဖီသောက်ချိန်ကျတော့ သူက ပြန်တတ်လာသည် … လင်းလင်းအတွက် ကော်ဖီတစ်ခွက် ဖျော်လာပေးသည် … အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုယ်က ကော်ဖီသောက်လေ့မရှိ … ဒင်းလေးက တစ်နေ့ လေးငါးခွက်သောက်သည် … သူဖျော်သည့် ကော်ဖီက အနံ့ရော အရသာပါ နည်းနည်းလေးတော့ ထူးခြားသည် … သူသောက်တော့ ကိုယ်ကလည်း နည်းနည်းတော့ သောက်ချင်သည် … သူကလည်း အလိုက်တသိနဲ့ ဖျော်ပေးရင်းက ကော်ဖီကို စွဲသွားတော့သည် … အခုလည်းကြည့် … ကော်ဖီနှစ်ခွက်ကိုင်ပြီးတက်လာသည် …
ခွက်လေးကို စားပွဲပေါ်တင်ရင်း ခုံကို နောက်ပြန်ထိုင်လိုက်သည် …
“ဟုတ်တာပေါ့ … ”
“ညနေ အလုပ်ဆင်းရင် ဘယ်သွားစရာရှိတုန်း”
“ဟုတ်လို့လား အောင်ကျော်ထက်ရယ် … ကောင်မလေးနဲ့ မချိန်းထားဘူးလား”
လင်းလင်းကို ကြည့်ပြီး ခွက်ထိုးခွက်လန် ရီရော
“ကောင်မလေး … ဟား ဟား … အစ်မက ကျွန်တော့်ကို အထင်ကြီးနေပြန်ပါပြီ … ဘယ်ကောင်မလေးမှ မရှိဘူး … အိမ်ပြန်မယ် … ရေချိုးမယ် … ထမင်းစားမယ် … အိပ်မယ်”
“ဒါဆို ညနေ အားတယ်ပေါ့”
“တစ်ခုလောက် ကူညီပါအုံး အောင်ကျော်ထက်ရယ် … ရုံးပြန်ရင် အစ်မရဲ့ laptop လေးကို ကြည့်ပေးပါအုံး”
“မသိပါဘူး … သုံးရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး … နည်းနည်းလေးနေတယ်”
“အိုကေလေ … ရုံးဆင်းရင် အတူတူပြန်ကြတာပေါ့”
ညနေ ငါးနာရီအလုပ်ဆင်းတော့ သူက အောက်မှာ စောင့်နေသည် … မိုးက အခုထိ မစဲသေး …အရမ်းမရွာပေမယ့် … မိုးစက်လေးတွေ ကျနေတုန်း … ထီးလေးဖွင့်လိုက်ပြီး သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူက ထီးပါတဲ့ ပုံစံမပေါ် …
“အစ်မရေ … မိုးကတော့ တောက်တောက် တောက်တောက်နဲ့ ရွာနေုတုန်းပဲ”
“ဟုတ်ပဟယ် … ပြန်ပြီဆို ရွာပြီ …ကောင်လေး ထီးမယူလာဘူးလား”
“ဟီး မနက်က မေ့ကျန်ခဲ့တယ် … အစ်မထီးကိုပဲ ကပ်ဆောင်းတော့မယ်”
သေဟ … လင်းလင်းရေ … ကိုယ်ရေးတဲ့ ဇာတ်ကိုယ်နိုင်အောင် ကပေတော့ … ကိုယ်က သူ့ကို အကူအညီတောင်းထားတော့လည်း ပေးမဆောင်းလို့က မကောင်း … မတတ်နိုင် … အတူတူဆောင်းရတာပေါ့ … ရှက်စရာကြီး … သူ့ကို မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီး …
“ကိုယ်တော်ကတော့ လုပ်ပြီ … မိုးနေ့တိုင်းရွာနေတာ ဘာလို့ထီးမယူလာတာတုန်း”
“ဟိုလေ … မနက်က အိပ်ယာထနောက်ကျတော့ ၀ုန်းဒိုင်းကျဲပြီး ထွက်လာတာ … လမ်းတစ်ဝက်ကျမှ ထီးကျန်ခဲ့မှန်း သတိရတော့တယ်”
ဟင်း ဖြစ်ရမယ် … အံမယ် … လင်းလင်းလဲ ဘာထူးလဲ … အလုပ်နဲ့ အိမ်နဲ့က နီးလို့ … နို့မို့ဆို သူ့ထက်ဆိုးမှာ … မိုးလေးဖွဲဖွဲလေးထဲမှာ … ထီးတစ်ချောင်းနဲ့ နှစ်ယောက်အတူဆောင်းပြီး အလုပ်ပြန်သွားတာကို အလုပ်ကလူတွေက သတိထားမိကြတယ် … မနက်ဖြန်ကျရင်တော့ ဘာတွေ အတင်းပြောကြမလဲ မသိ … မတတ်နိုင် … အိုး … ကိုယ်က ရိုးသားရင်ပြီးတာပါပဲ …
သူကတော့ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့အောင် ပြောပြီး အတူတူလျှောက်လာပေမယ့် … လင်းလင်း စိတ်ထဲမှာတော့ တစ်မျိုးလေး ကြည်နူးနေပါတယ် … တကယ်ပါ ဘုရားစူးပါစေ … ဘယ်တုန်းကမှ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ ထီးအတူတူဆောင်းပြီး မိုးရွာထဲ မလျှောက်ဘူးပါဘူး … ထီးအတူတူဆောင်းလာတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့အသားနဲ့ ကိုယ့်အသားက နည်းနည်းတော့ ထိမိတာပါပဲ … ထိမိလိုက်တိုင်း ရင်ထဲမှာ ဖိန်းကနဲ ရှိန်းကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားသည် … ခပ်ခွာခွာက လျှောက်လို့ လည်း မပြောရက် … ဘာလို့မှန်းမသိ … ကျေနပ်နေသည် … တခြားအချိန်တွေဆို … ကိုယ့်အသားလာထိရင် လုံးဝမကြိုက် … ဒေါသက ထောင်းခနဲ ထွက်လာတတ်သည် … မိုးက ရွာနေရင်းက ပိုသည်းလာသည် … မိုးစိုမှာစိုးလို့ နှစ်ယောက်သား ပိုပြီး ပူးကပ်သွားသည် … သိတဲ့အတိုင်း ရန်ကုန်မိုးက … ရွာရင် တဝေါဝေါနှင့် လေပါ တိုက်သည် … လမ်းကဖြေးဖြေးပဲ လျှောက်နေရသည် … ခြော်လဲမှာလည်း စိုးသည် … လေက အရမ်းတိုက်လာတော့ ထီးကို ကိုင်ရတာ အဆင်မပြေ … တစ်ဖက်က ထီးကိုင်ရင်း တစ်ဖက်က ခြင်းတောင်းလေးကိုင်ရတော့ သိပ်အဆင်မပြေ … ဘယ်လက်နဲ့ ထီးကိုင်ထားတော့ သိပ်တော့ အားမပါ … လေတိုက်လျှင် လန်သွားနိုင်သည် … တွေးနေတုန်းပဲ ဇတ်ကနဲ ထီးကလန်သွားတော့ … သူက ထီးကို ကမန်းကတန်း ဖမ်းကိုင်လိုက်သည် … သူ ဖမ်းကိုင်လိုက်တာက ထီးကိုင်ထားတဲ့ လင်းလင်းလက်ကို … အိုး … ဒိန်းကနဲ ရင်တွေခုန်သွားသည် … တစ်ခါမှ ဒီလို အကိုင်မခံရဖူးတော့ … ဆန့်ကျင်ဘက် အတွေ့အထိကြောင့် ကြက်သီးလေးများ ထသွားသည် … စိတ်ထဲမှာလည်း မနေတတ်ဖြစ်သွားသည် … ပြောလည်းမပြောရဲ … ရှက်နေမိသည် … မျက်နှာနှစ်ခု အတော့်ကို နီးကပ်နေတော့ … သူ့အသက်ရှုသံကိုတောင် ကြားရသည် … ကိုယ်တောင် ပြောင်းဆန်နေရင် သူ့ရင်ထဲမှာကော ဘာဖြစ်နေမလဲ … သတိထားနေရင်းကြားမှ လင်းလင်း ခြေချော်ပြီး နောက်ကို ပက်လက်လန်တော့မလို ဖြစ်သွားသည် ...
အောင်ကျော်ထက် ထိတ်ထိတ်ပြာပြာဖြစ်သွားပြီး နောက်ကနေ ခါးကို အမြန် လှမ်းဖက်ပြီး ထိန်းပေးလိုက်သည် … အင့် … တင်းရင်းနေတဲ့ တင်သားတွေအပေါ်ကနေ လင်းလင်းရဲ့ ခါးသေးလေးကို လှမ်းဖက်လိုက်တော့ … အိုး … လင်းလင်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အိအိလေးဟာ တင်းကနဲ ဖြစ်သွားသည် … ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ … ရှက်သွေးဖျန်းနေတဲ့ မျက်နှာလေးက နီရဲတွတ်နေသည် …တင်းတင်းလေး ဖက်ထားတော့ လင်းလင်းတစ်ကိုယ်လုံး သူ့ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေသည် … ရင်ခုန်သံတွေက တအားမြန်လာသည် … သူရော … ဟုတ်ပ … သူ့ရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ တဒိန်းဒိန်းကို ကြားနေရသည် …
“ဟင့် … အင်း”
ဘာကြောင့်မှန်းမသိ … သူ့လက်တွေကို တွန်းဖယ်ဖို့ အားမရှိ … သူ့လက်ကို ဖယ်ခိုင်းဖို့ နှုတ်ခမ်းတွေက ဆွံ့အနေသည် … ဒီလို မိုးသည်းထဲမှာ စကားတစ်လုံးမှ မပြောဖြစ်ပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ စကားလုံးတွေ ထောင်ပေါင်းများစွာ ပြောနေကြတယ် … ကြင်နာစွာ စိုးရိမ်စွာ ကြည့်နေမိတဲ့ … သူ့မျက်လုံးအကြည့်ကနေ ဘာတွေ ပြောချင်လဲဆိုတာ လင်း သိတယ် … လင်းရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကလည်း အရည်တွေလဲ့နေပြီး သူ့ကို လင်းရင်ထဲက ဆန္ဒတွေကို ပြနေမိတယ် … လင်းတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကို တစ်ယောက် သိသွားပြီ … အော် အချစ်ဆိုတာ ဒါပါလား …
“လက်ကြီးက ဖယ်ပါအုံးကွာ” လင်းလင်း အသံလေးက တိုးတိုးလေး …
သူ့လက်ကို ရုတ်လိုက်ပြီး ထိတ်ထိတ်ပြာပြာနဲ့ …
“ဟာ … ဆောရီး … မ … မကို အသားယူချင်လို့ ကိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော် … မ … ချော်လဲမှာ စိုးလို့ လှမ်းကိုင်လိုက်တာပါ”
ဘာတွေလာပြီး ဖြေရှင်းချက်ပေးနေတာလဲ … မျက်စောင်လေးတစ်ချက်ထိုးရင်း …
သူ့ရဲ့ကိုယ်နံ့က လင်းလင်းကိုယ်ပေါ်မှာ စွဲနေပြီ … ယောက်ျားလေးပေမယ့် … ချွေးစော်မနံ … ကြည့်ရတာ Roll On သုံးတယ်ထင်ပါတယ် … အနံ့လေးတမျိုးလေးပဲ … လူပျိုနံ့ … ရင်ခုန်သံတွေက မီးရထားကြီးခုတ်မောင်းသွားသလို တဒိန်းဒိန်းနဲ့ အကျယ်ကြီးကြားနေတယ် … အို … ရှက်စရာကြီး … သူ များကြားသွားမလား …
“မ စိတ်ဆိုးသွားလား … စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် … မ ထင်နေသလို ကျွန်တော်က အခွင့်အရေးယူတာ မဟုတ်ပါဘူး”
စိတ်မဆိုးပေမယ့် … စကားပြန်မပြောမိ … ရင်ခုန်သံတွေက ဆူညံနေတုန်းပဲ … ဒါကို သူက မသိ … သူ့ကို စိတ်ဆိုးသွားပြီ လို့ ထင်နေတယ် … သနားစရာ မျက်လုံးလေးနဲ့ တောင်းပန်နေရှာတယ်
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နားရောက်တော့ စိတ်က နည်းနည်း ထင့်သွားသည် … မနက်က အီစီကလီလာလုပ်တဲ့ ကောင်လေးက လင်းလင်းကို စိုက်ကြည့်နေရင်းက ဘေးမှာပါလာတဲ့ အောင်ကျော်ထက်ကိုလည်း မြင်ရော … ဘုကြည့်ကြည့်နေသည် … သူကတော့ ဘာမှ မသိ … ဘေးကနေ တတွတ်တွတ်နဲ့ တောင်းပန်စကားတွေ ပြောနေသည် … တော်ပါသေးသည် … ဟိုအကောင်က နောက်ကနေ လိုက်မလာ … ဒီလိုနဲ့ တိုက်ရှေ့ရောက်တော့ လှေခါးတံခါးသော့ ဖွင့်ဖို့ လက်ကိုင်အိတ်ထဲက သော့ကို လှမ်းထုတ်လိုက်တော့ …
“ပေး ပေး အစ်မ ကျွန်တော် ဖွင့်လိုက်မယ်”
သူက သော့ဖွင့်ပေးပြီး လင်းလင်းက အရင်ဝင်လိုက်သည် … ဒီကောင်လေးက အဲဒါမျိုးလေးတွေ အလိုက်သိသည် … သော့ပြန်ခတ်ပြီး ပြန်ပေးတော့ လက်ချင်းထိသွားသည် … သူကတော့ ဘာရယ် မဟုတ် … ကိုယ်က ခုနက ရှိုးတိုးရှန်းတန်း အဖြစ်အပျက်လေး ပြန်ပေါ်လာသည် … သော့ကို အိတ်ထဲ ပြန်ထည့်ရင်း … လှေခါးကို တက်လိုက်သည် … လေးငါးထစ် တက်ပြီးတော့မှ သတိရလိုက်သည် … လှေခါးကို ငါက အရင်တက်တော့ ငါ့အနောက်ပိုင်းကို သူကြည့်နေမှာပေါ့ … ရင်ထဲမှာ ရှက်သွားသည် … လှည့်လဲ မကြည့်ရဲ … လှေခါးထစ်ကို တက်တိုင်း အရမ်းလှတဲ့ လင်းလင်းရဲ့ တင်သားတွေက ငြိမ့်ကနဲ ငြိမ့်ကနဲ ရမ်းခါသွားသည် … လှေခါးတက်သည့်အခါ ကိုယ်သည် အနည်းငယ် ရှေ့သို့ကိုင်းလေ့ရှိသဖြင့် အနောက်ကို ဖင်အနည်းငယ် ကုန်းထားသည့်သဘောပင် … နောက်ပြီး မိုးရေ ရွှဲရွှဲစိုထားသဖြင့် စကဒ်သည် အသားနှင့် တသားတည်းထိကပ်နေသည် … အောက်ခံ ပင်တီလေးရဲ့ ချုပ်ရိုးလေးတွေက တင်သားတွေကို အနားသတ်ပေးထားတာကို မြင်နေရသည် … စဥ့်အိုးသဏ္ဍန် လုံးဝန်းသော လင်းလင်းတင်သားများသည် အောင်ကျော်ထက် မျက်နှာရှေ့တွင် ထင်ထင်ရှားရှား လှုပ်ရှားနေသည် … အပျိုစစ်စစ် ဖြစ်သည့်အတွက် တင်သားများသည် လုံးကျစ်နေပြီး လှေခါးတက်သည့်အခါ အနောက်မှ ကြည့်သူအဖို့ အတော်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းနေပေသည် … အောင်ကျော်ထက်သည်ကား လူသားတစ်ဦးပေတည်း … ကိုယ့်မျက်နှာရှေ့တည့်တည့်မှာ လှုပ်ခါနေသော တင်သားလှလှ အိအိလေးကို ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှာ ထွေပြားသွားသည် … မထွေပြားပဲ ခံနိုင်ရိုးလား … ဒီလောက်လှသော လင်းလင်း၏ တင်သားတင်းတင်း၏ လှုပ်ရှားမှုများကို နှစ်ပေအကွာက မြင်နေရတာကိုး … ညဘာက်ခြေက အပေါ်လှမ်းလိုက်ရင် တင်သားလေးက ညာဘက်ကို မသိမသာလေး လှုပ်ခါသွားသည် … ဘယ်ဘက်ခြေက အပေါ်တစ်ထစ်ကို လှမ်းလိုက်ရင် အိုးလေးက ဘယ်ဘက်ကို လှုပ်ခါသွားသည် … စကဒ်ကလည်း ကွက်တိချုပ်ထားလို့ ကောက်ညှင်းထုပ်လေးလို ဖြစ်နေသည် … ခုနက ကိုယ်လုံးအိအိလေးကို ဖက်ခဲ့တဲ့ အရှိန်လေးကမသေသေးချိန်မှာ အခုလို လင်းလင်းရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှကို အနီးကပ်တွေ့လိုက်ရလို့ … အောင်ကျော်ထက် မခံနိုင် … ရင်ထဲမှာ ဗြောင်းဆန်နေသည် … ရင်ထဲတွင် မကို ပိုင်ဆိုင်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာသည် … လှေခါးအကွေ့ရောက်တော့ လင်းလင်းထိန်းလျှောက်ပေမယ့် … မရ … တင်သားတွေက သိသိသာသာကို လှုပ်ခါသွားသည် … တွေးပြီး … လင်းလင်းမျက်နှာလေး နီရဲသွားသည် … လင်းလင်း မသိမသာ အောင်ကျော်ထက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ … ဒီကောင်လေးမျက်နှာက နီရဲနေသည် … မျက်လုံးတွေကလည်း အရောင်လက်နေသည် … ဟယ် … ဒါဆို … ဒါဆို … ဒင်း ငါ့အနောက်ပိုင်း အသေအချာကြည့်ပြီး စိတ်ကစားနေပြီနဲ့ တူတယ် … ငါ့နှယ်နော် … ရှက်လွန်းလို့ သေသာသေလိုက်ချင်တယ် … နောက် နှစ်ထစ် တပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ … အောင်ကျော်ထက်ရဲ့ မျက်လုံးတွေက လုံးဝ မခွာတော့ဘူး … ရှက်လွန်းလို့ သေလိုက်ချင်ပေမယ့် … စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်သလိုလို … ဘာလိုလိုနဲ့ … သတိထားပြီး တက်တော့ … ဖင်ကို ရှုံ့ထားသလို ဖြစ်ပြီး လင်းလင်း ရှေ့ပစ္စည်းလေးက အထဲမှာ ဆွဲ ဆွဲ ညှစ်နေမိတယ် … ခက်နေတာက … အတွင်းက ပင်တီလေးက လိမ်ပြီး လျှို့ဝှက်နေရာလေးက နှုတ်ခမ်းသားလေးနှုတ်ခုကြားမှာ ရောက်နေတော့ … ဆွဲ ဆွဲ ညှစ်လိုက်တိုင်း … အတွင်းသားတွေကို ကြိုးလေးနဲ့ ပွတ်ဆွဲသလို ဖြစ်နေသည် … ဆွဲညှစ်လေ … ဖီလင်တက်လေ … အသံကလည်း မထွက်ရဲ … လှေခါးတစ်ထစ်တက်တိုင်း နောက်က ချာတိတ်ကို ရှက်တာတမျိုး … ပေါင်ကြားထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးအမည်မသိ ဝေဒနာက တမျိုး … ရှက်ရွံ့စိတ်နဲ့ ရမက်နှိုးဆွသလို ဖြစ်ပြီး ရင်ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ခုကို တမ်းတလာသည် … လင်းလင်း မျက်နှာတွေလည်း ပူထူနေပြီ … အပျိုဆိုတော့လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာဖြစ်မှန်းမသိ … ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းလေးခိုးချရင်း အခန်းဝသို့ ရောက်သွားသည် …
တီ … တောင်
လူခေါ်ဘဲလ်လေးကို နှိပ်လိုက်ပြီးနောက် အခန်းတံခါးကို မိနှင်း လာဖွင့်ပေးသည် … မိနှင်းအကြည့်က လင်းလင်းကို ကျော်၍ အောင်ကျော်ထက်ကို ကြည့်နေသည် … လင်းလင်း သိတာပေါ့ … ဒီအိမ်ကို လင်းလင်း ဘယ်ယောက်ျားလေးမှ ခေါ်ဖူးတာ မဟုတ် … အောင်ကျော်ထက်ကိုကျတော့ မောင်လေးတစ်ယောက်လို ခင်မင်မိတာရယ် … သူက ဘယ်တုန်းကမှ အခွင့်အရေးမယူဖူးတာရယ်ကြောင့် အိမ်ကို စိတ်ချလက်ချ ခေါ်လာမိတာပါ … အခုတော့ တစ်လမ်းလုံး ရင်ခုန်စရာတွေချည်းဖြစ်လာလို့ … အလိုလို ရင်တွေ တုန်နေမိသည် … မိနှင်းအကြည့်က ဘာဆိုတာ သိသည် … ကလေးမုန့်ခိုးစားသည်ကို လူမိသွားသလိုမျိုး စိတ်ထဲမှာ စိုးရိမ်သွားသည် … မေမေတို့ကို ပြန်တိုင်ပြောရင် ဒုက္ခ … မသိချင်ယောင် ဟန်ဆောင်ပြီး … မရှင်းပြတော့ … လက်ထဲမှ ဆွဲခြင်းလေးကို လှမ်းပေးလိုက်ရင်း …
“မိနှင်း … ဧည့်သည်ပါလာတယ် … မိုးရေတွေစိုနေလို့ ကော်ဖီပူပူလေး ဖျော်လိုက်နော် …”
လင်းလင်းတို့ ဧည့်ခန်းလေးက ရှင်းရှင်လေး … ဆိုဖာငါးလုံးရှိသည် … အလယ်တွင် မှန် စားပွဲတစ်လုံးရှိသည် … ထောင့်တွင် ဖုန်းတင်ထားသော ခုံသေးသေး တစ်ခုရှိသည် … တီဗီ ကြီးကြီး တစ်လုံးကိုလည်း တွေ့ရသည် … ၀င်ပေါက်ဘေးတွင် ဖိနပ်စင်လေးရှိသည် … ဧည့်ခန်းထဲမှ ကြည့်လျှင် အထဲမှ အခန်းများကို အလွယ်တကူမမြင်နိုင်အောင် လိုက်ကာလေးနှင့် ကာထားသည် … လိုက်ကာလေးကို ဆွဲမလိုက်ပြီး …
သူက ကိုယ့်ကို ကြောင်ကြည့်နေသည် … အော် … ခက်တော့တာပဲ …
“ဒီလောက် စိုရွှဲနေတာ အကျီ င်္လေးဘာလေး လဲမှပေါ့”
လင်းလင်းရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်လာသည် … တံခါးကိုတော့ တမင်သက်သက် ဖွင့်ထားလိုက်သည် … အောင်ကျော်ထက် အခန်းလေးကို ဝေ့ကြည့်လိုက်ရင်း … သဘောကျသွားသည် … အပျိုတစ်ဦးနေတဲ့ အခန်းမို့ … အရာရာက သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်နေသည် … အိပ်ယာလှလှလေးပေါ်မှာ … အရုပ်လေးတွေက အစီအရီ … ခုတင်ဘေးက စားပွဲ ပေါ်မှာ Laptop တစ်လုံး … စင်လေးပေါ်မှာ သီချင်းခွေတွေ အစီအရီ… အခန်းထဲက အနံ့လေးက မ ကိုယ်ပေါ်က အနံ့လေးနဲ့ တူတယ် … သင်းသင်းလေးနဲ့ မွှေးတယ် … အပျို့နံ့ ထင်ပါရဲ့ … အိပ်ယာပေါ်မှာ အ၀ါရောင် Pooh ဖက်ခေါင်းအုံးလေးနှင့် … စောင်လေးကို ခြေရင်းမှာ သေချာခေါက်ထားသည် … မကို ဖက်ပြီး ဒီ အိပ်ယာပေါ်မှာအိပ်လိုက်ရရင်တော့ … စိတ်ကူးနဲ့ .. ပြုံးလိုက်မိသည် …
လင်းလင်းက မျက်နှာသုတ်ပ၀ါလေး ကမ်းပေးရင်း … အိပ်ခန်းထဲက ရေချိုးခန်းကို ဖွင့်ပေးလိုက်သည် …
“ရေချိုးထားနှင့်နော် … ဖေဖေ့အကျီ င်္ သွားယူလိုက်အုံးမယ်”
လှည့်ထွက်သွားတဲ့ လင်းလင်းရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှကို ငေးကြည့်မိပြီး မရဲ့ လုံးကျစ်တဲ့တင်သားတွေကို စိတ်ကစားနေမိသည် … မ လမ်းလျှောက်တာ အရမ်းလှသည် … တင်သားလေးတွေက လှုပ်တယ်ဆိုရုံလေးသာ လှုပ်သည် … စိတ်ထဲမှာ မရဲ့ တင်သားတွေကို ဆုပ်နယ်ချင်နေမိသည် … ၀ှီး … အောင်ကျော်ထက် ရေချိုးခန်းထဲသို့ ၀င်လိုက်သည် … လင်းလင်း ဖေဖေ့အခန်းထဲက အကျီ င်္ တစ်စုံ သွားယူလိုက်သည် … ခုနက အဖြစ်အပျက်လေးက အတွေးထဲ ရောက်လာတော့ စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးသွားသည် … အရမ်းလှတဲ့ မ နဲ့ မိုးရွာထဲမှာ ထီးတစ်ချောင်းနဲ့ အတူတူ လျှောက်ခွင့်ရတာ နည်းတဲ့ အခွင့်အရေးလား … ထီးလန်တော့ မလိုဖြစ်တုန်းက ထီးကိုင်ထားတဲ့ လက်ကို ဖမ်းကိုင်လိုက်တော့ သူ့ရင်ထဲမှာလဲ ရှိန်းကနဲ ဖိန်းကနဲ ဖြစ်သွားသည် … အခုမှ မဟုတ် … ဟိုးအရင်ကတည်းက မ နားရောက်ရင် … မရဲ့ ကိုယ်နံ့ သင်းသင်းလေးနဲ့ မတော်တဆ အသားချင်းထိမိသွားရင် ရှိန်းကနဲ ဖိန်းကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားဖူးသည် … ဆန့်ကျင်ဘက် အထိအတွေ့တွေကြောင့် သာယာမိတာတော့ အမှန် … ဒါပေမယ့် … ဒီထက်ပိုပြီး အခွင့်အရေးမယူရဲ … တော်ကြာ ရထားတဲ့ အခွင့်အရေးလေးတောင် ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ် … ခုနက မ ချော်လဲမှာ စိုးလို့ ခါးကို လှမ်းဖက်လိုက်တာ … မ စိတ်ဆိုးသွားလားမသိဘူး … မ ရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို တစ်သက်လုံး ဖက်ထားချင်တယ်ဗျာ … အတွေးတွေနဲ့ ဖီလင်ကတက်လာတော့ … အောက်က အင်္ဂါလေးက ထောင်မတ်လာသည် … ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း အံ့သြမိသည် … လူပျိုဖြစ်လာပေမယ့် တစ်ခါမှ ဒီလို တင်းပြီး ထောင်နေအောင် မဖြစ်ဘူး … မ အကြောင်းတွေးလိုက်မှ ထောင်မတ်လာလိုက်တာ … တောင့်တင်းနေတာပဲ … မ ရဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ အိုးလေးကို မျက်စိထဲကကို မထွက်တော့ဘူး … မဖြစ်သေးပါဘူး … စိတ်လျှော့ … Laptop လည်းပြင်ပေးရအုံးမယ် … ရေပန်းက ကျလာတဲ့ရေတွေကို ပိုဖွင့်လိုက်တော့မှ … ရင်ထဲက အပူ တဖြေးဖြေးကျသွားသည် …
မီးခဲကို ပြာအုပ်သလို ခဏတာသာ ဖြစ်သည် … ကျန်းမာသန်စွမ်းသော လူပျိုလေးတစ်ယောက်က ဒီလိုရေအကြာကြီးချိုးလိုက်ခြင်းသည် … နောက်တစ်ခါ ထကြွလာမယ့် ဆန္ဒကို ပိုပြီး စုထားလိုက်သည်နှင့်တူပါသည် … ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော … အောင်ကျော်ထက်၏ ရင်ထဲတွင် လင်းလင်းနှင့် နေရသည်ကို သာယာသွားသည် … နှလုံးသား၏ နေရာတိုင်းကိုလည်း လင်းလင်းဆိုသော … မိန်းမချော … မမလှလှလေးက အပိုင်စီးသွားပြီ … မ ကို ချစ်ချင်သည် … မ ကို နမ်းချင်သည် … မ ကို ထွေးပွေ့ထားချင်သည် … မ ကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်လိုက်ချင်သည် … နောက် … မ ရဲ့ အလှတရားကို မျက်စိနှင့် တပ်အပ်မြင်ချင်လာသည် … လင်းလင်းသည် အောင်ကျော်ထက်၏ နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်နေပြီလား …
ထို အချိန်တွင် လင်းလင်းက ရေချိုးခန်း တံခါးကို သုံးချက်ခေါက်ပြီး …
“ချာတိတ်ရေ … အ၀တ်တွေ ရေချိုးခန်းရှေ့မှာ ထားထားတယ်နော် … မြန်မြန်လည်းချိုးအုံး … အအေးမိအုံးမယ်”
ဇတ်ကနဲ လန့်တောင်သွားသည် … မ များ သိသွားပြီလား … မဖြစ်နိုင်ပါဘူး … အခန်းက ဒီလောက်လုံနေတာ …
“ဟုတ် … မရေ”
အတွေးထဲမှာလည်း … မ က ငါ့ကို တော်တော် ဂရုစိုက်ပါလား … ကြင်နာပါလား … စိတ်ကူးထဲမှာ ကြည်နူးခြင်း၊ … ချစ်ခြင်းများနဲ့ ပြုံးနေမိသည် … ဟိုက် … အောက်က ညီလေးက ပြန်ထောင်လာသည် … ကွိုင်ပဲ … မ အသံကြားသည်နှင့် ပြန်ထောင်လာသည် … ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ မသိ … ရေပန်းကို ဂိတ်ဆုံးဖွင့်လိုက်သည် … သို့သော် … ဒီကောင်က လည်သွားပြီ … ရေအေးလောက်နှင့်တော့ ပြန်ပြီး မသေးသွားတော့ … အောင်ကျော်ထက်မသိသည်က … ရေပန်းက ရေစက်လေးတွေက အရှိန်နဲ့ လိင်တံကို လာပြီး ဆွနေသလိုဖြစ်သည် … ရေစက်လေးများနှင့် ညီလေးရဲ့ အရေပြားတွေ ထိတိုင်း ထိတိုင်း … ဖျင်းကနဲ ဖျင်းကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားပါသည် … လူပျိုတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ကို မီးဟုန်းဟုန်းတောက်စေသော ထိုနှိုးဆွမှုကို … အောင်ကျော်ထက်မခံနိုင်တော့ … လက်နဲ့ကိုင်ပြီး ပေါင်ကြားထဲကို ချိုးချလိုက်သည် … အကြံက ချိုးချလိုက်လျှင် ကွေးပြီး ကျုံ့သွားမည်ဟု ထင်နေသည် … ဘဘာဝတရားက ဒီလိုမဟုတ် … ထိုလို့ အောက်ကို ချိုးချခြင်းသည် … တင်းနေသော အကြောကို အစွမ်းကုန် ပိုတင်းစေပါသည် … ပြဿနာပဲ ...
အောင်ကျော်ထက် ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ ကိုယ် ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ … အပြင်က လင်းလင်းကလည်း … ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း အံ့သြမိသည် … ဘာလို့များ စေတာနာတွေ ပိုနေရတာလဲ … ဘာလို့များ စိုးရိမ်နေရတာလဲ … သူများကိုသာ ပြောနေသည် … လင်းလင်း တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ရွှဲရွှဲစိုနေသည် … ရေမြန်မြန်ချိုးမှ … ဖေဖေတို့ အခန်းထဲက ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်လိုက်ပြီး အကျီ င်္တွေ ချွတ်လိုက်သည် … ၀င်းဝါနေတဲ့ရင်သားလေးက ဘယာစီအောက်မှာ ရုန်းထနေသည် … လက်နောက်ပြန်နဲ့ ဘယာစီယာရဲ့ ချိတ်ကို ချွတ်ချလိုက်တာနဲ့ … အိနေတဲ့ ရင်သားလေး နှစ်လုံးက တုံကနဲ ရှေ့သို့ထွက်လာသည် … နေ့ခင်းက သူ့လက်နဲ့ ပွတ်ဆွဲသွားတာ ဒီနေရာပေါ့ … အတွေးက စိတ်ကူးရင်း … လက်က ရင်သားနှစ်ခုကို ပွတ်ဆွဲလိုက်မိသည် …. ဆတ်ကနဲ ကိုယ်က တွန့်သွားပြီး … ပါးစပ်ကလည်း … အဟင့် ဆိုပြီး ထွက်သွားသည် … တစ်ကိုယ်လုံး တုန်သွားသဖြင့် … လင်းလင်းရဲ့ ရင်သားလေး နှစ်ခုဟာလည်း အိအိလေးနဲ့ လှုပ်ရှားသွားသည် … ဟာ … ငါ ဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲ … စကဒ်ကို ချွတ်ဖို့ ဇဒ်ကို ဆွဲချလိုက်တော့ စကဒ်က အသားမှာ ကပ်နေသည် … ရေတွေ စိုနေသဖြင့် နည်းနည်း အားယူကာ ချွတ်ချလိုက်သည် … စကဒ်ချွတ်နေတုန်း … ဖင်ကို နည်းနည်းကုန်းလိုက်သည် … ဒါမှ အဆင်ပြေမှာကိုး … ဟာ … ခုနက လှေခါးမှာ ငါ့ဖင်ကို ဒင်း တ၀ကြီး ကြည့်သွားခဲ့တာပဲ … ပင်တီလေးက … နှုတ်ခမ်းသားလေးနှုတ်ခုကြားမှာ ညပ်နေသည် … ကိုယ့်ဟာကိုယ် ငုံ့ကြည့်ပြီး ရှက်သွေးဖျာသွားသည် … ကြည့်မိနေတုန်း … ဖင်လေးက စီကနဲ ဆွဲညှစ်မိတော့ … ရှေ့က ပန်းလေးက ပင်တီစလေးကို ညှစ်တာကို တအံ့တသြ ကြည့်နေမိသည် … ဘာတွေလဲ … ပင်တီကို ချွတ်လိုက်တော့ … လင်းလင်းရဲ့ ပေါင်သွယ်လှလှ လေးအတိုင်း အလိပ်လိုက် လိမ့်ပြီး ကြမ်းပြင်ကို ကျသွားသည် … ပေါင်ကြားထဲကို လက်နဲ့ စမ်းကြည့်တော့ ချွဲကျိကျိ အရည်လေးတွေ … ဟာ … တစ်ယောက်ထဲ အရမ်းရှက်နေမိသည် … အသက်သာ ၂၈ ကျော်လာတယ် … တစ်ခါမှ ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဖူး … ဒီနေ့ကျမှ ရင်တွေက တဒုန်းဒုန်းနဲ့ … စိတ်ထဲမှာလည်း ရိုးတိုးရွတ ဖြစ်နေမိသည် … ဒီအကြောင်း သူများသိသွားမှာလည်း ကြောက်နေသည် … အထူးသဖြင့် ချာတိတ်သိသွားမှာ စိုးသည် … အိုး … သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး … ဆပ်ပြာရည်ကို လက်ဖ၀ါးထဲထည့်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖေါ့အပါးလေးနှင့် ဂျီးလိုက်တွန်းသည် … ရင်သားလေးနှစ်ခုကိုတော့ ဖေါ့နှင့်မတိုက် … အသားလေးက နုနုလေး … သွေးထွက်သွားလိမ့်မည် … လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အောက်နေပင့်ပြီး ပွတ်သပ်လိုက်သည် … လင်းလင်း စိတ်ထဲမှာတော့ ခုနက အဖြစ်အပျက်လေးတွေ အစီအရီ ပေါ်လာသည် … ပြည့်ဖြိုးနေတဲ့ ရင်သားတွေက လင်းလင်းရဲ့ သွယ်လျတဲ့ လက်ကလေးနှင့်တောင် မဆန့်ချင် … လင်းလင်းရင်သားတွေက တခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ မတူ … လုံးစက်နေသည် … အပျိုဆိုတော့ တင်းပြီး တွဲကျခြင်းမရှိ … နောက် နို့သီးလေးတွေက သေးသေးလေးတွေ … တခြားလူတွေလို မည်းမနေ … ပန်းရောင်လေး … နို့သီးလေးတွေက ရင်သားပေါ်မှာ တင်တယ်ဆိုရုံလေး တင်ထားသည့် သဏ္ဍန် … ရင်သားလေးကို အောက်နေလက်နှင့် ပင့်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လက်မနဲ့ လက်ညှိုးနဲ့ ဖိပြီး ဂျီးတွန်းလိုက်သည် … ဒီနေ့မှ ဘာဖြစ်သည်မသိ … နှုတ်ခမ်းလေးမှ … ဟင့် ကနဲ အသံထွက်သွားပြီး … ပေါင်ကြားက ဇိကနဲ ဆွဲညှစ်သွားသည် … ဖင်လေးသည် နောက်သို့ အနည်းငယ် ကောက်သွားပြီး ခါးသည် အရှေ့သို့ ကိုင်းသွားသည် … ထိုသို့ ဖြစ်သွားသည်ကို လင်းလင်း သေသေချာချာသိသည် … ရင်သားတစ်ခုလုံးကို အုပ်ပြီး သေချာ ဆေးကြောလိုက်သည် … အို … ချာတိတ်က ငါ့ရဲ့နို့တွေကို ဒီလိုမျိုးနောက်ကနေ ကိုင်လိုက်ရင်ဖြင့် … အိုး … ရှက်စရာကြီး … လင်းလင်း စိတ်တွေက ချာတိတ်ကိုပဲ တမ်းတနေမိသည် … ဆပ်ပြာတိုက်ရင်း အနောက်က တင်သားတွေကိုပါ သေချာပွတ်သည် … လင်းလင်းရဲ့ အနောက်ပိုင်းက တခြားကောင်မလေးတွေထက် ပိုပြီး ဖွံ့သည် … အခုခေတ်ကောင်မလေးတွေက … တင်မရှိ … ရင်မရှိ … ၀ါးခြမ်းပြားလေး ပုံစံများသည် … လင်းလင်းက ဒီလို မဟုတ် … တင်သားနှစ်ခုသည် အနောက်ကို သိသိသာသာ လုံးထွက်နေသည် … ¬ဒါ့ကြောင့်လည်း လမ်းသွားလျှင် ယောက်ျားတွေက လင်းလင်းနောက်ပိုင်း အလှကို အရသာခံပြီး ကြည့်ကြခြင်းဖြစ်သည် … ကြည့်မိလျှင်လည်း မျက်စိက မလွှဲတော့ … နှာဘူးတွေ … ဟိုချာတိတ်လည်း နှာဘူးပါပဲ … ဟယ် … မဟုတ်ပါဘူး … ငါက လှေခါးကို အရင်တတ်မိတာကိုး … သူအရင်တက်ရင် ဒါမျိုး ဘယ်ဖြစ်မှာလဲ … ချစ်တော့ အပြစ်မမြင်ဆိုတာ ဒါမျိုးပါပဲ …
လက်က တင်သားနှစ်ခုကို ပွတ်သပ်နေရင်းက တင်သားနှစ်ခုကြားကိုလည်း ရောက်သွားသည် … ဒီနေရာကိုတော့ လက်က သိပ်မမှီချင် …ဘယ်မှီမလဲ … သူများတွေလို ပြားချပ်မနေတော့ စွံ့ကားနေတဲ့ တင်သားတွေက တောင်တန်းကြီးတွေလို ဖြစ်နေသည် … ဖင်ကြားလေးက လျှိုမြောင်လေးပေါ့ … ဒီတင်သားတွေပေါ့ … ချာတိတ်က နောက်ကနေ အားရပါးရ ကြည့်နေမှာပဲ … ဟွန်း … လူဆိုး … မိန်းမတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ အလှအပအောက်မှာ ယောက်ျားတစ်ယောက် နစ်မြောနေတာကို ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေနပ်သည် … ကိုယ်ချစ်တဲ့ လူဆိုတော့ ပိုဆိုးသည် … ပိုလို့ ကျေနပ်သည် … ဂုဏ်လည်းယူသည် … ဘေးဘက် တင်သားများကလည်း အတွင်းကို ချိုင့်မနေ … ဖောင်းဖောင်းလေး ဖြစ်နေသည် … ဒါကတော့ လင်းလင်းက အပျိုစစ်စစ်ကိုး … အအိုတွေကတော့ … ဒီနေရာမှာ ချိုင့်သွားတတ်သည် … ဘေးပြီးတော့ အရှေ့ပေါင်ကြားထဲကို စမ်းလိုက်တော့ ချွဲကျိကျိ အရည်လေးတွေ ထပ်ထွက်လာပြန်သည် … စိတ်ညစ်ပါ့ … ဒီနေ့တော့ ရင်ခုန်စရာအဖြစ်အပျက်တွေက … အပျိုလေးရဲ့ စိတ်ကို နှိုးဆွပြီးရင်း နှိုးဆွနေသည် … ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်လေးရဲ့ အောက်နားမှာ … အမွှေးနုနုလေး … အမွှေးတွေက အရမ်းမများ … ပါးသည် … နုသည် … ဒီတောအုပ်ရဲ့ အောက်မှာ လင်းလင်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက အနည်းငယ်ထူနေသည် … ပင်တီလေးရဲ့ ပွတ်တိုက်အားတွေကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက မာပြီး တင်းနေသည် … အမှန်က လင်းလင်း စိတ်ထနေပြီ … ပြောင်သွားအောင် သေချာပွတ်ဆေးလိုက်တော့မှ ပိုဆိုးသွားသည် …
ဟင့် … ဟာ … မရတော့ … လက်ကလေးနဲ့ အတွင်းသားကြားကို စမ်းလိုက်တော့ တစ်နေရာမှာ … မာတောင်တောင်လေးဖြစ်နေသည် … အဲဒါဘာလဲ … ဒီနေရာဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် ဆန္ဒအပြင်းဆုံး ဖြစ်စေနိုင်သည့် နေရာ … ဒါကို လင်းလင်း မသိသေး … နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုကြားက ထိပ်ဖူးလေးသည် … အစွမ်းကုန်ထောင်နေပြီ … သေချာစမ်းကြည့်မိလိုက်တော့ …ရင်ထဲမှာ ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲသွားသည် … ဖင်ကို အစွမ်းကုန် နောက်ကို ကော့လိုက်မိပြီး … ရင်နှစ်မွှာက ရှေ့ကို ကော့လိုက်မိသည် … ဟာ … ဟင့် … မတိုးမကျယ် … ရေရွတ်သံနှင့်အတူ … တကိုယ်လုံးမှ အကြောအခြင်များသည် … ပုရွက်ဆိပ်များ အုပ်လိုက် လမ်းလျှောက်လာသလို … တရွရွဖြစ်လာသည် … သွေးသားများ ဆူပွက်လာသည် … အပျိုလေး၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် … သူလုပ်ရမည့် တာဝန်များအတိုင်း … ပြောင်းလဲလာသည် … မျက်နှာလေး ပန်းရောင် ဖြစ်လာသည် … တစ်ခါပွတ်မိတိုင်း … ရင်ထဲမှာ ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲနေသည် … ရပ်မရတော့ … ရှေ့ကို ကော့ထားသော ရင်သားများသည် တင်းလာသည် … စိတ်ထဲမှလည်း … ထိုရင်သား နုထွားလေးကို အားနဲ့ ဖိကိုင် ဆုတ်နယ်ပစ်လိုက်ချင်သည် … ညာဘက်ရင်သားကို ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် ဖိညှစ်ပစ်လိုက်သည် … သွယ်လျတဲ့ လက်တွေက … ဆန္ဒကို အလိုက်တသိ အကောင်အထည်ဖော်ပေးနေသည် … ပန်းကလေးကို အစွမ်းကုန် ညှစ်ထားမိသလို … လက်ကလည်း မရမက … ကြားထဲဝင်ကာ ပွတ်သပ်နေမိသည် … စိတ်ထဲမှာလည်း ချာတိတ်ကိုသာ တမ်းတနေသည် … ရေပန်းလေးအောက်မှာ … လင်းလင်း ရမက်ထန်နေပုံလေးကို ချာတိတ်မြင်ရင် ရူးသွားနိုင်သည် … ဖွံ့ထွားနေတဲ့ ရင်သားကို လက်တစ်ဖက်က ဆုပ်နယ်နေပြီး … လက်တစ်ဖက်က အောက်ပိုင်းကို သည်းကြီးမည်းကြီး ပွတ်သပ်နေသည် … တင်သားများသည် … အထိအတွေ့ နှိုးဆွမှုကို မခံနိုင်လွန်းလို့ … ရမ်းခါနေသည် … လက်ချောင်းလေးနှင့် ရသာဖူးလေး … ထိမိလိုက်တိုင်း … ဖီလင်တက်လွန်းသဖြင့် နောက်သို့ တွန့်သွားသလို … ခန္ဓာကိုယ်က တုန့်ပြန်မှုကြောင့် အရှေ့ကို အလိုလို ပြန်ကော့ပေးမိသည် … ဖင်လေးသည် နာရီလက်တံအတိုင်း ရမ်းခါနေသည် … ခပ်ကြမ်းကြမ်းတော့ မဟုတ် … တစ်ခါတစ်ခါ … တစ်ကိုယ်လုံး ဇတ်ကနဲ တုန်သွားသေးသည် … လင်းလင်း … မတိုးမကျယ်လေး ညီးတွားနေမိသည် … လင်းလင်း ဒူးနှစ်ချောင်း မခိုင်တော့ …
တုန်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီး … အရမ်း လန့်သွားသည် … ဘယ်သူလဲ … စိတ်ကူးတွေ အကုန်လုံး လွင့်သွားပြီး …လက်ရှိကမ္ဘာလေးထဲကို သတိပြန်ဝင်လာသည် … တောက် … ခုနက အခန်းတံခါးမပိတ်မိတော့ … ဒင်း ၀င်လာနိုင်တာပေါ့ … ဘာမှ အပြစ်မရှိသော မိနှင်းကို စိတ်ထဲမှာ ကြိမ်းနေမိသည် …
“မမ … ထမင်းစားဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်သွားပြီ …”
မိနှင်း …. မိနှင်း … အတော်ရှုပ်တာပဲ … ဟင်း … ဒေါသလေးထွက်သွားသည် …
“အေး … အေး … ၀က်အူချောင်းလည်း ကြော်ပေးထားအုံးနော် … သူက ၀က်အူချောင်း ကြိုက်တယ်”
လေသံလေးက သူ့အတွက် စေတနာ ပလပွ … သူကြိုက်တာလေးကို ဘာလို့ ချက်ချင်းတွေးမိတာလဲ … အမှန်က ချစ်တာကိုး …
“အခုကြော်လိုက်မယ် … မမ”
ရေချိုးခန်းထဲက ဒုက္ခသည် အောင်ကျော်ထက် … မျက်နှာသုတ်ပ၀ါနှင့် မြန်မြန်သုတ်ပြီး … အ၀တ်မြန်မြန်လဲကာ … လင်းလင်း အိပ်ယာဘေးက ခုံမှာထိုင်နေမည် … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် … အောက်ကကောင် အကြောထောင်နေတာကို ချိုးနှိမ်မည် … အကြံက အဲဂလို … မျက်နှာသုတ်ပ၀ါလေးကို မျက်နှာနားကပ်လိုက်တော့ … အနံ့လေးတစ်ခု နှာခေါင်းထဲ ၀င်လာသည် … မ ရဲ့ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါလေး ထင်ပါရဲ့ … မရဲ့ မျက်နှာလှလှလေးရယ် … မရဲ့ ကိုယ်လုံးကျစ်ကျစ်လေးရယ် … ဒီမျက်နှာသုတ်ပ၀ါနှင့် သုတ်ထားပါလား … မျက်နှာသုတ်ပ၀ါကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် မျက်နှာနားကပ်ပြီး အားရပါးရ ရှုလိုက်မိသည် … လင်းလင်းရဲ့ ကိုယ့်သင်းနံ့လေးက ဒီရင်မှာ စွဲသွားပြီ … အရမ်းချစ်မိသွားပြီ … မ ရေ … မရဲ့ စွင့်ကားနေတဲ့တင်သားတွေ … မရဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်သားတွေကို မျက်စိထဲမှာ … တွေးကြည့်နေမိသည် … ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် … မ ရဲ့ အပြင်ဘက်က ပကတိသဏ္ဍန်ကတော့ ပိုလှမည် အမှန်ပဲ … မရဲ့ ဟိုနေရာလေးကော … သေချာသာ မြင်ရလျှင် အရမ်း ရင်ခုန်စရာ ကောင်းမှာ အမှန်ပင် … တခြားနေရာတွေထက် … ဒီနေရာ ပိုလှလိမ့်မယ် … ဘယ်လိုပုံမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲ … အတွေးထဲမှာ စိတ်ကူးမိသည် … အတွေးကို မြန်မြန်ဖျက်ပြီး … ရေချိုးခန်းတံခါးကို ဟသည် ဆိုရုံလေး ဟလိုက်သည် … အခန်းထဲမှာ ဘယ်သူမှ မရှိ … ဂွတ် … လင်းလင်း အဖေ အကျီ င်္နှင့် ပုဆိုးကို အမြန်လဲပြီး … ခုံတွင် အမြန်ထိုင်ကာ မ ရဲ့ Laptop ကို ဖွင့်ကြည့်နေမိသည် … စတိုင်ကတော့ … စက်ပြင်နေသည်ပေါ့ … ပေါင်ကြားက လူစွာလေးကို … ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ အသေညှပ်ထားပြီး ချိုးနှိမ်ထားသည် … ဆန္ဒကို ဒုတိအကြိမ် ချိုးနှိမ်ခြင်းသည် … အောင်မြင်ဖို့ ခက်ပါသည် … ဒါကို လူနုံလေး အောင်ကျော်ထက်မသိ … အတင်း ဖိထားသည် …
ရေမြန်မြန်ချိုးပြီး ရေစက်တွေ သီးနေတဲ့ ကိုယ်ကို မျက်နှာသုတ်ပ၀ါနဲ့ အမြန် လိုက်သုတ်လိုက်သည် … စိတ်ထဲမှာတော့ မကျေနပ် … ဘာကို အလိုမကျဖြစ်နေသည် မသိ … တစ်ကိုယ်လုံး အကြောတွေက တင်းနေသည် … ပထမ … ဘရာစီယာလေး ၀တ်မည် စိတ်ကူးပြီးမှ … အတွေးတစ်ချက်ကြောင့် မ၀တ်မိ … ည၀တ်ဂါဝန်လေး ကောက်စွတ်လိုက်သည် … ရာဂနတ်ကား အပျိုစင်လေးကို အမှောင်လမ်းသို့ ကောင်းကောင်းကြီး လမ်းညွှန်နေပြီ … မသိစိတ်က ချာတိတ်ရဲ့ တစ်စုံတစ်ခုကို တမ်းတနေသည် … သွေးသားက တောင်းဆိုလာတော့လည်း … အပျိုစင်လေးလည်း … ဥာဏ်နီ ဥာဏ်ပြာတွေ မသိမသာ ထွက်လာနေသည် … ဒီအချိန်မှာ လုပ်သင့်လား မလုပ်သင့်လား မစဉ်းစားတော့ … ဖြစ်ချင်နေတဲ့ ရင်ထဲက မီးတောက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နေသည် … လင်းလင်းအခန်းဝကနေ လင်းလင်း ချောင်းကြည့်လိုက်သည် … သူ ဘယ်မှာလဲ … သူ … ခုတင်ဘေးက စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး Laptop ကို ကိုင်နေသည် …
“ဗိုက်ဆာနေပြီလား … ချာတိတ်”
တစ်ချက်ပြုံးပြပြီး လင်းလင်း အောင်ကျော်ထက်ရဲ့ ဘယ်ဘက်က … ခုတင်ပေါ်မှာ တင်လေးစောင်းပြီး ပုံ့ပုံ့လေး ထိုင်လိုက်သည် … ထိုအပြုံးက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို ဆွဲဆောင်နေသည် … ချစ်ရည်လွှမ်းနေသည် … အကြင်နာပြုံး … ချာတိတ် … အရမ်းချစ်သွားသည် … မ … အရမ်းလှသည် … သူကလည်း ပြန်ပြုံးပြပြီး ကိုယ့်ကို တစ်ချက်လေး စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်လိုက်သည် … လင်းလင်းသိတာပေါ့ … ည၀တ်ဂါဝန်လေးနဲ့ လင်းလင်း အရမ်းလှနေမယ်ဆိုတာ … ရေချိုးပြီးခါစ … ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ လင်းလင်းမျက်နှာလေး လန်းဆန်းနေသည် … နောက် … ဆန္ဒရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို အဆုံးမသတ်နိုင်သေးလို့ မျက်နှာလေးက ပန်းနုရောင်သန်းနေသည် … တခြား အချိန်ထက် ဒီလိုအချိန်မှာ ပိုပြီးချစ်ဖို့ကောင်းနေသည် … နောက်ပြီး လင်းလင်းရဲ့ အမို့အမောက်လေးတွေက ည၀တ်ဂါဝန်အောက်မှာ ၀ိုးတ၀ါးနဲ့ ဆွဲဆောင်နေတယ် … အခုအခံမရှိဘူး ဆိုတာ ပိုပြီးသိသာသည် … ချာတိတ်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာလဲ ရိုးတိုးရွတဖြစ်နေသည် … သွယ်လျတဲ့ လက်မောင်းလေးတွေက ၀င်းနေသည် … အနာတစ်စက်မရှိ … ဘယ်ဘ၀က ဘယ်လိုဆုတောင်းခဲ့လဲ မသိ … မ က အရမ်းလှနေသည် … ဂါဝန်လေးကို ပေါင်နှစ်ခုကြားမှာ ညှပ်ထားလိုက်တော့ ရင်ဘတ်က အမို့အမောက်လေးက ပိုပြီးပီပြင်လာသည် …. ဟာ … မ … အောက်ခံ ဘာမှ မ၀တ်ထားပါလား … မြင်ရသည့်အနေအထားနဲ့ပင် ဆုပ်နယ်ပစ်လိုက်ချင်သည် … သို့သော် … မလုပ်ရဲ … ဂါဝန်အောက်မှာ အထင်းသားပေါ်နေတဲ့ ပေါင်တံရှည်ရှည်လေးကလည်း တင်းနေသည် … သူများတွေလို ပေါင်လုံးတုတ်တုတ်ကြီးမဟုတ် … အနေတော်လေးဖြစ်သည် … ခြေသလုံးလေးကလည်း … အမွှေးတပင် မရှိ … ပြောင်ချောပြီး သွယ်လျလျလေးဖြစ်သည် … မြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့ … မ ကို တစ်ကိုယ်လုံး ကြည့်ပြီး … အောက်ကကောင်ကလည်း ရုန်းထနေသည် … ပေါင်နှစ်လုံးကို အတင်း ဖိကပ်ထားသည် … အနေရခက်သည်ဆိုတာ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို ခေါ်တာလားမသိ …
ဖေဖေ့အကျီ င်္နဲ့ တော်ရဲ့လား”
“အင်း … နည်းနည်းတော့ကြီးနေတယ် … ရပါတယ် … မ ရဲ့”
ဟိုက် … ဒီက ထလို့မရ … သောက်ရှက်တော့ ကွဲပြီ … အောင်ကျော်ထက် မျက်နှာ နီရဲလာသည် …
“ခဏလေးပါ မ ရယ် … လုပ်လက်စလေး မပြတ်သေးလို့”
“မရဘူးကွာ … ထ ဆို ထပဲ … လာသွားစားမယ်”
လင်းလင်းကလည်း ဇွတ် …
အောင်ကျော်ထက်တော့ ဂွကျပြီ … မျက်နှာလေးက နီရဲတွတ်နေပြီ … ကွိုင်မှ ကွိုင်ကြီး …
လင်းလင်းက မတ်တပ်ရပ်ပြီး ချာတိတ်ကို အပေါ်က မိုးကြည့်လိုက်သည် …
ချာတိတ်တော့ သွေးလေ ခြောက်ခြားနေပြီ … အရမ်းလှတဲ့ မ က အနားမှာ ကပ်ရပ်နေသည် … ည၀တ်ဂါဝန်လေးက အနီးကပ်ကျတော့ ပါးလျလွန်းသည် … မရဲ့ ရင်နှစ်မွှာက အလုံးလိုက် ကပ်ပြီးမြင်နေရသည် … ထိပ်က နို့သီးလေးတွေက ပန်းရောင် … ၀ိုးတ၀ါးပေမယ့်သေချာသည် … နောက် … အစေ့လေးတွေက သေးသေးလေး … မ ရဲ့ စမူဆာလေးကလည်း ဂါဝန်အောက်မှာ ဖောင်းမို့နေသည် …. သေချာသည်မှ သေချာတာပေါ့ … အောင်ကျော်ထက် ပေါင်နှစ်ခုကြားကနေ … အလံတိုင်လေးက သွေးနံ့ရသော ကျားလို ၀ုန်းကနဲ ကန်ထွက် ထောင်ထွက်လာသည် … ပေါင်နှစ်လုံးသည်လည်း တားဆီးရန် မတတ်နိုင်တော့ … ဘယ်သူမှ မရှိတော့ လင်းလင်း စိတ်လေးကရဲနေသည် … စားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ ချာတိတ်လက်ကို ဆွဲမလိုက်သည် … ဒီအချိန်မှာပဲ မျက်စိက ချာတိတ်ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲကို ရောက်သွားသည် … အိုး … ဘာကြီးတုန်း … ဘုရား … ဘုရား … ဒါ … ဒါ … ချာတိတ်ရဲ့ … ဟိုဟာကြီးပါလား … အံ့သြခြင်း … မှင်တက်ခြင်းတွေနဲ့ အတူ လင်းလင်း မျက်လုံးလေး ပြူးသွားသည် … အောင်ကျော်ထက်က ထိုင်လျက်နဲ့ ဖုံးကွယ်နေရာမှ ရုတ်တရက် ၀ုန်းကနဲ မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည် … အကြောက်တရားကား အမှန်ကို ဘွင်းဘွင်းကြီး ထုတ်ဖော်လိုက်သည် … မတ်တပ်ရပ်လိုက်တော့မှ ပိုဆိုးသွားသည် … ခံတပ်ပေါ်က အမြှောက်ကြီးလို လေထဲတွင် တန်းတန်းကြီးထွက်နေသလို … ချာတိတ်ရဲ့ အင်္ဂါလေးသည် … အရှေ့ကို တန်းတန်းထွက်နေတော့သည် …
လင်းလင်း ပါးစပ်က အံ့သြသံနှင့်အတူ ကိုယ်ကို တပတ်လှည့်ပြီး မျက်နှာကို လွှဲဖို့ကြိုးစားလိုက်သည် … အမှားပေါ်အမှားဆင့်ခြင်းသည် အဆိုးဆုံးသော အခြေအနေကို တွန်းပို့လိုက်ခြင်းပင် … လင်းလင်းနောက်ကို အလှည့် … ခုတင်စောင်းက လင်းလင်းခြေထောက်ကို ဖြတ်ခံထားသလိုဖြစ်ပြီး … ၀ုန်းကနဲ ခုတင်ပေါ်ကို နောက်ပြန်ပစ်ကျသွားသည် … ရေနစ်သူသည် လက်တွင် ဆုပ်ကိုင်ထားမိသော အရာကို အားကုန်ဆွဲမိသလို … လင်းလင်း အမှတ်တမဲ့ ချာတိတ်လက်ကို ဆွဲလိုက်မိသည် … တစ်စက္ကန့် … ဒီအချိန်လေး အတွင်းမှာ … အောင်ကျော်ထက် … လင်းလင်းကိုယ်ပေါ်မှာ ထပ်မိလျက်သား ဖြစ်သွားသည် … ချာတိတ် ဆုတောင်းပြည့်သွားသည် … ရာဂနတ်၏ ဆန္ဒကား တကယ် ဖြစ်သွားသည် … အပျိုစင်တစ်ဦးအဖို့ … အံ့သြခြင်း … ရှက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အတူ အသားများ တဇတ်ဇတ်တုန်နေသည် … အောင်ကျော်ထက်၏ အမှားကား … အမှားကောင်းပင် … လင်းလင်းပေါ် ထပ်ပြီး ကျသည်မှ ကွက်တိ … သံလိုက်သည် သံကို ဆွဲသလို … ဘယ်လို ဘယ်လိုဖြစ်သွားသည် မသိ … ချာတိတ်၏ အမြှောက်သည် … လင်းလင်း၏ လျှိုမြှောင်လေးကို တည့်တည့်ကြီး ဦးတည်ထားပေသည် … လင်းလင်းကား ပက်လက်ကလေး … သူ့အပေါ်မှာ ချာတိတ် ... တိတ်ဆိတ်သော အခန်းထဲက … သွေးသားထဲက အတောင့်တဆုံး ဆန္ဒ … တစ်ခါမှ မကြုံဘူးသည့် အထိအတွေ့ …
ပါးလျတဲ့ ဂါဝန်လေးအောက်မှာ ဘာမှ အခုအခံမရှိတဲ့ လင်းလင်းရဲ့ အလှဆုံး ရင်သားလေးတွေ … ချာတိတ် သိတာပေါ့ … အတွေ့အထိက … အချိန်တွေကို မေ့သွားသည် … လက်ရှိ အခြေအနေကို မေ့သွားသည် … တဇတ်ဇတ်တုန်နေတဲ့ …မရဲ့ ကိုယ်လုံးလှလှလေး … နူးညံ့သော အတွေ့အထိ … တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေသော ရင်ခုန်သံ … သင်းပျံ့နေတဲ့ မရဲ့ ကိုယ်နံ့လေး … အံ့သြစွာ … ချစ်ရည်လွှမ်းစွာ ကြည့်နေတဲ့ … မရဲ့မျက်လုံးတွေ … ချာတိတ် စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုပဲ ရှိနေသည် … ပါးလျပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိနမ်းလိုက်မိသည် … ရှက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အတူ … လင်းလင်း ရုန်းဖယ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပေမယ့် … ပေါင်ကြားက ချာတိတ်ရဲ့ ပစ္စည်းက လင်းလင်းရဲ့ … လင်းလင်းရဲ့ ပန်းကလေးကို … အို … ဟင့် … သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ … ခေါင်းကို မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်သလို … ရှက်လွန်းလို့ ပြာဝေသွားသည် … ချာတိတ် ဇတ်ကနဲ တစ်ချက် ဆောင့်လိုက်မိသည် …
မတိုးမကျယ် ညည်းသံလေးနဲ့အတူ … ယောင်ယမ်းပြီး သူ့ကို ဖက်ထားမိသည် … အထိအတွေ့ကြောင့် … အမှားမှားအယွင်းယွင်း ဆက်ဖြစ်နေဆဲ … ပေါင်နှစ်ဖက်ကို စုထားနေရာက ဘေးကို ကားပေးလိုက်မိသည် … ခြေချောင်းလေးတွေက လေထဲမှာ ကုတ်ကွေးနေသည် … အောင်ကျော်ထက် ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲကို အလိုက်သင့်ရောက်သွားသည် … ဂါဝန်လေးက ခါးထိ လန်ကျသွားပြီး … အောက်တွင် ဟောင်းလောင်း … လင်းလင်းရဲ့ လျှိုမြှောင်လေးနဲ့ … ချာတိတ်ရဲ့ အမြှောက်ကား … ပုဆိုးပါးလေးသာ ခြားတော့သည် … အောင်ကျော်ထက် ခါးကိုတွန့်ပြီး … မရဲ့ တောင်ကုန်းပေါ်ကနေ ပွတ်ဆွဲပစ်လိုက်သည် …
“ဟာ … ဟင့်အင်း”
ငြီးငြူသံလေးနဲ့ အတူ … နှစ်ယောက်သား ခွာမရတော့ … ချာတိတ်ကို တင်းတင်းဖက်ထားပြီး မျက်စိကို မှိတ်ထားမိသည် … မျက်နှာလေးကိုကား … ညာဘက်သို့ လွှဲထားမိသည် … ချာတိတ် … မရဲ့ နားသယ်စပ်လေးကို နမ်းလိုက်သည် … နောက် လည်ပင်းသားလေး … လင်းလင်းရင်ထဲ ဗြောင်းဆန်နေသည် … လက်မောင်းနှစ်ခုလုံးမှာ ကြက်သီးလေးတွေ ထနေသည် … အော် အပျိုကိုး … ဖြစ်မှာပေါ့ … တစ်ခုက အတင်းဝင်ဖို့ကြိုးစားသည် … တစ်ခုက အလိုက်တသိ … တည့်အောင် ပြောင်းပေးသည် … အပေးအယူကား ပြောစရာမလို … မာပြီးတင်းနေသည့် နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားကို ရှည်မျောမျောအရာတစ်ခု တိုးဝင်လာသည် … အထိအတွေ့ကို နှစ်ယောက်သား မလွန်ဆန်နိုင် … ထိပ်ဖူးလုံးလုံးက … လင်းလင်းရဲ့ ရသာဖူးလေးကို အပေါ်ကနေ အောက်ကို ဖိဆွဲသွားသည် … အဆုံးသတ်ကား … လင်းလင်းရဲ့ အပေါက်ဝလေး အောက်နားကို သွားဆောင့်မိသည် … အပျိုလေး … ကော့ပျံသွားသည် … ဘယ်ခံနိုင်ပါ့မလဲ … လင်းလင်းရဲ့ အကွဲကြောင်းကြားထဲမှာလည်း … အရည်တွေ ရွှဲစိုနေသည် …
နှစ်ယောက်သား အချစ်မီးတောက်လေး နှစ်ကိုယ်တူ ထွန်းညှိနေတုန်း …
မိနှင်းက မမ ကြော်ခိုင်းတဲ့ ၀က်အူချောင်းကြော် ကြော်ပြီးသည့်အကြောင်း မမတို့ကို သွားပြောရန် အခန်းဝသို့အရောက် … မြင်လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းက မယုံချင်စရာ … ခုတင်ပေါ်မှာ မမနဲ့ ဟိုအစ်ကို ထပ်ပြီး အိပ်နေကြသည် … အံ့အားသင့်ခြင်းနှင့်အတူ … မှင်သက်မိသည် … ဒီအိမ်မှာ မိနှင်း အလုပ်လုပ်တာ သုံးနှစ်ကျော်ပြီ … မမ လင်းလင်း … အရမ်းလှသည် … မိန်းမချင်း မနာလိုချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် … ဘော်ဒီက မိုက်သည် … တောင့်သည် … စိတ်ထားလည်း ကောင်းသည် … စကားပြောလျှင်လည်း ချိုချိုသာသာပြောသည် … ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ဘာမှ အရှုပ်အရှင်းမရှိ … သူများတွေ ဒါမျိုးဖြစ်နေကြပါသည် ဟုလာပြောပြလျှင် … မိနှင်း လာပြောတဲ့သူကို ပါးပိတ်ရိုက်မိလိမ့်မယ် … မဟုတ်က ဟုတ်က … မမကို စွပ်စွဲရမလားလို့ … အခုတော့ … အခုတော့ … ဖြစ်နေပုံက …
ဒီအခြေအနေကို မိနှင်းဘယ်လို တားဆီးရမလဲ … မမ က အိမ်ရှင် … သူကြိုက်တဲ့လူနဲ့ ဖက်ပြီး အိပ်နေတာကို မိနှင်းလို အိမ်အကူက ဘယ်လိုတားဆီးရမှာလဲ … ခက်တာပဲ … မေမေကြီးတို့သိလျှင် ရှက်လွန်းလို့ မမ ကို သတ်လိမ့်မည် … လက်ခနဲ အကြံနှင့်အတူ ထမင်းစားခန်းကို ပြေးသွားသည် … ကြွေပန်းကန်တစ်ခု … ခေါင်းပေါ် အမြင့်လောက်က မြှောက်ပြီး ပစ်ချလိုက်သည် …
ကြွေပန်းကန်နဲ့ ကျောက်ပြားထိသံက အတော်ကျယ်သည် … ရာဂနတ်သား ညွှန်ကြားမှု၏ အောက်တွင် လှုပ်ရှားနေသော လင်းလင်းတို့ နှစ်ယောက် … တုန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် … အသိတရားကားဝင်လာသည် … လင်းလင်း ချာတိတ်ကို တွန်းဖယ်ပြီး … ရေချိုးခန်းထဲကို ပြေးဝင်သွားမိသည် … အပျိုလေး … အခုမှ … အရမ်းရှက်နေပြီ … ရေပန်းကို ဘားကုန်ဖွင့်ပြီး ကြုံ့ကြုံ့လေးထိုင်နေမိသည် … ရှက်သည် … အရမ်း ရှက်ဖို့ကောင်းသည် … အသက် ၂၈ ကျော်မှ … ဒီလို မရိုးမသားစိတ်တွေ ထကြွနေတာ ဘာကြောင့်လဲ … သေချာတာတော့ … လင်းလင်းကြောင့် … ငါသာ သူ့ကို အိမ်မခေါ်ခဲ့ရင် … ငါသာ ည၀တ်ဂါဝန်လေး မ၀တ်ခဲ့ရင် … ဟီး … ရှက်မျက်ရည်လေး စမ်းစမ်း စမ်းစမ်းနဲ့ ငိုချလိုက်သည် …
ချာတိတ် … ထူပူသွားသည် … သွားပြီ … မတော်တဆဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် … ဒါမျိုးတော့ လုံးဝမဖြစ်သင့် … မကို အခွင့်အရေးယူသလို ဖြစ်သွားသည် … အခွင့်အရေးမှ အတော့်ကို ယူမိသည် … မ လည်း အရမ်းရှက်နေမှာပေါ့ … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် … သွားချော့မည် … မ စိတ်ဆိုးလို့ သတ်ရင်လည်း သတ်ပစေတော့ … မ ပေးတဲ့ အပြစ်ကို ခံယူမည် … ရေချိုးခန်းထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မ … ရေပန်းအောက်မှာ ငိုနေသည် … အရမ်းဝမ်းနည်းသွားသည် … တကယ်ပါ … အဲဒီလို ဖြစ်ဖို့ လုံးဝ မရည်ရွယ်ပါ … မဘေးနားမှာ ဒူးထောက်ပြီး …
လင်းလင်းကား တအိအိနဲ့ ငိုနေဆဲ …
“မ … မငိုပါနဲ့ဗျာ … ကျွန်တော် … ကျွန်တော် … တကယ့်ကို မရည်ရွယ်ပါဘူး … အခွင့်အရေးယူတာလဲ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ”
ချော့မယ့်သူရှိလေ … ပိုငိုလေဆိုတဲ့ ကလေးလို … လင်းလင်း အပေါ်က ရေပန်းနဲ့ အပြိုင် ငိုနေသည် …
“မ … မကျေနပ်ရင် ကြိုက်တဲ့ အပြစ်ပေးပါဗျာ … ကျွန်တော် ရဲရဲကြီးခံရဲပါတယ်”
“ကျွန်တော် မကောင်းတာပါဗျာ ... ဒီလောက် မကို စော်ကားတဲ့ကောင်”
ကိုယ့်ပါးကို ကိုယ် ဘယ်ပြန်ညာပြန်တီးနေမိသည် … တကယ်ချတော့ … မျက်လုံးတွေပင် ပြာဝေသွားသည် … မ အငိုတိတ်သွားသည် … မျက်ရည်တွေရွှဲနေတဲ့ မျက်ဝန်းလေးက ချာတိတ်ကို မော့ကြည့်နေမိသည် …
“ကဲကွာ … ကဲကွာ … ”
ကိုယ့်ပါးကိုယ်ချတာ အားမရတော့ … ဇတ်ကနဲ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေချိုးခန်းနံရံကို လက်သီးနဲ့ အားကုန်ထိုးနေမိသည် … နံရံထက် လက်သီးက ပိုမာနိုင်ပါ့မလား … တကယ်ထိုးတော့ … လက်ကပေါက်ပြဲပြီးသွေးတွေ ဖြာကျနေသည် … လက်နှစ်ဖက်လုံး ပေါက်ပြဲပြီး သွေးတွေက ရဲနေသည် … လက်ပြီးတော့ ခေါင်း … နံရံကို ခေါင်းနဲ့ ပြေးဆောင့်လိုက်သည် … တစ်ချက် … နှစ်ချက် … နံရံက အေးဆေးပါ … ခေါင်းက ချိုစောင်းကတော့ ကွဲပြီ … သွေးတွေက ကြည့်မကောင်းအောင် တဝေါဝေါဆင်းနေသည် … ရေချိုးခန်းထဲမှာ နီရဲတွတ်လာသည် …
လင်းလင်းရဲ့ နှလုံးသားက ကျောက်ရုပ်မဟုတ် … ချာတိတ်ရဲ့ အက်ရှင်တွေက … လင်းလင်းနှလုံးသားကို အရည်ပျော်သွားသည် … ခုနက ရှက်စရာကိစ္စကို မေ့သွားပြီး … ချာတိတ်ကို အတင်းဆွဲထားသည် …
“အို …. မလုပ်နဲ့ … တော်ပါတော့”
“မရဘူးဗျာ … မရဘူး … မ ခွင့်လွှတ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး”
“တော်ပါတော့ဆို … မလုပ်ပါနဲ့တော့ … အားလုံးက လင်းလင်း … အပြစ်တွေပါ”
ချာတိတ် တစ်ချက်ရပ်သွားပြီး … မ ကိုကြည့်လိုက်သည် … ကြင်နာသနားစွာနဲ့ ကြည့်နေတဲ့ မရဲ့ မျက်ဝန်းတွေက ချာတိတ်အတွက် … သွေးတိတ်ဆေးပေါ့ …
“မ … ကျွန်တော့်ကို ခွင့်လွှတ်တယ်ပေါ့”
“မလုပ်နဲ့တော့နော် … ရပ်လိုက်ပါတော့ … လင်းလင်း ခွင့်လွှတ်တယ် သိလား”
လင်းလင်း အောင်ကျော်ထက်လက်တွေကို … ဆုတ်ကိုင်ထားသည် … ချာတိတ်သွေးတွေက လင်းလင်း ဂါဝန်လေးပေါ်မှာ စွန်းထင်းကုန်သည် … သွေးသစ္စာပေါ့ …
“မ ကို … ကျွန်တော် အရမ်းချစ်ပါတယ်ဗျာ … တကယ်ပါ … ဒါမျိုးဖြစ်မယ်လို့ လုံးဝ မရည်ရွယ်ပါဘူး”
“မ … ကျွန်တော့်ကို ချစ်ရဲ့လားဟင် …”
ရင်ထဲက စကားတွေ မမြိုသိပ်နိုင်တော့ … ထွေးအန်ထွက်လာသည် … နှလုံးသားထဲက အချစ်တွေကို တားဆီးလို့ မရ … မရဲ့လက်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး အတင်းမေးလိုက်မိသည် …
“ချစ်တာပေါ့ … ချာတိတ်ရယ် … ချစ်တာပေါ့”
ချစ်ရည်ရွှမ်းတဲ့ အကြင်နာမျက်ဝန်းတွေနဲ့ လင်းလင်း ရင်ထဲက အဖြေကို ပေးလိုက်သည် … လင်းလင်းက ပွင့်လင်းသည် … ရှင်းသည် … ဟုတ်တာပေါ့ … ဒီလောက်ချစ်တဲ့ ချာတိတ်ကို လင်းလင်းရင်မှာ အသဲစွဲသွားပြီ … ရင်ခုန်စရာ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ … ချာတိတ်ရဲ့ သွေးနဲ့ရင်းပြီး အပြစ်ပေးတဲ့ ပုံစံ … အို … သနားစရာလေး … ဒီလို မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ … မ ရင်တွေ ကျိုးရချည်ရဲ့ …
အားရ၀မ်းသာနဲ့ လင်းလင်းကိုယ်လေးကို ပွေ့ဖက်လိုက်မိသည် … ချစ်တော့လည်း ပွင့်ထွက်ကုန်ပြီ … ချာတိတ်ကို တင်းတင်းလေး ပြန်ဖက်ထားမိသည် … ရေပန်းလေးအောက်မှာ ချစ်သူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် တင်းတင်းလေး ဖက်ထားမိသည် …
လင်းလင်း သတိပြန်ရလာတော့ … အို … ချာတိတ်ရဲ့ သွေးတွေက အများကြီး … ချာတိတ်လက်ကို အသာလေး ဖြေရင်း …
“သွေးတွေ အများကြီးထွက်နေတယ်နော် … ခဏလေး … ဆေးသွားယူလိုက်မယ်”
အကြင်နာတွေ … အကြင်နာတွေ …
မ လက်ကို မလွှတ်ချင်ပေမယ့် … သွေးတွေက အများကြီး … အခုမှ ခေါင်းတွေတောင် မူးနောက်နောက် ဖြစ်လာသည် … သွေးဆူတုန်းကဖြင့် ဆောင့်ချင်သလို ဆောင့်နေတဲ့ သူ … အခုတော့ ခံရပြီပေါ့ … လင်းလင်း အခန်းဝ နားကနေ …
“မိနှင်း … မိနှင်း … တင်ချာနဲ့ ဂွမ်း မြန်မြန်ယူလာခဲ့”
“ကြားလား” အကျယ်ကြီးအော်ခေါ်ရင်း … ချာတိတ်ရဲ့ ခေါင်းကသွေးတွေကို ဆေးပေးနေမိသည် …
“ဟုတ်ကဲ့ … မမရေ … လာပြီ”
ဟိုက် … မမ ဘာဖြစ်သွားလို့ တင်ချာနဲ့ ဂွမ်းတောင်းနေရတာတုန်း … အို … ဟိုဟာများ ကွဲသွားလို့လား … သွားပါပြီ … နှမြောလိုက်တာ … ဟိုချာတိတ်က တော်တော်ကြမ်းတာပဲ … တောက် … မမကို မညှာမတာ … လုပ်ရက်လိုက်တာ … ဒင်း … မမကို ဘာများမှတ်နေလဲ မသိဘူး … အပျိုစစ်စစ်ဆိုတာ ဒင်းမသိဘူးလား … အတွေးက တော်တော်ကို့ ချော်သွားပြီ …
စတိုခန်းထဲက တင်ချာနဲ့ ဂွမ်းပြေးယူပြီး လင်းလင်းအခန်းဝရောက်တော့ … မမ ထွက်လာပြီး … အမြန်ယူလိုက်သည် …
“ပေးစမ်းပါ … မြန်မြန်”
ဆတ်ကနဲ မိနှင်းလက်ထဲက တင်ချာနဲ့ ဂွမ်းကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး … လင်းလင်း အခန်းတံခါးကို ၀ုန်းကနဲ ပိတ်လိုက်သည် … ဒီ မိနှင်းတစ်ယောက်က အတော့်ကို စပ်စုသည် … ဒီလောက် အရေးကြီးနေပါတယ် ဆိုမှ ဒင်းက ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ …
မိနှင်းက တမှောင့် … ဟယ် … မမ … မမရဲ့ ဂါဝန်မှာ သွေးတွေ … ငါထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါလား … ပညာရှိလေသံနဲ့ … အမှန်က တလွဲ … ### … ငါ့မမကို မညှာမတာ လုပ်ရက်လိုက်တာ … ကြည့်ပါအုံး သနားစရာ … သွေးတွေ အများကြီး … မမ တော့်တော့်ကို နာသွားမှာပဲ … မမ တော်တော်ရှက်နေတယ်ထင်တယ် … တံခါးကို ၀ုန်းကနဲဆောင့်ပိတ်လိုက်တယ် … မိနှင်း ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် စဉ်းစားတာကတော့ ဖြူးနေတာပဲ … လွဲနေတာက တော်တော်ဆိုးသည် …
တင်ချာနဲ့ ဂွမ်းကို ဘေးချပြီး ...
“ထိုင်လိုက်နော် … အနာကို တင်ချာနဲ့ ဆေးပေးမယ်” အောင်ကျော်ထက် ရေချိုးခန်းထဲမှာ ထိုင်ချလိုက်သည် …
လင်းလင်း ... ချာတိတ်ဘေးနားမှာ ... ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်ပြီး ...
“သွေးတွေက အများကြီးပဲ … ဘာလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ညှင်းဆဲရတာတုန်း”
“မ စိတ်ဆိုးသွားတယ်ထင်လို့ … ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒဏ်ခတ်လိုက်တာ”
“နောက်ကို အဲဒီလို မလုပ်ရဘူးနော် … ချာတိတ်က … သက်သက်လုပ်တာမှ မဟုတ်တာ”
လင်းလင်း ပါးစပ်က ပြောရင်း …
အောင်ကျော်ထက်ရဲ့ ... လက်ဆစ် အပေါက်အပြဲတွေက ထွက်နေတဲ့ ... သွေးတွေကို ဂရုတစိုက် သုတ်ပေးနေသည် ... ရေချိုးခန်းထဲမှာ သွေးတွေက အိုင်ထွန်းနေသည် ... တင်ချာ ပုလင်းဖွင့်ပြီး ... ဂွမ်းကို ... တင်ချာ ... ဆွတ်လိုက်သည် ... တင်ချာပုလင်းကို အနားတွင် ပြန်ချထားသည် ...
ညာဘက်လက်ရဲ့ လက်ဆစ်ကို တင်ချာဆွတ်ထားတဲ့ ဂွမ်းနဲ့ တို့လိုက်တော့ ... အတော့်ကို စပ်သွားသည် ... အောင်ကျော်ထက် သတ္တိရှိပါတယ် ... ဘုရင့်နောင်လို လက်သည်းကြားမှာ အပ်စိုက်ပြီး တူနဲ့ ထုတာမျိုးတော့ မခံနိုင်ပေမယ့် ... ဒီတင်ချာ ထည့်တာလောက်တော့ ခံနိုင်ပါတယ် ... မ ... ထည့်ပေးတာပဲ ... စပ်လည်း ခံရမှာပေါ့ ...
“နောက် အဲဒီလို လူမိုက်မလုပ်ရဘူးနော်”
ညာဘက်ပြီးတော့ ဘယ်ဘက် ... ဒဏ်ရာတွေက မရဲ့ ယုယမှုတွေကြောင့် ...ဘာမျှမခံစားရသေး ... အမှန်က သွေးပူနေသေးတာကိုး ...
လင်းလင်း အောင်ကျော်ထက် နဖူးစောင်းက အနာတွေကိုလည်း တင်ချာထည့်ပေးသည် ... လင်းလင်းက အောင်ကျော်ထက်ရဲ့ ခေါင်း အထက်ကနေ မြင်ရအောင် ကိုယ်လေးကို မတ်ပြီး အပေါ်စီးကနေ အနာကို တင်ချာထည့်ပေးနေသည် ... ချာတိတ် အသက်မရှုနိုင်တော့ ... မရဲ့ ရင်နှစ်မွှာကား ... အောင်ကျော်ထက် မျက်စိရှေ့တည့်တည့်မှာ ... ရှင်းရှင်းလေး ... နီးနီးကပ်ကပ်လေး ... အရွယ်က ... ပန်းသစ်တော်လောက် ရှိသည် ... ဖြူဝင်းနေသည် ... နို့သီးသေးသေးလေးက ... ကပ်နေတယ်ဆိုရုံလေး .. အသည်းယားစရာ ... ကုန်းစို့ပစ်လိုက်ချင်သည် ...
ဂါဝန်လေးက ကပ်နေတော့ ... လင်းလင်းရဲ့ တောအုပ်လေးကို အထင်းသား မြင်နေရသည် ... ပေါင်လုံးလှလှကျစ်ကျစ်လေး နှစ်ခုကြားမှာ ... ပန်းကလေးက မို့မောက်နေသည် ... အောင်ကျော်ထက် တင်ချာကြောင့် နာနေတာတွေ … စပ်နေတာတွေ … မေ့သွားသည် ... တင်သားလေးတွေကလည်း ရေစိုဂါဝန်အောက်မှာ ကားစွံ့နေသည် ...အောင်ကျော်ထက် ဘာသားနဲ့ထုထားတဲ့ လူမို့လဲ … မ ရဲ့ ခါးကျင်ကျင်လေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်လိုက်ပြီး … မရဲ့ ရင်သားတွေပေါ်မှာ … အောင်ကျော်ထက် မျက်နှာအပ်ထားပစ်လိုက်သည် …
“အို ... အမေ့”
ချာတိတ်ရဲ့ နှာခေါင်းက အသက်ရှုလိုက်တဲ့ လေတွေက လင်းလင်း ရင်ကို နွေးသွားစေသည် … သွေးသားတွေက တောင်းဆိုနေပြီ … အပျိုလေးရဲ့ အရှက်တရားကား ငြင်းဆန်နေဆဲ …
“ဟေ့ ... အေး ... ကွာ ... အဲဒီလို မဆိုးရဘူးလေ”
“အရမ်း ချစ်တယ် ... မရယ်”
“ချစ် ... ချစ်ပါတယ် ... မောင်လေးရယ်”
မ ရင်သားတွေရဲ့ နူးညံ့မှု အထိအတွေ့က ချာတိတ် မျက်နှာကို ပိုပြီး ဖိကပ်စေသည် … လုံးကျစ်တဲ့ နို့နှစ်လုံးကြားမှာ မျက်နှာရောက်နေပြီး လက်နှစ်ဖက်က ခါးကျင်ကျင်လေးကို အတင်းဖက်ထားသည် … လင်းလင်း ရုန်းမရ … ရင်ခုန်သံတွေက ဗြောင်းဆန်နေသည် … စိတ်ထဲတွင် ယားသလိုလို … ကျေနပ်သလိုလို … ရှက်ရွံ့နေသလိုလို … ချာတိတ်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးရေးရေးလေးတွေက … စူးကနဲ စူးကနဲ ဖြစ်စေပြီး … လင်းလင်း ကြက်သီးတဖျန်းဖျန်းထသွားသည် … အပျိုလေး … ရင်သားလေးကို ပိုကော့ပေးလိုက်မိသည် …
ပြောနေရင်းနဲ့ လင်းလင်းရဲ့ ညာဘက်နို့အုံပေါ်က နို့သီးလေးကို … ချာတိတ် ဖိပြီးစို့လိုက်သည် …
“ဟေ့ အင်း .. ကွာ … လင်း … အရမ်းရှက်တယ်”
ခက်ပြီ … တစ်သက်လုံး အပျိုစင်ဘ၀ကို ထိန်းလာသမျှ … ဒီကျားဆိုးလေးနဲ့မှ … သောင်းကျန်းသမျှ ခံနေရသည် …
“မလုပ်ပါနဲ့တော့ … လင်း ... တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ …”
မရ … သွေးနဲ့ရသော ကျားဆိုးလို … သောင်းကျန်းပြီ … နို့သီးလေးက သေးသေးလေးဆိုတော့ အလွယ်တကူ စို့လို့မရ … အတင်းဖိကပ်ပြီး စို့ပစ်လိုက်သည် … အပေါ်မှာ အကျီ င်္ပါးက ခံနေသေးတာကိုး … ဘာမှတားဆီးလို့မရ … နို့သီးသေးသေးလေးကို ငုံပြီး သေချာ စုပ်ပစ်လိုက်သည် … အားမရ … နှုတ်ခမ်းနှုတ်ခုနဲ့ ဖိညှပ်ပြီး လျှာလေးနဲ့ ယက်လိုက်သည် … လင်းလင်း တစ်ကိုယ်လုံး ထိန်းမနိုင်တော့ … နို့စို့ပေးခြင်းကား … အပျိုစင်လေးတစ်ကိုယ်လုံးကို ပရမ်းပတာ ဖြစ်သွားစေသည် … အထိအတွေ့ကို မခံနိုင် … ခါးသေးလေးကို ဖက်ထားသော လက်ကလည်း လင်းလင်း တင်သားတွေပေါ်ကို အုပ်ကိုင်မိထားသည် … တင်သားတွေက တင်းပြီးထွားတော့ အောင်ကျော်ထက် လက်နဲ့ အပြည့်ကိုင်မရ … သို့သော် … ဆုတ်နယ်ပစ်လိုက်သည် … ဒီဘက်ပြီးတော့ ဟိုဘက်နို့ …
“အို … အဟင့်”
ကျင်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်နှင့်အတူ … လင်းလင်းနို့သီးလေးကို … ချာတိတ် အမိအရ ဖမ်းကိုက်ထားသည် … လျှာကြမ်းကြီးကလည်း နို့သီးလေးကို ပွတ်သပ်နေသည် … လင်းလင်း လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အောင်ကျော်ထက် ပုခုံးကို အားကုန်တွန်းပြီး ရုန်းကန်လိုက်သည် … ရုန်းလေ … ပိုကြမ်းလေပင် … မျက်နှာတစ်ခုလုံးက နို့အုံတစ်ခုလုံးကို ပွတ်ပြီးချေပစ်လိုက်သည် … လင်းလင်းရဲ့ တင်းနေတဲ့ နို့လေး ပြားသွားသည် … အတွင်းကို အားနဲ့ဖိချေလိုက်သလို ဖြစ်သွားသဖြင့် … နည်းနည်းနာသွားသည် …
ဟာ … အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ”
အသံလေးက နည်းနည်း ထန်နေသည် … နည်းနည်းလေးလည်း တုန်နေသည် … အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင် … ကြောက်လန့်နေသည် … အထိအတွေ့ကို သာယာပေမယ့် … လင်းလင်း ဒီလောက်ထိတော့ … မလိုက်လျောနိုင် … လင်းလင်း … ချာတိတ်ကို ချစ်ပါသည် … အရမ်းချစ်သည် … သို့သော် ချစ်သည်က တခြား … သောင်းကျန်းသည်ကတခြား … ရှက်ဖို့လည်း အရမ်းကောင်းသည် … တခြားသူသာတွေ့သွားရင် … လင်းလင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေမိမှာ အမှန်ပင် … အောင်ကျော်ထက် မျက်စိကို လှန်ကြည့်လိုက်တော့ … မ ရဲ့ သနားညှာတာဖို့ … တောင်းပန်တဲ့အကြည့်တွေ … ချာတိတ် သနားသွားသည် …
“လိမ္မာပါတယ် မောင်လေးရယ် ... မ ကို ချစ်တယ်မလား”
“မ … ကျွန်တော့်ကိုရော … ချစ်ရဲ့လား”
“ဒါဆို … အာဝါးပေး”
ဟင်း … လင်းလင်း … မျက်စောင်းလေး တစ်ချက်ထိုးလိုက်မိသည် … လက်နက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လဲနေတော့လဲ … နည်းနည်းတော့ အလျော့ပေးရမှာပေ့ါ … အောင်ကျော်ထက် နဖူးလေးကို လင်းလင်း နှုတ်ခမ်းလေးတစ်စုံ ကပ်သွားသည် … အကြင်နာ အနမ်း … အောင်ကျော်ထက် မ ကို … ချွဲနေသည် … လက်ညှိုးလေးနဲ့ ... ပါးကို တစ်ချက်ထိုးပြလိုက်သည် … သဘောက ဒါကိုလည်း နမ်း …
“ချာတိတ်နော် … နည်းနည်းဆိုပြီး … အဆစ် ထပ်တောင်းနေတယ်”
လိုက်လျောလိုက်ပါသည် … ဒီဘက်ပါးကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်သည် … ရှက်လိုက်တာ …
ဘယ်ဘက်ပါးကို ဖောင်းပြီး လက်ညှိုး ထပ်ထိုးလိုက်ပြန်သည် …
“ဟင်း … ပြီးကို မပြီးနိုင်ဘူး”
လင်းလင်း … ထပ်နမ်းလိုက်ပါသည် …
အောင်ကျော်ထက် မရဲ့ နဖူးပြောင်ပြောင်လေးကို နမ်းလိုက်သည် … နောက် ညာဘက်ပါး … ဘယ်ဘက်ပါး … အချစ်တံဆိပ် ခပ်နှိပ်ပစ်လိုက်သည် … လင်းလင်းအတွက် … အောင်ကျော်ထက်သည် … အချစ်ဦး … အနမ်းဦး … စင်စင်ကြယ်ကြယ်နေပြီး ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ အပျိုဘ၀မှာ အနမ်းဦးကို ဒီတစ်သက် မမေ့နိုင်တော့ … နှလုံးသားထဲတွင် စွဲထင်သွားပြီ …
“မ … ကျွန်တော့်ကို ချာတိတ်လို့ မခေါ်နဲ့”
“အံမယ် … ချာတိတ်ကို ချာတိတ်ပဲ ခေါ်မှာပေါ့ … ဘယ်လိုခေါ်ရမှာတုန်း”
“မောင် လို့ ခေါ် …”
“ဟာ … ဟ … မောင်တဲ့ … သူ့ကိုယ်သူ … ခွိ … မခေါ်နိုင်ပေါင်”
“မခေါ်ဘူးဆိုရင် ..” အသံလေးက ပြတ်သွားသည် … လက်နှစ်ဖက်က လင်းလင်းမျက်နှာ ဖူးဖူးလေးကို ကိုင်ပြီး နှုတ်ခမ်းပါးပါးလေးကို အောင်ကျော်ထက် နှုတ်ခမ်းချင်းထပ်ပြီး ဆွဲငုံပစ်လိုက်သည် … လင်းလင်း ရုန်းလိုက်သည် …
“ဟင့်အင်း … မလုပ်ပါနဲ့တော့ … လင်း … ရှက်တယ်ကွာ”
“ကျော် … လို့ ခေါ်မယ်ကွာ”
ကျော် … မ ရဲ့ တောင်းပန်သံလေးကြောင့် လက်ကို လျှော့ပေးလိုက်မိသည် … လင်းလင်း … အသာရုန်းပြီး
“လာ … ထ ဖျားတော့မှာပဲ … ခေါင်းကသွေးတွေကလည်း မတိတ်သေးဘူး”
လင်းလင်းက ဆွဲထူလိုက်သည်ကို … မထချင်ထချင်နဲ့ … ကျော်ထလိုက်သည် … ကျော်လက်ကို ဆွဲထားရင်း … ရေချိုးခန်းအပြင်ကို ထွက်လိုက်သည် … မျက်နှာသုတ်ပ၀ါကို ယူပေးပြီး …
“ရေတွေ သုတ်ထားနော် … အကျီ င်္သွားယူလိုက်အုံးမယ်”
ဖေဖေ့ အကျီ င်္နှင့် ပုဆိုးနောက်တစ်ထည် … အမြန် သွားယူလိုက်သည် …
အကျီ င်္တွေကို လှမ်းပေးရင်း …
ဗီဒိုထဲမှ ည၀တ် ဂါဝန်နောက်တစ်ထည်ကို ထုတ်၍ ဟိုဘက်ခန်းမှာ အမြန်သွားလဲလိုက်သည် ... လင်းလင်း အခန်းပြန်ရောက်လာတော့ … ချာတိတ်လဲ အ၀တ်လဲပြီးနေပြီ …
“ခဏ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်နေအုံးနော် … စိတ်ပြေသွားရင် ထမင်းစားခန်းထဲလာခဲ့ သိလား”
“ဟုတ် … မ”
လင်းလင်း နပ်သွားပြီ … သူဆက်နေလျှင် … အောင်ကျော်ထက် ပိုကဲလာတော့မည် … ပေါင်ကြားက ချာတိတ်ပစ္စည်းက ထောင်နေဆဲ … အ၀တ်တွေကို အမြန်သိမ်းကျုံးကောက်ပြီး … ထမင်းစားခန်းထဲက … အ၀တ်လျှော်စက်ထဲသွားထည့်လိုက်သည် … မိနှင်းကတော့ အကဲခတ်နေသည် …
“ကွေကာအုပ်ကို ပူပူလေး ဖျော်ထားနော်”
“ဟုတ်ကဲ့ … မမ”
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတစ်လုံးရယ် … ဒီကိုဂျင်တစ်လုံးရယ် … ရေတစ်ခွက်ခပ်ပြီး … အောင်ကျော်ထက်ကို သွားပေးလိုက်သည် … ချာတိတ်ကတော့ ခုနက အဖြစ်အပျက်ကြောင့် လင်းလင်းဆူမှာကို နည်းနည်း ရွံ့နေသည့် ပုံစံ …
“ဆေးသောက်လိုက်နော် … တော်ကြာ ဖျားနေအုံးမယ်”
ရေခွက်ကို လှမ်းယူပြီး ဆေးသောက်လိုက်သည် … လင်းလင်း အခန်းထဲတွင် မနေရဲ … တစ်ခါသေဖူး ပျဉ်ပိုးနားလည်သွားပြီ … ထမင်းစားခန်းထဲ ပြန်လာပြီး အ၀တ်လျှော်စက်ကို ကြည့်လိုက်သည် … ချက်ခြင်းကြီး သွေးအေးဖို့ မလွယ်ပေမယ့် … လင်းလင်းက အရွယ်ရောက်ပြီးသား မိန်းကလေးတစ်ဦး … မဖြစ်သင့်ကို မဖြစ်ရအောင် … တားနိုင်သော သတိတရားရှိသည် … နည်းနည်းတော့ လန့်သွားသည်ကား အမှန်ပင် … အခန်းဝနား ပြန်သွားပြီး …
ကျော် … ထမင်းစားတော့မလား”
နမိတ်ပြ မေးခွန်း မေးလိုက်ခြင်းပင် … အမှန်က အောက်က ချာတိတ် ငြိမ်သွားပြီလားဟု မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် … အောင်ကျော်ထက်ကလည်း … ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ် … ဒီလောက် သောင်းကျန်းတော့ … မ စိတ်ဆိုးသွားပြီ ထင်တယ် … တကယ်တမ်းဆို … မကို နည်းနည်းတော့ ကြောက်သည် … အသက်ချင်းကွာနေတာက တကြောင်း … အရမ်းချစ်နေတော့ … မုန်းသွားတာစိုးတာက တကြောင်း … ဒီလိုမျိုး အရမ်းသောင်းကျန်းလိုက်တော့ … ပိပိပြားပြားနေခဲ့တဲ့ လင်းလင်းကို … စော်ကားသလို ဖြစ်နေပေပြီ …
“ထမင်းစားခန်းကို … လိုက်ခဲ့နော်”
လင်းလင်းတို့ အိမ်လေးက ကွန်ဒိုတော့မဟုတ် … အခန်းကတော့ တော်တော်ကျယ်သည် … နောက် ဖေဖေက နှစ်ခန်းဆက် ၀ယ်ထားလို့ ပိုကျယ်သည် … အခန်းဖွဲ့ပုံလေးကလည်း လှသည် … ၀င်ဝင်ချင်း ဧည့်ခန်း … ဧည့်ခန်းမှ အတွင်းဝင်လျှင် ညာဘက်တွင် ဘုရားခန်း … ဘယ်ဘက်က ဖေဖေတို့ အိပ်ခန်း … နောက်တစ်ခန်းက … လင်းလင်း အိပ်ခန်း … လင်းလင်း အခန်းရှေ့က … ဧည့်သည်တွေလာလျှင် တည်းဖို့ အခန်း … နောက်နှစ်ခန်းမှာ တစ်ခန်းက စတိုခန်း … နောက်တစ်ခန်းက မိနှင်းအိပ်သည် … နောက်ဆုံးမှာ ထမင်းစားခန်းနဲ့ မီးဖိုချောင် … ထမင်းစားခန်းထဲတွင် လင်းလင်းတို့ နှစ်ယောက်စာအတွက် … ထမင်းဝိုင်းကို မိနှင်းက သေချာပြင်ထားပေးသည် … မိနှင်းလက်ရာက ကောင်းသည် … မေမေက သေချာသင်ပေးထားသည်ကို မိနှင်းကလည်း ဂရုတစိုက် နာခံသည် … ချက်ပြုတ်သည် … ကြက်သားဟင်း၊ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်၊ ချဉ်ရည်ဟင်းတစ်ခွက် … နောက် မမ ကျော်ခိုင်းထားသည့် ၀က်အူချောင်းကြော် … လင်းလင်း ၀က်အူချောင်းကို ပါးပါးလေးဖြစ်အောင် လှီးပြီး ပန်းကန်ထဲ ပြန်ထည့်လိုက်သည် … အောင်ကျော်ထက် ထမင်းစားခန်းထဲ ၀င်လာသည် …
ဖင်ထိုင်ခုံလေးကို အနောက်ကို ရွှေ့ပေးသည် … အောင်ကျော်ထက် ထိုင်လိုက်သည် … ဟင်းနံ့လေးက သင်းနေသည် … ပြင်ထားပုံကလည်း ချစ်စရာ … စားချင်စဖွယ် … ဘေးနားမှာ … လင်းလင်း လာထိုင်သည် … တစ်ချက်ပြုံးပြပြီး … ချာတိတ်ရှေ့ ကြွေပန်းကန် မှောက်ထားတာကို လှန်ပြီး … ထမင်း အနေတော် ခူးထည့်ပေးလိုက်သည် … လင်းလင်း ပန်းကန်ကိုလည်း လှန်ပြီး ထမင်းခူးထည့်လိုက်သည် …ကြက်သားတုံးလေးကို အသားဖဲ့ပြီး … အောင်ကျော်ထက် ပန်းကန်ထဲ ထည့်ပေးသည် … ကန်စွန်းရွက်ကြော်နည်းနည်းကိုလည်း ထည့်ပေးသည် … အကြင်နာတွေ … ချာတိတ် ကြွေသွားသည် … မကိုလည်း ပိုချစ်သွားသည် … အော် ငါ့ကို ဂရုစိုက်ပါလား … ကြင်နာပါလား … ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ … ထမင်းစားလိုက်သည် …
၀က်အူချောင်း ပါးပါးလေးကို … ထပ်ထည့်ပေးပြီး …
“ကျော် … ကြိုက်တဲ့ ၀က်အူချောင်း …”
မရဲ့ ပန်းကန်ထဲကိုလည်း ကျော် … ၀က်အူချောင်း ပြန်ထည့်ပေးသည် … နောက် ကြက်သားထဲမှ အသည်းတုံးလေးကိုလည်း … မ ထဲ ထည့်ပေးလိုက်သည် … တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အရမ်းကြင်နာနေကြသည် … အရမ်း ဂရုစိုက်နေကြသည် … ချစ်စ ခင်စ ကိုး … လင်းလင်း ဖန်ခွက်ထဲ ရေအေးလေး ထည့်ပြီး ကျော့် ပန်းကန်နား ချပေးလိုက်သည် …
ကျော်နဲ့ မမ .. နှစ်ယောက်သား ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ ထမင်းလက်ဆုံ စားနေချိန်မှာ …
စုံထောက်ရူး မိနှင်း အကြီးအကျယ် အံ့အားသင့်နေသည် … ဟယ် … ဒီကောင်က တော်တော် စွမ်းတာပဲ … မကို သွေးထွက်အောင် လုပ်တာတောင် … မကြောက်တဲ့ အပြင် … မမ နဲ့ အတူတူထမင်းစားနေသေးတယ် … နောက် … မမကို မချော့တဲ့ အပြင် … မမ ကတောင် ချော့နေရတဲ့ ပုံစံ … မမ ကိုလည်းအံ့ပါရဲ့ …သွေးတောင်ထွက်တယ်ဆိုတော့ … တော်တော့ကို နာမှာ … စိတ်မနာတဲ့အပြင် … ဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့ ထမင်းအတူ ရီရီမောမော စားနိုင်တယ် … မိနှင်းဆိုရင်တော့ … ဒီလိုကောင်မျိုး အမှုန့်ကြိတ်ပစ်လိုက်မယ် … မိနှင်းရဲ့ တွေးခေါ်ချက်တွေက … မြစ်ကြီးနားနဲ့ ထားဝယ်လို … ဝေးတာမှ အဝေးကြီးဖြစ်နေပြီ … မမ ဘက်ကနေ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး … စိတ်ထဲကနေ အောင်ကျော်ထက်ကို ဓါးကြိမ်းကြိမ်းနေသည် …
“တော်ပြီ … မ … ဗိုက်ဝသွားပြီ”
“ရော့ ကွေကာအုပ်သောက် … အားရှိသွားအောင်”
ကွေကာအုပ်သောက်နေတုန်း … လင်းလင်း ပန်းကန်တွေကို သိမ်းပေးလိုက်သည် … ကျော် … မ … လုပ်သမျှကို ငေးကြည့်နေမိသည် … မ … ကတော်တော် အိမ်မှုကိစ္စနိုင်မည့်ပုံစံ … ပန်းကန်တွေ သိမ်းနေသည့်ကြားက လင်းလင်း … ကျော့်ကို ပြုံးပြလိုက်သည် …
“Laptop ပြင်တာမပြီးသေးဘူးမလား … ထားလိုက်ပါတော့ … နောက်နေ့မှ ဆက်လုပ်လိုက်နော်”
လင်းလင်း အလိမ္မာနည်းနဲ့ အိမ်ပြန်ပို့သည် ... နောက်တစ်နေ့ အိမ်လာခိုင်းသည် … ချစ်တော့လည်း ဥာဏ်နီဥာဏ်ပြာ ထွက်နေသည် … ထွက်မှာပေါ့ … မနက်ဖြန်ဆို … ဖေဖေတို့ပြန်လာတော့မည် … ကျော့်ကို အိမ်လာခိုင်းတာက အလုပ်ပြီးရင်လည်း ထပ်တွေ့ချင်သည် … ဖေဖေတို့ကိုလည်း သမီးချစ်သူက ကျော်ပါ ဆိုပြီး ကြွားချင်သည် …
ကျော်ကတော့ သဘောမပေါက် … မ က သူ့ကို နှင်တယ်လို့ ထင်နေမိသည် … ဒါပေမယ့်လည်း … မ သဘောပါ … ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သည် … အချိန်က ၈ နာရီကျော်နေပြီ …
နှဖူးမှာရော … လက်မှာပါ .. အရေပြားတွေ စုတ်ပြဲနေသည် … မိုးက အေးတော့ နည်းနည်း ကိုက်ချင်လာသည် … အောက်ဆုံးထပ်ရောက်တော့ မ နေတဲ့ … သုံးထပ်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည် … မ … က ပြုံးပြပြီး တာ့တာ ပြနေသည် … ပြန်ပြီး တာ့တာလုပ်ကာ … လက်ကို အာဝါးပေးပြီး … လေဖြင့်မှုတ်သည့်ပုံစံ လုပ်ပြလိုက်သည် … အနမ်းပျံလေးနှင့် နှုတ်ခွန်းခြွေလိုက်သည် … တာ့တာ … မ … ရီနေသည် … ကျော် … အရမ်းပျော်သည် … နဖူးမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဆိုပေမယ့် … အမှတ်တရဖြစ်သွားသည် … ဒီနေ့ ဇန်န၀ါရီ ၂၈ … အရမ်းချစ်တဲ့ မ က … ကျော့်ကို ချစ်ပါသည်တဲ့ … အရမ်းချစ်တယ် … မ ရယ် …
ကျော် … လမ်းထိပ်ရောက်ပြီး မမြင်ရတော့သည် အထိ … လင်းလင်း ကြည့်နေမိသည် … လေးငါးလှမ်းလောက်သွားလိုက် … လင်းလင်းကို … လက်ပြလိုက် …လုပ်သွားသော ကျော် … ဟွန်း … ကလေးကျနေတာပဲ … ရင်ထဲမှာ … ကျေနပ်ပီတိ ဖြစ်မိသည် …၀ရံတာကနေ … အိမ်ခန်းထဲကို ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြန်ဝင်လာသည် … တံခါးကို သော့ချပြီး ပိတ်လိုက်သည် … ရေချိုးခန်းထဲမှာ … မျက်နှာလှလှလေးကို မျက်နှာသစ် ဆပ်ပြာခရမ်ဖြင့် လိုက်တို့လိုက်သည် … ရေနည်းနည်းစွတ်ပြီး ပွတ်မိပြီးတော့မှ … ငါ့ပါးကို … ကျော် နမ်းသွားတာပါလား … လူဆိုး … ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးလိုက်မိသည် … ခြေထောက်လက်တွေ … ဆေးပြီး … မျက်နှာသုတ်ပ၀ါနဲ့ သုတ်လိုက်သည် … အိပ်ယာပေါ်ကို ပစ်လှဲချလိုက်ရင်း … ကျော့်အကြောင်းတွေးမိသည် … ညနေက ဘာတွေ ဖြစ်သွားသည် မသိ … အဖြစ်အပျက်ကလည်း မြန်လွန်းသည် … အယောင်ယောင်အမှားမှားနှင့် တလွဲတွေ … ရင်တွေ တဇက်ဇက်ဖြစ်သွားစေသည် … ကျော်ကလည်း ဆိုးသည် … မရမက အဖြေတောင်းသွားသေးသည် … ကျော့်ကို လင်းလင်း … အဖြေပေးလိုက်မိသည် … အဖြစ်အပျက်လေးကို စဉ်းစားရင်း … လင်းလင်း … ကိုယ့်ရင်သားကို ကိုယ် သတိထားမိသည် … ပက်လက်ကလေး လှန်နေသော်လည်း လင်းလင်းရင်သားက ထွားတော့ ဖောင်းမို့နေသည် … ထိပ်ဖျားလေးက နည်းနည်းလေးနာနေသည် ထင်သည် … ကျော် … လူဆိုး … သူ့နဖူးက သွေးတွေကို သုတ်ပေးနေတာကို … လင်းလင်း နို့ကို တအားစို့သွားသည် … ဒီကတော့ စေတနာနဲ့ … သူက ဒါပဲချောင်းနေသည် … နို့ခံရသည့် ပထမဆုံးအဖြစ်အပျက်လေးက … အပျိုစင် တစ်ဦးအဖို့ … ပြန်တွေးတိုင်း … သွေးဆူစေသည် … ကျော် … နို့ကို ကုန်းစို့လိုက်တော့ … နို့သီးလေးနွေးခနဲ ဖြစ်သွားပြီး … ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထစေသည် … လင်းလင်း အဲဒီတုန်းက ရုန်းလိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် … နို့စို့ခံရတာကို မခံနိုင်လွန်းလို့ရုန်းမိတာပါ … စိတ်ထဲမှာတော့ ကျော်လုပ်သမျှကို ခံချင်နေမိသည် … ကြောက်တော့ကြောက်နေမိသည် … ဒီအသက်အရွယ်ရောက်တယ်အထိ ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ အပျိုစင်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်လေးကိုလည်း နှမြောသည် … ကျော်ရဲ့ အထိအတွေ့ကို သာယာမိတာက အမှန် … ဝေခွဲမရ … ကျော် တစ်ကယ်တမ်း တောင်းဆိုလာလျှင် လင်းလင်း တကယ်ပေးနိုင်မှာလား …
လင်းလင်း … ညာဘက်နို့က … နို့သီးလေးကို … ဘယ်လက်နဲ့ စမ်းကြည့်သည် … ချာတိတ် စို့သွားလို့ … နို့သီးပန်းရောင်လေးက နီရဲနေသည် … ဟင်း … နာနေလို့ … လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ ပွတ်လိုက်မိသည် …
“ဟာ … ဟင့်”
အခွင့်အရေး ချောင်းနေသော ရာဂနတ်ကား … ဒီတစ်ကွက်မှာတော့ … အပျိုလေးကို ဇာတ်သွင်းတော့သည် …
“ကျော် … ကျော်”
ပါးစပ်က တတွတ်တွတ် ခေါ်နေရင်း … လက်က ပေါင်ကြားထဲကို ရောက်သွားသည် … လင်းလင်းရဲ့ အရမ်းလှတဲ့နေရာလေးပေါ့ … မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် အရှက်တရားစုဝေးနေတဲ့နေရာ … ဖောင်းမို့နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုက … မာတင်းနေသည် … ဒီနှစ်ခုကြား အကွဲကြောင်းလေးက စိုရွှဲနေသည် … ဟင်း … အကွဲကြောင်းလေး ထိပ်က အစေ့လေးက … မာပြီး ထောင်နေသည် … အစေ့လေးကို လက်ကပွတ်လိုက်ချင်သည် … ပွတ်လည်း ပွတ်လိုက်ရော …
“အင် … ဟာ”
အောက်က မွေ့ယာနဲ့ လွတ်သွားသည်အထိ … ဇတ်ကနဲ လင်းလင်း တင်သားနှစ်ခု ကော့ပစ်လိုက်သည် … အစေ့လေးကို ပွတ်ပြီးရင်းပွတ်နေမိသည် … တင်သားနှစ်ခုကလည်း ကြွလိုက် … ပြန်ကျလာလိုက် … ဇတ်ကနဲ ပြန်ကြွလိုက် … နဲ့ ရမ်းခါနေသည် … မျက်စိလေးကို မှိတ်ထားပြီး … ဖီလင်တက်နေသည် … အတွေးထဲမှာ … ဒီနေရာလေးကို … ကျော် … သူ့ဟာကြီးနဲ့ ထိုးသွားသည် … ပွတ်ဆွဲသွားသည် … နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုရဲ့ အတွင်းက အသားနုလေးတွေက ရှုံ့ချည်ပွချည်နဲ့ … အလုပ်များနေသည် … ၀တ်ရည်တို့ကား ဒလဟော ဆင်းနေဆဲ … အတွင်းက အရမ်းယားနေသည် … တစ်စုံတစ်ခု ထိုးထည့်လိုက်ရင်တော့ … ငြိမ်သွားနိုင်သည် … လင်းလင်း ဒါတော့ မရဲ … တော်ကြာ လက်သည်းနဲ့ ထိုးမိမှဖြင့် အတွင်းမှာ အနာဖြစ်သွားမည် … အစိလေးကို ပွတ်လွန်းအားကြီးတော့ … အစိလေးက နီရဲပြီးထောင်နေသည် … သာမန်ထက် အနည်းငယ် ပိုထွက်လာပြီး အရမ်းမာနေသည် … ရေနစ်သူလို မှီရာလှမ်းဆွဲသလို … လင်းလင်း ဘယ်ဘက်လက်ကလည်း … ရင်သားကို ဆုပ်နယ်မိသည် …ဒီလိုနယ်တော့ အောက်ကဟာက … ပိုယားသည် … ပိုယားတော့ ပိုပွတ်မိသည် … ပိုပွတ်မိတော့ … ရင်သားကို တအားဆုပ်နယ်ပစ်လိုက်သည် … လင်းလင်းခမျာ မုန့်လုံးစက္ကူကပ်နေသည့် ဘ၀ပါလား …
အပျိုလေး … အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ သောင်းကျန်းနေသည် … ကျော်တဲ့ ကျားလေးရဲ့ သောင်းကျန်းမှုတွေကြောင့် နိုးထလာတဲ့ ရမက်မီးကို လင်းလင်း မငြှိမ်းနိုင်တော့ …
လင်းလင်းရဲ့ ရမက်သံလေးက တိုးတိုးလေးနဲ့ … ဆက်တိုက်ထွက်နေသည် …
“ကျော်ရယ် … မလုပ်ပါနဲ့”
“အိုး … ကျော်ရယ်”
ချစ်သူကို တမ်းတနေရင်း … လက်တွေက စက္ကန့်မလပ်လှုပ်ရှားနေသည် ... ကာမအရှိန်သည် ... တဖြေးဖြေးနဲ့ အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်လို့လာသည် ... ညည်းသံလေးက ပိုစိတ်လာသလို ... တစ်ကိုယ်လုံး လှုပ်ယမ်းနေတာကလည်း ...ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ ... မျက်နှာလေးက သွေးရောင်လေးလွှမ်းပြီး ပန်းရောင်လေးဖြစ်နေသည် ... မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အလှဆုံး ... ချစ်စရာအကောင်းဆုံး ... မြတ်နိုးဖို့အကောင်းဆုံး ... အချိန်လေးပါ ... ခေါင်းလေးက ဒီဘက်ကို ယမ်းလိုက် ... ဟိုဘက်ကို ယမ်းလိုက် ... ခံစားချက်အတိုင်း ... နစ်မြောနေသည် ... အတွေးတိမ်တိုက်ထဲမှာ ... ကျော်နဲ့ ပျော်မြူးနေတုန်း ... အာခေါင်က ရေငတ်သလို ဖြစ်လာသည် ... ရင်ထဲမှာ တစ်လိပ်လိပ်နဲ့ ပြင်းထန်လာသည် ...အကြောတွေက တဖြေးဖြေး တုံ့ဆိုင်းကုန်သည် ... ခြေချောင်းလေးတွေ ကုတ်ကွေးကုန်သည် ... ဖင်ကြောကို အစွမ်းကုန် ရှုံ့ပစ်လိုက်သည် ... တင်းရင်းတဲ့ ပေါင်တွေလည်း အကြောလေးတွေ ထလာသည် ... ၀ုန်းကနဲ ... အရှေ့ကို ကော့ပစ်လိုက်သည် ...
အတွင်းထဲမှ လှိုင်ခေါင်းလေးက ... အားကုန်ဆုပ်ပြီး ညှစ်ပစ်လိုက်သည် ... ၁ စက္ကန့် ... ၂ စက္ကန့် ... ၃ စက္ကန့် ... ဒီအရသာ ... ကာမအရသာရဲ့ အထွတ်အထိပ် ... ခံစားချက်တွေရဲ့ ... အနှစ်ချုပ် ...
အတွင်းထဲမှ ပြွတ်ကနဲ အရည်ထွက်သွားသည်တော့ သိလိုက်သည် … တစ်ခါ ... နှစ်ခါ ... သုံးခါ ... လူတစ်ကိုယ်လုံး လေထဲ မျောနေသလို ... အရသာက အထွတ်အထိပ်ပါလား ... လင်းလင်း ... အပျိုအဖုတ်လေးက တာဝန်ကျေပါသည် ... အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်သွားသည် ... လင်းလင်း ပြီးသွားပြီ … အပျိုလေး၏ တစ်ကိုယ်ရည် အယားဖြေမှု … အထမြောက်သွားသည် …
၀ုန်းကနဲ ခုတင်ပေါ်ပစ်ကျပြီး ... လင်းလင်း ငြိမ်သွားသည် ... အတွေးထဲမှာတော့ ... ငြိမ့်ကနဲ ငြိမ့်ကနဲ ... လောကနတ်ပြည်ရောက်နေသည် ... အင်အားတို့သည် ရုတ်ချည်းလျော့ကျသွားသည် ... ပေါင်ကြားထဲမှ အရည်တွေကတော့ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ အပြင်ကို ထွက်လာသည် ... ခုတင်လေးပေါ်မှာ အကွက်သေးသေးလေး ... ချစ်ရေအိုင်လေး ... အိပ်ယာမှ နိုးလာသလို ... အသိလေးက ၀င်လာပေမယ့် ... လင်းလင်း ... မထချင် ... မျက်စိလေးကို ဆက်လက်မှေးထားချင်သည် ... မုန်တိုင်းပြီးသွားလို့ လှိုင်းကြမ်းတွေ ငြိမ်သွားပေမယ့် ... လှိုင်းသေးသေးလေးတွေကတော့ ကမ်းကို လာပုတ်နေဆဲ ... စိတ်ထဲမှာ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်မိပါသည် ...
“ကျော်ရယ် ... အရမ်းချစ်တယ်”
အရမ်းချစ်ရတဲ့ ချစ်သူ တောင်းဆိုလာလျှင် လင်းလင်း အသက်ကိုတောင် လင်းလင်း မနှမြှော … ရက်ရက်ရောရော ပေးလိုက်ချင်ပါသည် … လင်းလင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါသည် … ဒီဟာလေးက … အရမ်းချစ်ရတဲ့ ချာတိတ်အတွက် … နောက်တစ်ခါဆို လင်းလင်း မငြင်းတော့ပါဘူး … ကျော် လိုချင်ရင် … မငြင်းဆန်ပဲ ပေးပစ်လိုက်မည် … မေတ္တာရည်လေးတွေ ထွက်သွားတော့ … ဆုံးဖြတ်ချက် ပြောင်းလွဲသွားသည် … တယ်ခက်ပါလား … မိန်းမသဘော …
ဖက်လုံးလေးကို တအားဖက်ပြီး ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်သည် … ဖက်လုံးကို ကျော်များ မှတ်နေသလားမသိ … ဖက်လုံးလေးကို ခေါင်းနဲ့ဝှေ့ပြီး ဖက်ထားပြန်သည် … လင်းလင်း … ဖက်လုံးကို ကျော် အမှတ်နဲ့ ချွဲနေသည် …
ဖုန်းသံလေး မြည်လာတော့ မှေးနေရာကနေ … လင်းလင်း ထကိုင်လိုက်သည် …
“ဟယ်လို … မ … ကျော်ပါ”
အချစ်ဦးလေး ဖုန်းဆက်တယ် … လင်းလင်း ပျော်သွားသည် …
“မနာဘူး … စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်နေတယ် … မိုးအေးလို့လားမသိဘူး ကိုက်ချင်တယ်”
ကျော် … ချွဲပြီ …သူ့မမကို … ချွဲနေသည် …
“ဟုတ် … မ … အိပ်တော့မှာလား”
“မ … ကျွန်တော့်ကို သတိမရဘူးလား”
ဟင်း … ရတာမှ သိပ်ရတာပေါ့ … ကောင်ဆိုးလေး …
“အိပ်ယာပေါ်မှာ ကျော့်အကြောင်း စဉ်းစားနေတာ”
“ဟုတ်လား … ကျော်လည်း … မ အကြောင်းစဉ်းစားနေတာ”
“အရမ်းချစ်တယ်နော် … မ”
“ချစ်တာပေါ့ … ကျော်ရဲ့ … မ ရင်ထဲမှာ ကျော် တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်”
“အလုပ်တူတူသွားမယ်လေ … ၇ နာရီလောက်ဆို … မ … နိုးနေပြီလား”
“နိုးပါတယ် … လာခဲ့လေ … မုန့်အတူတူစားကြတာပေါ့”
“မ … သိလား … မ ပေးတဲ့ အနမ်းက ကျော့် ပါးမှာ စွဲနေတယ်”
“ဟယ် … ရှက်စရာကြီး”
“ရွှတ် … ဒါပဲနော် ဂွတ်နိုက် … အရမ်းချစ်တယ်နော် … မ”
ဖုန်းထဲမှာတောင် အနမ်းလေးက ပေးသွားသေးသည် … လူဆိုး ကျော် …
“ဂွတ်နိုက် … ကျော် … အတူတူပါပဲကွာ”
ဟမ်းဖုန်းက လိုင်းကျသွားပေမယ့် … လင်းလင်းအတွေးထဲမှာ ကျော်က မထွက်သေးဘူး … အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ကျော် … သည်းကို သည်းတယ် … လူကို လုပ်ချင်သလို လုပ်သွားပြီး … လိုချင်တာလည်း ယူသွားသေးတယ် … မရမက နမ်းခိုင်းသေးတယ် … ကောင်ဆိုးလေး … ဖုန်းလေးကို ၆း၃၀ နှိုးဖို့ လုပ်လိုက်သည် … ဖုန်းလေးကို ပစ်ချပြီး … အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ …. ပန်းလေးထဲက အရည်တွေက မခြောက်သေး … တောင်ကြားလေးက မို့မောက်နေသည် … တင်းမာနေတဲ့ … တောင်ကုန်းလေးက … အရောင်ကျမသွား … သွေးတွေတိုးနေသဖြင့် … အဖြူရောင်မှ ပန်းနီရောင်လေးသို့ ပြောင်းနေသည် … ချစ်စရာလေး … အရည်တွေကြောင့် မီးရောင်အောက်မှာ … တင်းပြီး ပြောင်နေသည် … ဟယ် … ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားမိသည် … တစ်ယောက်ထဲ ရှက်သွေးနီနေသည် … အားလုံးပြီးသွားတော့မှ … ရှက်နေမိသည် … ရေချိုးခန်းထဲသွားပြီး … ဂါဝန်ကို မလိုက်သည် … ဖြူဝင်းနေတဲ့ ပေါင်တံနှစ်ခုကို အနည်းငယ် ကားပြီး ရပ်လိုက်သည် … ပေါင်ကြားက ပန်းကလေးကို အသေအချာ ရေဆေးလိုက်သည် … ရေပန်းလေးက … ရေစူးစူးလေးက … အတွင်းသားကို ထိမိလိုက်တော့ … စိတ်ထဲမှာ မနေနိုင် … အရင်တုန်းက … ဒီလိုမျိုးရေဆေးရင် သိပ်မခံစားရ … ဒီနေ့ကျမှ ထိလိုက်တာနဲ့ … စိတ်က ထလာသည် …
ကျင်ကနဲ … ကျင်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီး … စိတ်က ပြန်ထလာသည် … လင်းလင်း … ဒူးလေးတွေ ယိုင်လာသည် … စိတ်ကို အနိုင်နိုင်ထိန်းပြီး … အိပ်ယာဆီပြန်လာမိသည် … မျက်စိထဲက … ကျော့်မျက်နှာလေးကို မထွက် … ဒီအိပ်ယာလေးပေါ်မှာ … လင်းလင်း ပန်းလေးကို … ကျော့်ဟာနဲ့ ထောက်သွားတာ … ပြန်မြင်လာသည် … ဟင်း … ဘာလို့များ … တဆုံးမသွင်းတာလဲ ကျော်ရယ် … ဒီလို ဆန့်တငင်လုပ်သွားတော့ … လင်းလင်း အိပ်လို့မရပြီ … လင်းလင်းစဉ်းစားနေသည် … ကျော့် ထိပ်ဖူးက သေးသေးလေးမဟုတ် … ဂေါ်လီလုံးလို … ဖောင်းကားနေသည် … ဒါကြီးသာ လင်းလင်းဟာထဲ ၀င်လာရင် ဆန့်ပါ့မလား … အို … မသိပါဘူး … တလိပ်လိပ် ဖီလင်ကတက်လာတော့ … လက်က ပေါင်ကြားထဲ ပြန်ရောက်သွားသည် … အစေ့လေးက ထောင်နေဆဲ … ကျော် လင်းလင်းနို့စို့သွားတာကိုလည်း … တရေးရေး ပြန်မြင်လာသည် … ပက်လက်ကလေး လုပ်ရတာ အားမရ … ကိုယ်လုံးကျစ်ကျစ်လေးကို ညာဘက်စောင်းပြီး …. ဖက်ခေါင်းအုံးလေးပေါ် ဘေးတစ်စောင်းခွလိုက်သည် … ဖက်ခေါင်းအုံးကို … ကျော်များ … ထင်နေလားမသိ … လုံးကျစ်နေတဲ့ တင်သားနှစ်ခုက ဒီလိုမျိုး ဖက်ခေါင်းအုံးကို ခွထားတော့မှ … နှစ်ခုက သိသိသာသာ ကွဲကာ ဖောင်းမို့နေသည် … ဖြောင့်တန်းနေတဲ့ ပေါင်လေးက … ဖက်လုံးကို တအားဖိထားသည် … ညာဘက်လက် ဖက်ခေါင်းအုံးအောက်မှနေ၍ ပိုက်ပြီး ဖက်ထားသည် ... ဘယ်ဘက်လက်တော့ … ပန်းလေးကို ပွတ်သပ်နေဆဲ … ဒီလို ဘေးတစ်စောင်း ပြောင်းလိုက်တော့ … နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုက ပိုပြီး ကပ်သွားသည် … ကြပ်သွားသည် … လက်က မရမက အစေ့လေးကို လိုက်စမ်းနေသည် … ပေါင်နှစ်ကို ဘေးတစ်စောင်းနဲ့ အစွမ်းကုန် ဖြဲလိုက်တော့ … နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကြားက အတွင်းသားနုနုလေး ပေါ်လာသည် … ပန်းရောင်လေး … လင်းလင်းရဲ့ … ဘ၀ပေး ကုသိုလ်ကား .. ကောင်းလှသည် … တချို့မိန်းကလေးတွေက ရုပ်လေးက ဖြူစွတ်ဝင်းပနေပေမယ့် … ဒီနေရာလေးက မဲနေတတ်သည် … လင်းလင်းဟာက မမဲ … ဖြူဝင်းနေသည် … အတွင်းသားနုနုလေးက … နေမထိ လေမထိ … ဘယ်ယောက်ျားလေးနှင့်မှ မဆက်ဆံဖူးသော အပျိုပစ္စည်းစစ်စစ် ... ပန်းနုရောင်လေး ... အသက်သာ ၂၈ ကျော်လာသည် ... အတွင်းသားလေးတွေက ... ၁၆ နှစ် အပျိုဖြန်းလေးအတိုင်း နုဖတ်နေသည် … အစေ့လေးကိုသာ သဲသဲမဲမဲပွတ်ရင်း … ကျော့်ကို တမ်းတမ်းတတ ရေရွတ်နေသည် … ဖက်လုံးအောက်က ညာဘက်လက်က ဖက်လုံးလေးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားသည် … အားနှင့် ဆုပ်ကိုင်ထားသဖြင့် … ဖြူဝင်းနေတဲ့ လက်လေးရဲ့ လက်ဆစ်နီနီရဲရဲလေးတွေတောင် ပေါ်နေသည် … ဖီလင်ကတက်လွန်းသဖြင့် … တင်သားတွေက ကော့ကော့ပေးနေမိသည် … လင်းလင်း စိတ်ကူးထဲမှာတော့ … ကျော်က သူ့အစေ့လေးကို ပွတ်သပ်နေသည် … လင်းလင်း မခံနိုင် …
“ဟင့် … ကျော်ရယ်”
“ဟာ … ကောင်းတယ် … အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ”
“ဟာ … ဟင့် … ရှီး”
ပိုကြမ်းလာသည် … ကာမအရသာဆိုတာ … အစ လုပ်မိရင် ရပ်ဖို့ကား ခက်သည် … ဒီအရသာကို သိသည် … တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ရှိတဲ့ … သွေးကြောလေးတွေထဲမှာ … ပရွက်စိပ်ထောင်သောင်းများစွာ လျှောက်သွားနေသလို … ရွစိရွစိဖြစ်လာသည် … ရင်ခုန်သံတွေကား အကျယ်ဆုံး မြည်ဟည်းနေသည် … အကြောလေးတွေ တုံ့ဆိုင်းသွားသည် …
အာရုံထဲမှာ တစ်ခုထဲရှိသည် … ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ရမက်ရည်တွေ ထွက်ဖို့ … ဒါထွက်သွားလျှင် … လင်းလင်း နတ်ပြည်ရောက်ပြီ … ပန်းကလေးကား … ၀တ်ရည်တွေ ထွက်ဖို့ အစွမ်းကုန် ရှုံ့ပစ်လိုက်သည် …
တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ရှိတဲ့အကြောတွေ တုံ့ဆွဲသွားပြီး … ဆစ်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် … ၁ ခါ … ၂ ခါ … ၃ ခါ … ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်သည် … အရသာ … ဒီလောကမှာ အထူးဆန်းဆုံး အရသာ … မေ့ဖျောက်လို့ မရ … တမ်းတမ်းတတ ဖြစ်စေရမည့် အရသာ … လင်းလင်း သိသွားပြီ … လင်းလင်း ငြိမ်သွားသည် … ရင်ခုန်သံတွေကတော့ တဒိန်းဒိန်းဖြစ်ဆဲ … လူ့လောကရဲ့ တခြားနေရာကို ရောက်သွားသလို … ငြိမ့်ငြိမ့်လေး … လင်းလင်း ပန်းလေးထဲက … လက်ကျန် အရည်လေးတွေကတော့ တအိအိနဲ့ ထွက်နေဆဲ … ခန္ဓာကိုယ်မှာ အင်အားမရှိတော့ … လင်းလင်း မျက်စိမှိတ်ပြီး … ဆက်မှိန်းနေဆဲ … ဒီလိုနဲ့ … ဒီလိုနဲ့ … လင်းလင်း အိပ်ပျော်သွားသည် … အိမ်မက်ထဲမှာ ကျော်က ဆက်သောင်းကျန်းနေဆဲ … တော်တော်ဆိုးပါလား … ကျော်ရယ် …
တီ … တီ … တီ …
မနက် ၆း၃၀ … ဖုန်းက နှိုးသံလေးကြောင့် ဆတ်ကနဲ … လင်းလင်း နိုးလာသည် …တခြားနေ့တွေဆို … နှိုးစက်သံကို ပိတ်ပြီး ပြန်အိပ်နေကျ … ဒီနေ့တော့ ကျော်လာမည်တဲ့ … ချစ်သူအသစ်စက်စက်လေးနဲ့ မနက်စာအတူတူစားရအုံးမည် … မျက်နှာလှလှလေးကို သေချာသစ်ပြီး သွားတိုက်လိုက်သည် … ရေပန်းကို အကုန်ဖွင့်ပြီး … ဆပ်ပြာရည်ကို ပိုထည့်ကာ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဆပ်ပြာတိုက်လိုက်သည် … မနေ့ကထက် လင်းလင်း ကိုယ်လေးက ပိုမွှေးနေသည် … တစ်ကိုယ်လုံးကို မျက်နှာသုတ်ပ၀ါနဲ့ သေချာသုတ်လိုက်သည် … လင်းလင်း ရင်သားကို ပိုပြီးပုံပေါ်စေသော ဘရာစီယာကို ရွေးပြီး ဗီဒိုထဲမှ ထုတ်လိုက်သည် … ဘယာစီယာကို ခါးနောက်ကို ပြောင်းပြန်ပတ်လိုက်သည် … အရှေ့တွေ ချိတ်ကို သေချာချိတ်သည် … ၀င်းမို့နေသော ရင်နှစ်မွှာက … လေထဲမှာ မို့မို့လေး ဖောင်းနေသည် … ဘယာစီယာကို ရှေ့ဆွဲလှည့်လိုက်သည် … ဘယာစီယာက ရင်နှစ်မွှာကို အုပ်မိအောင် နည်းနည်းအပေါ်ကို တင်လိုက်သည် … ကြိုးကြားထဲကို လက်လျှိုပြီး ကြိုးကို … ပခုံးပေါ်တင်လိုက်သည် … ပန်းရောင် ဘရာစီယာက … လင်းလင်းရဲ့အလှတရားကို ပိုကြွစေသည် … ပိုပြီးဖောင်းမို့စေသည် … လင်းလင်းရင်နှစ်မွှာကား … ဘရာစီယာအောက်မှာ ရုန်းထနေသည် … တင်းတင်းလေး … လှမှလှ … ရင်နှစ်မွှာကြားကို … လင်းလင်း ရေမွှေးဆွတ်လိုက်သည် … ဘရာစီယာ ပြီးတော့ ပင်တီ … မိန်းမ အ၀တ်တွေက ရှုပ်ကို ရှုပ်ပါတယ် … ပင်တီလေးကိုလည်း နည်းနည်းကျပ်တဲ့ အထည်ကို ရွေးလိုက်မိသည် … အရောင်က ပန်းရောင် … ခြေထောက်လှလှလေးကို မြှောက်ပြီး စွပ်လိုက်သည် … ပင်တီလေးက … ဖြောင့်တန်းနေတဲ့ ပေါင်တံအတိုင်း … အပေါ်ကိုတက်လာသည် … လင်းလင်းရဲ့ ဖောင်းကြွနေတဲ့ ပန်းလေးကို ပင်တီလေးက အုပ်ပစ်လိုက်သည် … တင်းပြီးကားစွံ့နေတဲ့ တင်တွေက ပင်တီ အကြပ်ဝတ်လိုက်တော့ ကောက်ညှင်းထုပ်လို ဖြစ်သွားသည် … တင်းတင်းလေး … ထုံးစံအတိုင်း … ရုံးတက် အကျီ င်္အစိမ်းနုရောင်လေး ၀တ်လိုက်သည် … ကြယ်သီးတပ်သည် … စကဒ်ကိုလည်း သေချာဝတ်သည် … မှန်ရှေ့မှာ ကိုယ်ကို တပတ်လှည့်ကြည့်သည် … ဟိုဆွဲ … ဒီဆန့်နဲ့ … သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြင်လိုက်သည် … ရေမွှေးဆွတ်သည် …
ဘာလို့ အတွင်းခံအ၀တ်တွေက အစ … လင်းလင်း သေချာ ရွေးချယ်နေတာလဲ … လင်းလင်း မသိစိတ်ထဲမှာ … ကျော့်ကို ဆွဲဆောင်ချင်နေသည် … ကျော့်အတွေးတွေ … အာရုံတွေ အားလုံး လင်းလင်းပဲ ဖြစ်ချင်သည် … ဒါကို အပြစ်ပြောမရ … ကိုယ်ချစ်တဲ့လူက ကိုယ့်ကိုပဲ သည်းသည်းလှုပ်ဖြစ်နေတာ မြင်ချင်သည် … ကိုယ့်ကိုပဲ ဂရုစိုက်စေချင်သည် … မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ... အတ္တ ... မျက်နှာလှလှလေးကို သေသေချာချာလေး ချယ်သလိုက်သည် ... အရင်က ခရမ်သာ လိမ်းနေကျ ... ဒီနေ့တော့ ... မိတ်ကပ် ပါးပါးလေး လိမ်းလိုက်သည် ... ၀င်းမွတ်နေတဲ့ မျက်နှာလေးက ... မြင်သူကို ငေးသွားစေသည် ... နှုတ်ခမ်းပါးပါးလေးကို အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီလေး ... ဆိုးပေးလိုက်သည် ... နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကို ဖိကပ်ပြီး ... ညှိလိုက်သည် ... ချစ်စရာနှုတ်ခမ်းလေးက ... ပါးလျခြင်း ... ပြတ်သားခြင်း ... အထက်တန်းကျခြင်းကို ဖော်ပြနေသည် ... ကျော် သာ တွေ့လျှင် ... ဖက်နမ်းပစ်လိုက်မည်ကား အမှန် ... စိတ်ကြိုက်အလှပြင်ပြီးနောက် မီးဖိုချောင် သွားပြီး ...
“မိနှင်း ... ကြက်ဥ နှစ်လုံးကြော်ထားနော် ... မကြက်တကြက်လေးနော်”
“ဟုတ်ကဲ့ ... မမ”
သူလာလျှင် ပေါင်မုန့်နှင့် ကြက်ဥကြော် စားရအောင်လို့ပါ ...
တီ … တောင် …
မမ တံခါးဖွင့်လိုက်တော့ …
အံ့သြသွားပေမယ့် … ကျေနပ်သွားသည် … နေ့တစ်နေ့ရဲ့ အစမှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့လူကို တွေ့လိုက်ရတော့ … လင်းလင်းပျော်သွားသည် …
“ဂွတ်မောနင်း … မ”
“ဂွတ်မောနင်း … ကျော် … လာလေ အထဲကို ၀င်ခဲ့”
ကျော် ... အိမ်ထဲဝင်လာသည် ... လင်းလင်း တံခါးကို ပြန်ပိတ်လိုက်သည် ...
“ဘယ်စားရအုံးမလဲ … မကိုတွေ့ချင်လွန်းလို့ အစောကြီးထလာတာ … မ ကော စားပြီးပြီလား”
ဘယ်စားရအုံးမလဲ … အိပ်ယာထ နောက်ကျနေတာကိုး … ညက ကျော့်အကြောင်းတွေးပြီး ဖီလင်တက်နေတာ … ကောင်ဆိုးလေး သောင်းကျန်းသွားတော့ … လင်းလင်းခမျာ … ဗြောင်းဆန်ပြီး ကျန်ခဲ့တာကိုး … နောက်ဆုံး အားကုန်သွားမှ … အိပ်ပျော်သွားတာ … လင်းလင်း ပြန်တွေးပြီး ရှက်သွေးဖြာသွားသည် …
“မကို … တိုးတိုးလေး ပြောစရာရှိတယ်”
“ကျော် … ဘာပြောမလို့တုန်း”
ကျော်က လက်နှစ်ဖက်ကို ကတော့ပုံမျိုးလုပ်ကာ … တိုးတိုးလေး ပြောမယ့်ဟန်ပြင်သည် … လင်းလင်းမျက်နှာလေး … ကျော့် အနားကပ်သွားသည် …
လင်းလင်း … ခံလိုက်ရသည် … ကျော် လူလည်ကျသည် … လင်းလင်းကို ညာတာပါတေးနှင့် ခိုးနမ်းသည် … လင်းလင်း သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ နောက်ကျသွားသည် … ကျော် … လင်းလင်း ပါးပြင်မှာ … အချစ်တံဆိပ် ခပ်နှိပ်ပစ်လိုက်သည် …
“ဟာ … လူဆိုး”
လင်းလင်းမျက်နှာလေး … နီသွားသည် … ရှက်သွားသည် … ဒါပေမယ့် ကျေနပ်ပါသည် … ကြည်နူးမိပါသည် …“ကျော် ... မကောင်ဘူးကွာ”
ကျော့်ရင်ဘတ်ကို လက်သီးနုနုလေးနဲ့ တစ်ချက်လှမ်းထုလိုက်သည် ... ကျော် ရီနေသည် ... ဒီနေ့ မ ... သိပ်လှသည် ... မနေ့ထက် မ ... ပိုလှသည် ... ရှက်သွေးဖြန်းပြီး ... ကိုယ်ကို ချာကနဲ လှည့်ကာ ... ထမင်းစားခန်းကို လျှောက်သွားသည် ...
“လာ ... မုန့်သွားစားရအောင်”
ကျော် နောက်က လိုက်သွားသည် ... လင်းလင်း မှားပြန်ပြီ ... ကျော် ... ကျော် ... လင်းလင်းရဲ့ တင်သားကျစ်ကျစ်လေးတွေ ... ဘယ်လို လှုပ်သွားတယ်ဆိုတာ ... အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်နေမိသည် ... မ လမ်းလျှေက်တာ အရမ်းမိုက်သည် ... မော်ဒယ်တွေလို ... မျဉ်းတစ်ကြောင်းထဲပေါ်တွင် လျှောက်ခြင်းဖြစ်သည် ... ဖြောင့်တန်းတဲ့ ပေါင်တံတွေကို တင်းနေတဲ့ စကဒ်အောက်မှာ အထင်းသား ... သွယ်လျတဲ့ ခြေသလုံးသားလေးက ... ဆင်စွယ်တစ်ချောင်းလို ... ဖြူဝင်းနေသည် ... ဟင်း ... ကိုက်စားပစ်လိုက်ချင်သည် ... မ ရဲ့ ၀ိုင်းစက်နေတဲ့ တင်သားတွေက ကျစ်လစ်နေသည် ... တင်တွေက မရမ်းခါ ... ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ... လှုပ်သည်ဆိုရုံလေး လှုပ်သည် ... မ ရယ် ... မ တစ်ကိုယ်လုံးကို အနမ်းမိုးရွာချပစ်လိုက်ချင်သည် ... မ အလှကား ... ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ သွေးဆူစေသည် ... မ နောက်ကနေ ပွေ့ပြီး ဖက်ထားချင်သည် ... ဧည့်ခန်းနှင့် ထမင်းစားခန်းက ခြေလှမ်းနှစ်ဆယ်လောက်သာ ရှိသည် ... ကျော် မကျေနပ် ... အလှမ်း ၁၀၀ လောက် ဖြစ်စေချင်သည် ... ဒါမှ မရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှကို တ၀ကြီး ကြည့်လို့ရမှာ ...
လင်းလင်း ရင်ထဲမှာ ပျော်နေသည် ... ကျော်ကို ထမင်းစားခန်းထဲ ခေါ်ကာ ... မနက်စာ အတူတူစားမည် ...
ထိုင်ခုံကို နောက်သို့ ဆွဲပေးပြီး
“ဒီမှာထိုင် ... ကျော်”
ပေါင်မုန့်နှစ်ခုကြားကို ကြက်ဥကြော်လေး ထည့်ပေးပြီး ... ကျော့် အရှေ့ကို ချပေးလိုက်သည် ... ယိုဘူးကို ဖွင့်ပြီး ... ပေါင်မုန့်ပေါ်မှာ သေချာ သုတ်ပေးလိုက်သည် ...
“စားနော် ... ကျော်”
“မ ရော ... မစားဘူးလား”
“စားမှာပေါ့ ... ကျော် ရဲ့”
ကော်ဖီလေးကို မွှေပေးပြီး ... ကျော့် အနားကို တိုးပေးလိုက်သည် ...
“ကျော် ... ဖျော်တာလောက်တော့ ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးနော်”
“ကောင်းပါတယ် မ ရဲ့ ... ဒီလောက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး”
မနက်ခင်းမှာ ချစ်ခြင်း ... ကြင်နာခြင်းတွေနဲ့ ... ချစ်သူနှစ်ဦး ကြည်နူးနေသည် ... တီတီတာတာ ပြောကြသည် ... မျက်ဝန်းတွေက ... တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မခွာ ... တစ်ချိန်လုံး ပြုံးနေသည် ... အော် ... ချစ်စ ခင်စ ကြင်နာစ ဆိုတော့ ... အားလုံး စားပြီးသွားတော့ အလုပ်သွားဖို့ နည်းနည်း စောနေသေးသည် ...
“မ ... သွားဖို့ စောပါသေးတယ် ... Laptop ကို ဆက်လုပ်ရမလား”
ကျော် ဥာဏ်ဆင်တာလား ... ရိုးရိုးသားသားလား ... လင်းလင်း ကျော့်မျက်နှာလေးကို အကဲခတ်လိုက်တော့ ... သဘောရိုးနဲ့ ပြောတာထင်ပါရဲ့ ... တော်ကြာ ... မနေ့ကလို ဖြစ်ပြီး ... ဒီနေ့ အလုပ်သွားနိုင်မည် မထင် ... ရှက်သွေးဖြာသွားသည် ... မနေ့က အကြောင်း ပြန်တွေးတိုင်း ဘာလို့ ရှက်နေမိသည် မသိ ...
“လာ ... လိုက်ခဲ့”
အခန်းထဲ ရောက်တော့ ... ကျော်က စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး Laptop ကို ဖွင့်လိုက်သည် ... လင်းလင်း အကဲခတ်နေဆဲ ... သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေသလိုလို ... အလုပ်သွားဖို့ ဟိုဟာထည့် ဒီဟာထည့် လုပ်နေသလို ... ကျော့်ကို ချောင်းနေသည် ... လင်းလင်း ... အမှန်အတိုင်း ပြောလျှင် ကျော့်ကို ကြောက်သည် ... ချစ်တာက ချစ်သည် ... ယောက်ျားဟာ ... ယောက်ျားပဲ ... အခွင့်အရေးပေးလာလျှင် ယူမှာပဲ ... ပလူးပလဲနေလျှင် ... ကျော် ... လင်းလင်းကို အထင်သေးလိမ့်မည် ... အခုတော့ ကျော်က ရိုးပါသည် ... သူ့ Laptop ကိုပဲ ပြင်နေသည် ... စိတ်ချသွားလို့လား မသိ ... ပြတင်းပေါက်လေးက ... လိုက်ကာလေးကို ဟရင်း အပြင်ဘက်ကို ကြည့်နေသည် ... ဒီနေ့ မိုးမရွာ ... မနက် မရွာလျှင် ညနေကျတော့ ရွာလိမ့်မည် ထင်ပါသည် ...
အနားကနေ ကျော် ရဲ့ ခေါ်သံကြောင့် လင်းလင်းလန့်သွားသည် ... ကျော် ... အနောက်မှာ ရပ်နေသည် ... လင်းလင်းက ကိုယ်ကို လှည့်လိုက်တော့ ... ကျော့်ရင်ခွင်ထဲကို တန်းရောက်သွားသည် ... ဟင်း ... ရှောင်ပါတယ်ဆိုမှ ... တည့်တည့်လာတိုးနေသည် ... ကျော်က တင်းတင်းလေး ဖက်လိုက်သည် ... လင်းလင်း နဖူးလေးကို အမြန်နမ်းလိုက်သည် ...
ညာဘက်ပါးကို နမ်းဖို့ပြင်သည် ...
မရ ... ကျော် ... ဘယ်ဘက်ပါးကို ထပ်နမ်းသည် ... လင်းလင်း ရုန်းသည် ... မရ ... ရုန်းတယ် ဆိုရုံလေး ရုန်းတာကိုး ... ကျော့် လက်က မလွတ် ...
“ဟင့် ... တော်ပြီကွာ”
ကျော် ... မ ... နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းချင်သည် ... နှုတ်ခမ်းချင်း နီးအောင် ကပ်လိုက်တော့ ... လင်းလင် ရုန်းတော့သည် ... မရ … ကျော် … လင်းလင်း ခါးကျင်ကျင်လေးကို အတင်းဖက်ထားသည် … မျက်နှာလေးကို လွှဲဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် … တစက္ကန့်လောက် နောက်သွားသည် ... နှုတ်ခမ်းနှစ်ခု ဂဟေဆက်သွားသည် … လင်းလင်း ရုန်းဖို့ မေ့သွားသည် … မ နှုတ်ခမ်းလေး နူးညံ့သည် … နှုတ်ခမ်းနီလှလှလေးရဲ့ ရနံ့လေးက သင်းသင်းလေး မွှေးနေသည် … ချိုလိုက်တာ … ဖြေးဖြေးလေး စုပ်နမ်းလိုက်တော့ … လင်းလင်း မှင်တက်နေမိသည် … ကျော် ရဲ့ လျှာက လင်းလင်း ပါးစပ်ထဲကို ၀င်လာသည် … မနေတတ် … စိတ်ထဲတွင် ရွံ့သလိုလို ခံစားရသည် … ခဏသာ … ငရှဥ့်လိုပဲ လင်းလင်း ပါးစပ်ထဲကို ဟိုဟို ဒီဒီ တိုးဝင်လာသည် … လင်းလင်း လျှာလေးနဲ့ တားလိုက်မိသည် … လျှာနှစ်ခု ထိသွားချိန်မှာတော့ … လင်းလင်း မျောသွားသည် … လင်းလင်း မျက်စိလေးကို မှိတ်လိုက်သည် … ကျော့် လျှာလေးကို ပြန်တို့မိသည် … နှစ်ယောက်သား ပါးစပ်ထဲတွင် လျှာချင်း ချစ်တင်းနှောနေသည် … ကျော် … လင်းလင်း အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ယူလိုက်သည် … လင်းလင်း နှုတ်ခမ်းလေးက … ဂျယ်လီလေးကျနေသည် … အိအိလေးနဲ့ ကျော့်ပါးစပ်ထဲကို ရောက်လာသည် … တယုတယနဲ့ ကျော့် လျှာလေးနဲ့ ယက်လိုက်သည် … လင်းလင်း … အလိုက်သင့် ကျော့် အပေါ်နှုတ်ခမ်းလေးကို … ဆွဲယူလိုက်သည် … ကျော့်လိုပဲ … လင်းလင်း လျှာလေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူလေးကို … လျှာနဲ့တို့လိုက်သည် … သုံးမိနစ် အနမ်း … နှလုံးသားထဲမှာ အချစ်တွေ ပျော်ဝင်သွားသည် … နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေတာက ခဏလေးရပ်သွားသည် … လင်းလင်း … ကျော့်ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည် … ကျော် သိသည် … သို့သော် ဘာမှန်းမသိ … လင်းလင်း ခါးလေးကို တင်းကနဲ ဖက်ပစ်လိုက်ပြန်သည် … လင်းလင်းလက်နှစ်ဖက်က … ကျော့် ကို ဖက်လိုက်သည် … ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခု ပူးကပ်သွားသည် … သို့သော် … တစ်ခုခု ခံနေသည် … အတင်းဖိကပ်ပစ်လိုက်သည် … ကြားကခံနေသော … လင်းလင်း ရင်ထွားထွားကား … ကျော့် ရင်ဘတ်နှင့် ကပ်သွားသည် … ပြားကပ်သွားသည် … ကျော့် … လက်တွေက ဒီအတိုင်းမနေ … လင်းလင်းခါးကို ဖက်ထားရာကနေ အောက်ကို လျောကျလာသည် … လုံးကျစ်တဲ့ တင်သားတွေကို အုပ်ကိုင်လိုက်သည် … ဖြေးဖြေးချင်း ပွတ်သည် … ညှစ်သည် … တင်သားလုံးလုံးလေးက … ကျော့်လက်ထဲမှာ … တင်းနေသည် … လင်းလင်း ရဲ့ အရှေ့က အဖုတ်လေးကလည်း … ဖောင်းကားနေသည် … အတွင်းသားတွေက ဖြေးဖြေးလေး … ညှစ်နေမိသည် … ကျော့်ဟာလည်း ဖောင်းကားလာသည် … အတွင်းခံထဲမှာ ထကြွနေသည် … အတွင်းခံထဲကနေ ခြိမ်းခြောက်နေသည် … အတင်းဖိကပ်ထားတော့ … ကျော့်ဟာလေးက သွေးတိုးနေတာ … လင်းလင်းသိသည် …. ကျော် …. ရယ် …. ကျော့်လက်တွေက လင်းလင်း တင်သားပေါ်မှာ ဆော့ကစားနေသည် … ပွတ်ရင်း ပွတ်ရင်း … အရှိန်က တက်လာသည် … ကျော် … မသိမသာနဲ့ ခုတင်နားကို ရွှေ့သွားသည် … လင်းလင်း သတိမထားမိ … အတွေ့အထိမှာ မိန်းမောနေဆဲ … ချစ်သူနှစ်ဦး … ခုတင်ပေါ်ကို မသိမသာ လဲကျသွားသည် … ကျော်က အောက်မှာ … လင်းလင်းက အပေါ်မှာ … နှုတ်ခမ်းချင်းကား အနမ်းမပျက် … ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့သွားသည် … နှစ်ယောက်စလုံး … ရင်ထဲမှာ တစ်ခုပဲ သိသည် … အရမ်းချစ်ချင်နေသည် … ကျော့်လက်က … လင်းလင်း တင်သားမို့မို့ကို ဆုတ်နယ်နေသည် … တင်နှစ်လုံးကြားက နေရာလေးကို လက်က မထိတထိ … စမ်းလိုက်သည် …
“အ … ဟာ”
လင်းလင်း တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် … ရန်သူက နောက်ကျောကနေ … ၀င်ချလာသည် … အတွင်းစည်းနဲ့ နီးကပ်နေပြီ … လင်းလင်း ဖင်လေး … အတင်း ရှုံ့ပစ်လိုက်သည် … အရှေ့က လှိူဏ်ခေါင်းလေးက … ပျော်နေသည်လား မသိ … အရည်တွေ စိုစွတ်လာသည် … သဘာဝက … သူ့အလိုအလျောက် … လုပ်ပေးနေသည် … ပင်တီလေးက … အရည်တွေကြောင့် စိုရွှဲနေပြီး … အကွဲကြောင်းလေးနဲ့ တသားထဲ ဖြစ်နေသည် … ကျော် လက်တွေက ရှေ့တိုးချင်သည် … သို့သော် … တင်းမို့နေတဲ့ တင်သားတွေကြောင့် … အတွင်းနေရာကို အလွယ်တကူ စမ်းလို့မရ … တင်နှစ်ခုကြားမှာ ပျောက်ကွယ်နေသည် … ကျော် … လက်တွေက ပွတ်သပ်ရင်း … ပေါင်သားလေး တစ်လျှောက် ပွတ်သပ်နေမိသည် … အစုန်အဆန် … စကဒ်ရဲ့ အောက်စလေးကို စမ်းမိတော့ … အတွေးထဲမှာ လက်ကနဲ … လက်ကနဲ ဖြတ်ကနဲ မသိမသာ ဆွဲတင်လိုက်သည် … လင်းလင်း မသိသေး … ကျော်ရဲ့ ရှေ့ကဟာက … ဖောင်းကားနေသည် … လင်းလင်း အရှေ့ကတောင်ကုန်းလေးကို ထောက်ထားသည် … ခံစားချက်ကား … ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်တော့ … လင်းလင်းခမျာ … အရှေ့ကော အနောက်ကော … ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည် … ကျော် … လက်ကလေးက … ပေါင်သားတွေကို ပွတ်နေရင်းက … တင်သားဖောင်းဖောင်းလေး အောက်နားကို ပွတ်လိုက်သည် … တဖြေးဖြေးနဲ့ … အတွင်းပိုင်းကိုရောက်လာသည် … ဖြေးဖြေးလေး … ရန်သူ့စခန်းကို တိတ်တိတ်လေး … ၀င်စီးမည့် ပုံစံ … အကွဲကြောင်းလေးနားကို လက်က ရောက်သွားသည် … ပင်တီလေးက … အရည်တွေ စိုရွှဲနေသည် … ဒါ ပြဿနာ မဟုတ် ... ပိုတောင်ကောင်းသေးသည် ... အရည်လေးတွေက … ချောကျိချောကျိနဲ့ ပိုပြီး ပွတ်လို့ကောင်းသည် … အကွဲကြောင်း နဲ့ လက်ကြားမှာ ပင်တီလေးသာ ခံနေသည် … နောက်ကနေ … လက်နဲ့ … လင်းလင်း အကွဲကြောင်းကို ထောက်ထားတော့ … လင်းလင်း ရူးပြီ … ရန်သူ …
အသိပေးသံက ဆူညံသွားသည် … အရည်တွေက အတင်း လှိမ့်ထွက်လာသည် … ကျော် ပင်တီလေးပေါ်ကနေ အကွဲကြောင်းလေးကို မှန်းပြီး ပွတ်ပေးနေသည် … ဒီနေရာက အရေးကြီးသည် … ထိတာနဲ့ … ရင်ထဲမှာ ဟုန်းခနဲ မီးတောက်သွားသည် … မခံနိုင် … ဖြစ်မှာပေါ့ … လူးလူးလိမ့်လိမ့်လေး ဖြစ်သွားတော့ … လင်းလင်း ရင်နှစ်မွှာက အပေါ်ကနေ … ပွတ်ဆွဲသလို ဖြစ်သွားသည် … ကျော် လက်တစ်ဖက်က ခါးလေးကို တင်းတင်းလေး … ဖက်ပစ်လိုက်သည် … ဒီအချိန်မှာ လက်လွတ်မခံနိုင် … ခါးလည်က ဖြတ်ပြီး ဖက်ထားတော့ … လင်းလင်း ရုန်းသော်လည်း မရ … ခက်နေတာက အကွဲကြောင်းလေးက … သမန်းမြက်ရှသလောက်ပဲ ဟနေသည် … အပျိုကိုး … နောက် … ဒီလိုအထိအတွေ့မျိုး ကြုံရတော့ … လင်းလင်း … ပန်းလေးကို အတင်းရှုံ့ထားသည် … မလွယ် … ကျော် စိတ်မလျော့ပါ … နှုတ်ခမ်းချင်းကို သေချာနမ်းနေရင်း … အောက်ကလည်း ပွတ်ပေးနေမိသည် … လင်းလင်းက လူသား … အထိအတွေ့ကို မခံနိုင် … အပျိုဆိုတော့ ပိုဆိုးသည် … တစ်ခါမှ ယောက်ျားတစ်ယောက်က ဒီလိုမျိုး ပွတ်ပေးတာမခံဘူး … ကျော့် နှုတ်ခမ်းကို မွတ်သိပ်စွာ … စုပ်နမ်းပစ်လိုက်သည် … ခုနက ရုန်းလိုက်တော့ … လင်းလင်း ခန္ဓာကိုယ်လေးက အပေါ်ကို အနည်းငယ် တက်လာသည် … ကျော် သေချာစမ်းလို့ ရသွားသည် … အတွင်းကို လက်လှမ်းမှီသွားသည် … ကျော် … စမ်းရင်း စမ်းရင်း … အကွဲကြောင်းလေး … တစ်လျှေက်ကို စုန်ကာ ဆန်ကာ ပွတ်နေသည် … လင်းလင်း အတွေးတွေက နတ်ပြည်ကျော်ကာ ဟိုးကမ္ဘာ့အပြင်ဘက်ကို ရောက်နေပြီ … အကွဲကြောင်းလေး အောက်ဆုံးက အစေ့လေးလားမသိ … ပွတ်ပစ်လိုက်သည် …
လင်းလင်း ပါးစပ်က … မုသာဝါဒလေး ထွက်သွားသည် … စိတ်ထဲမှာတော့ … ပွတ်စမ်းပါ ကျော်ရယ် … အရည်တွေ ထွက်တဲ့အထိ ပွတ်ပေးစေချင်သည် … ကျော်ကလည်း … ဂရုတစိုက်ပွတ်နေဆဲ …လင်းလင်း တစ်ကိုယ်လုံး … တီကောင် ဆားပက်ခံရသလို … တွန့်လိမ်နေသည် … ခံစားချက်ကား တရိပ်ရိပ်နဲ့ အမြင့်ဆုံး ရောက်သွားသည် … လင်းလင်း … ကျော့်ကို အတင်းဖက်ထားသည် … ကျော့် လက်တွေက ပိုမြန်လာသည် …
လင်းလင်း … ဖင်လေးကို အစွမ်းကုန် နောက်ကို ကော့ပစ်လိုက်သည် … အကွဲကြောင်းလေးက ပိုဟလာသည် … သို့သော် … ကျဉ်းကျဉ်းလေး … ကျော့် လက်ခလယ်တောင် မ၀င် … ပိုပြီး ဖိပွတ်ပစ်လိုက်သည် … ဖင်ကလေးက … လေထဲမှာ ပိုပြီးရမ်းခါနေသည် … ကျော့်လက်ကလည်း အတင်းလိုက်ပွတ်သည် …
“ကျော့်” ချစ်သူ နာမည်ကို အသံလေး ဟစ်ပြီး ခေါ်ပစ်လိုက်သည် …
အတွင်းကနေ … အရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်သည် … လက်က နွေးကနဲ တစ်ချက်ဖြစ်သွားသည် … အရည်ပူနွေးတွေက ပင်တီမှာ အိုင်ထွန်းနေသည် … လင်းလင်း တုန်ရီနေတာကနေ … ငြိမ်သွားသည် … လင်းလင်း ပြီးသွားပြီ … ကျော် လုပ်ပေးတာ … အရမ်းကောင်းသည် … လင်းလင်း ကျေနပ်သွားသည် … ကျော် … အရမ်းတော်သည် … လင်းလင်း ရင်ထဲက မီးကို ငြိမ်းပစ်လိုက်နိုင်သည် … အောင်ကျော်ထက် … မ ရဲ့ … စကဒ်ကို ချွတ်ပစ်ချင်နေသည် … လင်းလင်းပြီးသွားပေမယ့် … ကျော် က ဘာမှမလုပ်ရသေး … ကျော် သွေးဆူနေပြီ … အရမ်းချစ်ရတဲ့ … မ က ကျော့်ကိုယ်ပေါ်မှာ လူးလှိမ့်နေတာ … ကျော် လည်း လုပ်ချင်သည် … ညာဘက်တင်သားဘေးက … ဇစ် ကို … လက်က စမ်းမိသည် … ဆွဲချလိုက်သည် … မရ … လင်းလင်း လက်ကလေးက ဇတ်ကနဲ ကျော့်လက်ကို ဖမ်းကိုင်ထားသည် …
“အရမ်းချစ်တယ် … မရယ်”
“ချစ်ပါတယ် … ကျော်ရယ်”
“ကျော် … မ ကို ချစ်ချင်တယ်ကွာ”
“ဟင်း … တော်ပြီနော်”
ကျော် … မကျေနပ် … သူကို့ကျတော့ ပြီးအောင်လုပ်ပေးရသည် … ဒီက တန်းလန်းကြီး … အတွင်းခံအောက်မှာ … ညီလေးက ပေါက်ကွဲတော့မည် … တင်းနေတာမှ … ကွဲထွက်တော့မလား ထင်မှတ်ရသည် …
“ကျော် … မ ကို ချစ်တယ်မလား”
“ကျော့်ကို … အဖြေအလွယ်လေးပေးလိုက်လို့ … ကျော်က အထင်သေးတာလား”
“ဟာ … မဟုတ်ဘူးနော် … လုံးဝမဟုတ်ဘူး”
“ဒီအရွယ်ထိ ဘယ်သူ့ကိုမှ ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော် … ကျော် နဲ့ကျမှ ချစ်မိသွားတာ … ကျော် … မ ကို တန်ဖိုးထားရမယ်နော်”
လင်းလင်း … စကားလုံးတွေနဲ့ … ပါမစ် ပိတ်လိုက်သည် … ချာတိတ်က မလွယ် … စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ ခရီးဆုံးထိ … လျှောက်လုပ်နိုင်သည် … လင်းလင်းက မိန်းကလေး … မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းရမည် … ကျော့်ကိုတော့ သနားသည် … သူလည်း လုပ်ချင်ရှာပေမပေါ့ … ဒါပေမယ့် … ဒီလောက် လိုက်လျောတာတောင် လွန်လှပြီ … ကျော်နဲ့ ပလူးပလဲနေတာ …. လင်းလင်း ပန်းလေးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပွတ်တာ … အတော့်ကို လွန်နေပြီ …
“ခဏလေး … မ”
ကျော် … သူ့ပါးပြင်လေးကို လက်ညှိုးထိုးပြသည် … လင်းလင်း နမ်းလိုက်ပါသည် …
လင်းလင်း … ပါးလေးကို ပြန်ပြီး လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်သည် … ကျော် … ရီနေသည် … အမြန် နမ်းလိုက်သည် …
“ကဲ … ကျေနပ်တော့နော်”
လင်းလင်း ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွားပြီး အရည်တွေကို သေချာ ဆေးလိုက်ပါသည် … ရှက်လိုက်တာ … တစ်သက်လုံး ထိန်းလာသမျှ … သူနဲ့ကျမှ အရည်ပျော်သွားသည် … ပလူးပလဲနေမိသည် … သူ လုပ်သမျှ မငြင်းဆန်နိုင် …လင်းလင်း … ပင်တီပေါ်ကနေ ရေလောင်းချနေသည် … မရ … လင်းလင်း အောက်က နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုက … တင်းပြီး ဖောင်းကားနေသည် … ရှက်စရာကြီးကွယ် … ပင်တီလေးပေါ်မှာ … အရည်တွေက ရွှဲနေတာပဲ … ကျော် … လူဆိုး … လင်းလင်း အကွဲကြောင်းအတိုင်း … အစုန်အဆန်ပွတ်နေလိုက်တာ … လင်းလင်းကလည်း မငြင်းမိ … တကယ်ရှက်ဖို့ကောင်းသည် … ဟင်း … အရသာကတော့ တစ်သက်မမေ့စရာပဲ … ပင်တီလေးကို အသာချွတ်ပြီး … အကွဲကြောင်းအတိုင်း ရေနဲ့ ပွတ်ဆေးလိုက်ချင်သည် … စကဒ်ကို ရေမစိုအောင် … သေချာ … မ … တင်သည် … မရ … တင်းပြီး ကားနေတဲ့ တင်တွေက ခံနေသည် … ဇစ်ကို ဆွဲချပြီး ချွတ်လိုက်သည် … တင်တွေက ခံနေသည် … တော်တော်ရှုပ်တဲ့ ဖင် … အပေါ်ကိုလှန်တော့လည်း ခံနေသည် … အောက်ကိုချွတ်တော့လည်း တစ်နေသည် … ကိုယ်ကို ရှေ့နည်းနည်းကုန်းပြီး ချွတ်ချလိုက်သည် … စကဒ်လေးက … ကျွတ်ကျသွားသည် … ရေမစိုအောင် ခြေသလုံးလောက် ရောက်သည့်အချိန်တွင် မယူလိုက်သည် … ခြေနှစ်ချောင်းကို တစ်ချောင်းချင်း … ပင်တီထဲက ထုတ်လိုက်သည် … အိုး … လှလိုက်တာ … ဖြူဝင်းနေတဲ့ တင်နှစ်လုံးက … ကားစွံ့ကာ ရာဝင်အိုးပုံစံလေးဖြစ်နေသည် … ဒါ့ကြောင့်လည်း … တွေ့သမျှ ယောက်ျားတွေက … လင်းလင်း ဖင်ကို ငမ်းကြခြင်းဖြစ်သည် … ပေါင်ရင်းကား မတုတ် … တင်က သပ်သပ် … ပေါင်က သပ်သပ်ဖြစ်နေသည် … ဒီလိုဖြစ်အောင် … လင်းလင်း Gym ဆော့ရသည် … လင်းလင်းက လူတစ်မျိုး … တခြားမိန်းကလေးတွေလို … ရွှေတွေဘာတွေ သိပ်မမက် … အလှလည်း သိပ်မပြင် … ခန္ဓာကိုယ်အလှကို တော့ မက်သည် … ၁၇ … ၁၈ ကတည်းက Gym ဆော့တော့ … ဘော်ဒီက အမိုက်စားဖြစ်နေသည် … အစားလည်း ထိန်းတာပါသည် … အဆီပို မရှိတဲ့ … ဖြောင့်တန်းတဲ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားလိုက်သည် … လင်းလင်း အတွင်းပစ္စည်းက ဖောင်းနေသည် ... ကားနေသည် ... သို့ပေမယ့် ... ပြဲမနေ ... စိနေသည် ... ခြေနှစ်ချောင်း ကားထားတာတောင် ... အကွဲကြောင်းက သိပ်ဟမလာ ... အရည်တွေကတော့ စိုရွှဲနေဆဲ ... ရေမြန်မြန်ဆေးလိုက်သည် … အကွဲကြောင်းကြားထဲက ပန်းနုရောင် အတွင်းသားလေး … ပေါ်တယ်ဆိုရုံလေး ပေါ်နေသည် … အနားတွင်ရှိသော မျက်နှာသုတ်ပ၀ါလေးနဲ့ အမြန်သုတ်လိုက်သည် … ပင်တီက စိုရွှဲနေသည် … ဒါကို ပြန်မ၀တ်ချင် … စိုစိစိုစိနဲ့ … အတွင်းမှာ အနာတွေပေါက်လိမ့်မည် … အလုပ်မှာက အကြာကြီးထိုင်ရမှာ … ဒီလို စိုနေလျှင် … အောက်စော်နံ့ ထွက်လာလိမ့်မည် … တန်းလေးပေါ်ကို ပင်တီလေး လွှားတင်ထားလိုက်သည် … စကဒ်ကို ပြန်ဝတ်လိုက်သည် … တစ်နေသည် … အရေးထဲ ... ဒင်းက တမှောင့် ... မြန်မြန်ဝတ်ကာ ကပိုကယိုဖြစ်နေတာကို ပြင်လိုက်သည် … ဟင်း … ဒီကောင်လေးနဲ့တော့ … ခက်ပါတယ် … အပြင်ထွက်လာတော့ … ကျော်က ပြုံးစိစိနဲ့ … မ ကို ကြည့်နေသည် … အနားကို ရောက်လာတော့ …
“ကောင်းရဲ့လား … မ”
“ဘာကောင်းတာလဲ … မသိဘူးသွား”
“ဟာ … ရှက်စရာကြီးကွာ … တော်တော့”
ကျော်က လင်းလင်း ကို ဖက်ဖို့ ဟန်ပြင်သည် …
ကျော် လက်ကလေး … တွန့်သွားသည် …
“ကျော် … လူတွေရှေ့မှာ ကောင်းကောင်းနေနော်”
“စိတ်ချ … နောက်မှာပဲ ကဲမယ်”
ကျော် ပျော်နေသည် … မ … ဒေါကန်နေတဲ့ပုံလေးက ချစ်စရာ … ကျော် … ဧည့်ခန်းဘက်ကို ပြေးထွက်လာသည် … လင်းလင်း … ဒေါပွပြီး ကျန်ခဲ့သည် … လင်းလင်း တံခါးကို အမြန်ပိတ်ပြီး … စကဒ်ကို အမြန်ချွတ်လိုက်သည် … ဗိဒိုထဲမှ ပင်တီ အသစ်တစ်ထည် ထုတ်လိုက်သည် … မှန်တင်ခုံပေါ်က ပေါင်ဒါမှုန့်ဘူးကို ယူလိုက်သည် … ပေါင်ဒါမှုန့်ကို … လက်ထဲနည်းနည်းထည့်ပြီး … တင်နှစ်လုံးကို လူးလိုက်သည် … လှပါတယ်ဆိုမှ … မွှေးပါမွှေးနေသည် … ပင်တီကို ပြန်ဝတ်သည် … ရေမွှေးလေး နည်းနည်း ဆွတ် လိုက်သည် … အောက်ပိုင်းလေးက မွှေးရနံ့လေး သင်းပျံ့နေသည် … စိတ်ထဲမှာ ဒီပင်တီက နည်းနည်းကြပ်တယ်လို့ ခံစားနေရသည် … ဖြစ်မှာပေါ့ … ရှေ့ကဟာက ဖောင်းနေတာမှ မို့မို့လေး …. ဖောင်းကားနေတဲ့ ပန်းလေးကို ပင်တီက မနည်းအုပ်နေရသည် … စကဒ်ကို အမြန်ဝတ်ပြီး … သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် … အကျီ င်္ကို ဆွဲဆန့်လိုက်သည် … လင်းလင်း … ခြင်းတောင်းလေးနဲ့ … လက်ကိုင်အိတ်လေးယူပြီး … အပြင်ထွက်လိုက်သည် … ကျော်က အိမ်အပြင်တောင် ရောက်နေပြီ …
“မိနှင်းရေ .. တံခါးလာပိတ်ပါအုံး”
“တံခါးသေချာပိတ်ထားနော် … နေ့လည်လောက် ဖေဖေတို့ ပြန်ရောက်မယ် သိလား”
မိနှင်း တံခါးကို ပြန်ပိတ်လိုက်သည် …
အောက်ထပ်ဆင်းတော့ ကျော့်က အရင်ဆင်းမိသည် … ဒီတစ်ခါတော့ ကျော် … လင်းလင်း အလှကို ငမ်းလို့မရတော့ …
“မ … ခဏလေး”
ကျော် အိတ်ထဲမှ သကြားလုံးလေး ထုတ်ပြီး မ ပါးစပ်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်သည် …
ကျော် … နမ်းပြန်သည် …
လင်းလင်း ခံလိုက်ရပြန်သည် … လင်းလင်း ပါးလေးကို ကိုင်ပြီး ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးနေသည် …
“လူကြီးကို မုန့်ကျွေးပြီး ခိုးနမ်းတယ်ကွာ … ကျော် … မကောင်းဘူး”
“ဟား ဟား ဟား”
ချစ်သူနှစ်ဦး ကြည်နူးမိသည် … ပျော်ရွှင်မိသည် … လင်းနဲ့ ကျော် … စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့အောင် ပြောပြီး အလုပ်ကို လမ်းလျှောက်လာကြသည် … တစ်ယောက်မျက်နှာ … တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး … ပြုံးနေကြသည် … ပျော်နေကြသည် … ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့နေသည် … လမ်းထိပ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ စောင့်နေကျ … ချာတိတ်ကတော့ စိတ်ပျက်သွားသည် … ဒီနေ့ လင်းလင်း ဘေးမှာ … ချာတိတ်တစ်ယောက် … ပျော်ရွှင်နေကြတာများ … မိုးမမြင် လေမမြင် …
လင်းလင်း ကြားသည် … သို့ပေမယ့် … မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်သည် … သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့က … ဘာမှ မပတ်သက် … တကယ် … ပတ်သက်တဲ့လူက ဘေးမှာ … ကျော့် ကိုသာချစ်သည် … ကျော့် ကိုသာ ဂရုစိုက်ရမည် … သူက လူဆိုး …
တကယ်ဆိုးတဲ့ လူဆိုး …
Posted by ချစ်လူမိုက် at 8:10 AM Posted by
ကုလားထိုင်တွင် ထိုင်ပြီး ဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်သည်နှင့် စောကြီး၏ လီးကြီးမှာ မြွေဟောက်ကြီး တစ်ကောင်အလား ဖောင်းကနဲ ထောင်ထွက်လာသည်။ စောကြီးက သီတာ၏ ဆံပင်ရှည်များကို သူ့လက်ကြမ်းကြီးဖြင့် ဆွဲယူပြီး သီတာ၏မျက်နှာလေးကို တောင်မတ်နေသော သူ၏ လီးကြီးဆီသို့ ဆွဲယူလိုက်သည်။ သီတာခမျာ ခါးလေးကုန်းပြီး စောကြီးလိုရာသို့ ခေါင်းလေးကို ငုံ့ပေးနေရရှာသည်။ စောကြီးမှာ သူ့လီးကို ဘယ်တော့မှ ဆေးသူမဟုတ်။ သေးပဲပေါက်ပေါက်၊ ဂွင်းပဲ တိုက်တိုက်၊ စောက်ဖုတ်ပဲ လိုးလိုး၊ ဖင်ပဲ လိုးလိုး လီးကို ဘယ်တော့မှ မဆေးတတ်။ ရေချိုးလျှင်လည်း ခေါင်းပေါ် ရေခွက် သုံးလေးခွက်လောင်းပြီး ကိစ္စပြီးတတ်သူ ဖြစ်သည်။ ဘယ်တော့မှ ပေါင်ကြား လီးကြား ဖင်ကြား ပွတ်တိုက်ဆေးတတ်သူမဟုတ်။ ထို့ကြောင့် ယခု သူ့ပေါင်ကြားမှ ရှစ်လက်မခန့် လီးတန်ကြီး ထောင်ထွက်လာသည်နှင့် လီးနံ့ကြီးက ထောင်းကနဲ ထွက်လာသည်။ သီတာ့ မျက်နှာ နုနုလှလှလေးမှာ စောကြီး၏ လီးနံ့ကို ရှူလိုက်ရသဖြင့် ရှုံ့မဲ့သွားရှာသည်။ ဒါကို စောကြီးက လုံးဝစောက်ဂရုမစိုက်ဘဲ သီတာ့ခေါင်းကို လီးနားသို့ ပိုပြီးဆွဲယူလိုက်သည်။ စောကြီး၏လီးကြီးမှာ ကုလားလို ရှင်မပြုထားသဖြင့် အရည်ပြားရှည်ကြီးက လီးဒစ်ကို ဖုံးနေသည်။ စောကြီးက သီတာ့ခေါင်းကို ညာလက်ဖြင့် ဆွဲယူရင်း ဘယ်လက်ဖြင့် လီးထိပ်အရေပြားကို ဆွဲလှန်ချလိုက်သည်။ မာတောင်နေသော လီးဒစ်ကြီး၏ ပတ်လည်တွင် ဖြူဖြူအဖတ် လီးချေးများက အဖတ်လိုက် ကပ်နေကြသည်။ လီးနံ့မှာ အရေပြားကို ဆွဲလှန်လိုက်မှ ပိုပြီး စူးကနဲ ထွက်လာရာ တော်တော်ဝေးဝေးမှပင် အနံ့ရနိုင်သည်။ သီတာမှာ စောကြီး၏ လီးဒစ်ကြီး ပတ်လည်မှ အဖတ်များကို စူးစိုက်ကြည့်ရင်း စူးရှပြင်းထန်လွန်းသည့် စောကြီး၏ လီးနံ့ကို အနီးကပ် ရှူရှိုက်နေရလေသည်။ ... ကောင်မ ငါ့လီးစုပ်စမ်း၊ ကြာတယ်၊ လီးတောင်လှပြီ ဒီမှာ ......
ကျော်စွာမှာ သီတာ၏ အဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး လွန်စွာမှ သနားနေမိသည်။ မိမိချစ်သူကို အဖြစ်ဆိုးမှ မကယ်တင်နိုင်သည့် အတွက်လည်း မိမိကိုယ်ကို လွန်စွာ ခံပြင်းဒေါသထွက်မိသည်။ ခင်သီတာမှာ ရွေးစရာလမ်းမရှိတော့သည့် အဖြစ်ကြောင့် စောကြီး၏ ရေမဆေး ဧရာမ လီးနံနံစော်စော်ကြီးကို စုပ်ရန် သူမ၏ လက်ချောင်းလေးများဖြင့် လီးတန်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရရှာသည်။ မိန်းကလေး လက်နုနုလေးများ၏ အထိအတွေ့ကြောင့် တဏှာရာဂများဖြင့် ပြည့်လျှံနေသည့် လိင်တံကြီးမှာ ဆတ်ကနဲ မတ်တောင်သွားပြီး အရွယ်မှာလည်း နဂိုထက်ပင် ပိုကြီးလာတော့သည်။ သီတာမှာ မျက်စိလေးကို မှိတ်ပြီး သက်ပြင်းလေး တစ်ချက်ချကာ သူမ၏ပါးစပ်လေးကို ဟပြီး လီးထိပ်ပိုင်းကို ငုံလိုက်ရတော့သည်။ ....အိုး.....ရှီး...... နူးညံ့လွန်းလှသော နှုတ်ခမ်းလွှာလေးများဖြင့် ထိသွားသည်နှင့် မုဒိမ်းကောင် စောကြီးမှာ အရသာတွေ့ပြီး မျက်စိမှိတ် ဇိမ်ခံရန် အသင့်ပြင်လိုက်တော့သည်။ သီတာမှာ အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ရန်အလို့ငှာ စောကြီး၏ အလိုအတိုင်း လိုက်လျောရန် ကြိုးစားပြီး သူမ၏ ခေါင်းကို တဖြည်းဖြည်း နှိမ့်ချလိုက်ရာ ပါးစပ်လေးအတွင်းသို့ လီးဒစ်ကြီးတစ်ခုလုံး ၀င်သွားတော့သည်။ လီးဒစ်ပတ်လည်မှ ချေးဖတ်များမှာ သီတာ၏ ပါးစပ်လေးထဲတွင် ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ လီးတန်တ၀က်လောက်အထိ ပါးစပ်ထဲဝင်အောင် စုပ်ပေးပြီး အသာလေး ခေါင်းကိုကြွပြီး လီးတန်ကို ပြန်ထုတ်လိုက်သည်။ ဖြူဖြူအဖတ် တော်တော်များများ မရှိတော့ဘဲ လီးထိပ်ခေါင်းကြီးမှာ သီတာ၏ သွားရည်များဖြင့် ပြောင်လက်သွားသည်။ ကျော်စွာမှာ သီတာ့ကိုယ်စား ပျို့တက်ချင်လာသည်။ ဒီလောက် ညစ်ပတ်တဲ့ လီးကြီး နံလိုက်မယ့် ဖြစ်ချင်းဟု တွေးမိသည်။ လူယုတ်မာ စောကြီးမှာ သီတာ့ဆံပင်များကို လက်ဖြင့် ထိုးဖွရင်း ကာမအရသာ ဇိမ်ခံကောင်းနေလေသည်။ ခဏကြာလျှင် သီတာမှာ စိတ်မရှည်တော့သည့်ပုံစံဖြင့် မြန်မြန်ပြီးစေရန် ကျန်သည့် လီးချောင်းအောက်ပိုင်းတ၀က်ကို လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဂွင်းပါတိုက်ပေးနေတော့သည်။ လီးချောင်း အပေါ်ပိုင်းကို စုပ်နေပြီး လီးချောင်းအောက်ပိုင်းကို ဂွင်းတိုက်ပေးနေသည်မှာ အောကားများထဲမှ လီးစုပ်ခန်းကို ကြည့်ရသည်နှင့်ပင် တူနေတော့သည်။ ကြည့်နေရင်းနှင့် ကျော်စွာ့စိတ်ထဲမှာ တမျိုးဖြစ်လာသည်။ သူ့ဘောင်းဘီထဲမှ လီးမှာ ယားကျိကျိ ဖြစ်လာသည်။ .....အလို...... လီးတောင်ချင်တာလား၊ ကိုယ့်ချစ်သူတစ်ယောက်လုံး အဓမ္မအကျင့်ခံနေရတာ လီးတောင်ရမှာလား.................... ကျော်စွာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလွန်အံ့သြသွားသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် စောကြီးက သီတာ့ခေါင်းကို ဆွဲမပြီး ပါးစပ်ကို သူ့လီးဆီမှ ရုတ်တရက် ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ ဧရာမလီးကြီးမှာ သွားရည်များအရွှဲသားဖြင့် ပြွတ်ကနဲ သီတာ့ပါးစပ်လေးထဲမှ ကျွတ်ထွက်သွားပြီး လေထဲတွင် တန်းလန်းကြီး ခါရမ်းသွားသည်။ ပြီးလျှင် ချက်ချင်းဆိုသလို သီတာ၏ အပေါ်အင်္ကျီတီရှပ်လေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ သီတာမှာ ရုတ်တရက်ကြောင်သွားပြီး ဘရာစီယာလေးနှင့် ဖြစ်သွားတော့သည်။ စောကြီးက အချိန်မဆိုင်းဘဲ ဘရာစီယာကို ဆောင့်ဆွဲပြီး ဖြုတ်ထည့်လိုက်ရာ သီတာမှာ အပေါ်ပိုင်း ဗလာကျင်းသွားတော့သည်။ ကျော်စွာတစ်ယောက် တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသော ချစ်သူ၏ အပေါ်ပိုင်းအလှကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ ဖြူဝင်းသော အသားအရေက အရမ်းကို စိုပြေနုဖတ်လွန်းနေသည်။ ဖြောင့်စင်းသော လည်တိုင်၊ ပြေပြစ်သော ပခုံးလေးများ၊ နုအိသော လက်မောင်းသားလေးများ၊ သန့်ရှင်းပြီး အမွေးအမျှင်မရှိ၊ အမာရွတ်မရှိ၊ ဖြူဖွေးလှသော ချိုင်းလေးများ၊ ထိုမှ အားလုံးထဲတွင် ထင်ရှားလွန်းပြီး ဖွံ့ထွားလုံးဝန်းလှသော နို့အုံနှစ်လုံး၊ ပန်းနုရောင် နို့သီးခေါင်းလေးများ၊ သီတာ၏အလှတွင် ယောက်ျားသားများအားလုံး မှင်သက်နေမိသည်။ ယခုအချိန်တွင်တော့ ကျော်စွာ၏လီးမှာ ထိန်းမရတော့ဘဲ မာတောင်လာတော့သည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီဝတ်ထား၍ အပြင်ကိုတော့ ငေါထွက်မနေ၍ တော်သေးသည်။ သီတာမှာ ရှက်လွန်း၍ မျက်နှာလေး နီမြန်းသွားသော်လည်း သတိဝင်လာပြီး လုပ်လက်စအလုပ်ကို ဆက်လုပ်ရပြန်သည်။ စောကြီးက လီးစုပ်ခံရင်း သီတာ့နို့နှစ်လုံးကို သူ့လက်ကြီးများဖြင့် ဖျစ်ညှစ်ကစားနေသည်။ ကျော်စွာမှာ သူတစ်ခါမှ မကိုင်ဖူးသော ချစ်သူ၏နို့နှစ်လုံးကို မုဒိမ်းကောင်က ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်နေသည်ကို ကြည့်ရင်း လီးတောင်နေရသည့်အဖြစ်ကို လွန်စွာမှ ရှက်မိနေလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် အောင်ဒင်နှင့် တင်မြင့်တို့မှာ သူတို့ပုဆိုးများကို ကွင်းလုံးချွတ်ချပြီး ဂွင်းတိုင်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။ နှစ်ယောက်လုံး၏ လီးများမှာ မသေးလှ။ အောင်ဒင်၏လီးက တုတ်တုတ်ကြီး ဖြစ်သည်။ ကျော်စွာ တစ်သက်နှင့် တကိုယ် ဒီလောက်တုတ်တဲ့လီးကို မမြင်ဖူးချေ။ အရှည်မှာလည်း ခုနစ်လက်မအနည်းဆုံးရှိလိမ့်မည်။ တင်မြင့်လီးကတော့ သူလိုကိုယ်လို လီးအစားထဲက ဖြစ်သည်။ သူတို့လီးအားလုံး တူညီသည့်အချက်ကတော့ လီးအားလုံး လွန်စွာ ညစ်ပတ်နံစော်ကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုလီးကြီးတွေနှင့် ခင်သီတာ၏ အပျိုစင်စစ် အဖုတ်လေးကို ၀ိုင်းလိုးကြတော့မည်မှာ အသေအချာပင်။ ကျော်စွာမှာ သီတာအတွက် အလွန်ပင် စိတ်ပူနေမိသည်။ ထို ဧရာမလီးကြီးတွေကို သီတာဘယ်လိုမှ ခံနိုင်မည်မဟုတ်။ သူတို့ကလည်း ညင်ညင်သာသာလိုးကြမည် မဟုတ်။ သီတာအဖုတ်လေးတော့ ဟက်တက်ပင် ကွဲပေတော့မည်။
စောကြီး၏လီးမှာ ယခုအခါ သီတာစုပ်ပေးနေ၍ သန့်ရှင်းပြောင်လက်နေပြီ။ သီတာမှာ ရှက်ရှက်နှင့် မျက်နှာမဖော်နိုင်တော့ဘဲ လီးကိုသာ ကုန်းစုပ်နေရာ စောကြီးမှာ တအင်းအင်းနှင့် အကြိုက်တွေ့နေတော့သည်။ တစ်ခါတွင် လီးစုပ်နေရင်းနှင့် စောကြီး၏ ရှစ်လက်မလီးကြီးတစ်ချောင်းလုံး သီတာ့ပါးစပ်လေးထဲ အဆုံးဝင်သွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ စောကြီးက အတင်းဖိချ၍ သီတာတစ်ယောက် အသက်ရှူပိတ်သွားမည်ကို ကျော်စွာ စိုးရိမ်နေမိသည်။ လီးကြီးကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်နေရရှာသော သီတာ၏ကိုယ်လုံးလေးမှာ တသိမ့်သိမ့်တုန်နေရာ သူမ၏နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာလည်း တအိအိနှင့် လှုပ်နေသည်မှာ ဘယ်ယောက်ျား လီးမတောင်ဘဲ နေနိုင်မည်နည်း။ ယင်းကို ရိပ်မိသော ထင်လင်းက ကျော်စွာအနီးသို့ ကပ်လာပြီး ကျော်စွာ့လီးကို အပေါ်က ဖမ်းအုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ “ဟား ကြည့်ကြပါဦး၊ ဒီမှာ ရည်းစားမုဒိမ်းကျင့်ခံရတာကြည့်ပြီး လီးတောင်နေတာ တွေ့ဖူးကြရဲ့လား၊ ဟားဟားဟား” ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ထင်လင်းက လျင်မြန်စွာဖြင့် ကျော်စွာ၏ ဂျင်းဘောင်းဘီရော၊ အောက်ခံဘောင်းဘီရောပါ ချွတ်ချပစ်လိုက်သည်။ ကျော်စွာတစ်ယောက် ရှိသမျှသိက္ခာများ ဆည်မရတော့သလို ခံစားလိုက်ရသည်။ သူ၏လီးမှာ အစွမ်းကုန်မာတောင့်နေပြီး လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ခံထားရသဖြင့် လက်နှင့်ပင် မကွယ်နိုင်ဘဲ ရှေ့သို့ တန်းတန်းကြီး ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီး ထိုးထွက်နေလေတော့သည်။ ထင်လင်းအော်သံကြားသဖြင့် လူအားလုံး ကျော်စွာကို ၀ိုင်းကြည့်မိသွားကြသည်။ ရည်းစားဖြစ်သူကို ရှေ့တွင် မုဒိမ်းကျင့်၊ မိမိကို လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားသည့်ကြားက ကိုယ့်ရည်းစား နို့တုံးလုံးနှင့် သူများလီးစုပ်တာကြည့်ပြီး အရှက်မရှိ လီးတောင်နေသည့်အဖြစ်။ မုဒိန်းကောင် ယောက်ျားအားလုံး လက်ညှိုးဝိုင်းထိုးပြီး ခွက်ထိုးခွက်လန် ၀ိုင်းရယ်ကြတော့သည်။ သီတာကိုယ်တိုင်လည်း လီးစုပ်ရင်းတန်းလန်း မျက်လုံးလေး လှန်ကြည့်လိုက်ရာ တွေ့လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် အလွန်အံ့သြသွားရလေသည်။ Had3s မိမိအချစ်ဆုံးချစ်သူက မိမိကို အခြားသူများ ပက်ပက်စက်စက် မုဒိန်းကျင့်နေတာကိုကြည့်ပြီး လီးတောင်နေသည်။ သီတာတစ်ယောက် ကျော်စွာ၏ မတ်တောင်နေသည့်လီးကို တွေပြီးကြည့်နေမိသည်။ ကျော်စွာခမျာ တောင်းပန်သည့်အကြည့်ဖြင့်သာ သီတာ့ကို တောင်းပန်ဖို့ ကြိုးစားနေရရှာသည်။ မျက်လုံးက တောင်းပန်နေသော်လည်း လီးကတော့ မုဒိန်းကောင်တွေနှင့်အပြိုင် ကိုးဆယ်ဒီဂရီ တောင်မတ်နေသည်။ “ဘာလုပ်နေတာလဲ စုပ်လေ” စောကြီး၏အမိန့်ပေးသံကြားမှ သီတာသတိဝင်ပြီး လီးချောင်းကြီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားအောင် မျိုချပေးလိုက်သည်။ လည်မျိုအသားနုလေးများ၏ အထိအတွေ့ကြောင့် စောကြီးတစ်ယောက် တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး ဖီးတွေ အပြည့်တက်သွားရသည်။ သီတာတစ်ယောက် ကျော်စွာ၏အဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး လောကကြီးကို စိတ်ကုန်သွားပုံရလေသည်။ စောကြီး၏ လီးကြီးကို သဲသဲမဲမဲ မလွှတ်တမ်းကုန်းစုပ်တော့သည်။ “အား ငါမနေနိုင်တော့ဘူး” အောင်ဒင်တစ်ယောက် လုံးဝ သည်းမခံနိုင်တော့ဘဲ ကုန်းပြီးစုပ်နေသည့် သီတာ့ဖင်နောက်သို့ ပြေးဝင်သွားသည်။ ပြီးလျှင် “ဆောရီးဆရာ၊ ဆရာ့ကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရပါဘူး” ဟု စောကြီးကို ပြောပြီး သီတာ့ဘောင်းဘီကို အတင်းဆွဲချွတ်တော့သည်။ သီတာမှာ စောကြီး၏လီးကို လွှတ်ပြီး အတင်း အကြောက်အကန်ရုန်းလေသည်။ စောကြီးက ဘေးတွင်ချထားသော ဓားကို ကောက်ယူပြီး “ကောင်မ သေချင်လို့လား၊ ငြိမ်ငြိမ်အချွတ်ခံ၊ လီးဆက်စုပ်၊ စောက်အရသာပျက်တယ်” ဟု ခြောက်လိုက်မှ သီတာမှာ ငြိမ်သွားပြီး ဖင်လေးကုန်းကာ လီးကြီးကို ဖြည်းဖြည်းလေး ပြန်စုပ်နေရသည်။ အောင်ဒင်မှာ အဆီပြန်သော မျက်နှာကြီးဖြင့် သီတာ့ဘောင်းဘီကို ကြယ်သီး၊ ချိတ်၊ ဇစ် တဆင့်ချင်း ချွတ်ပြီး အောင်သို့ ဆွဲချလိုက်သည်။ သီတာ၏ ဖင်ကြီးမှာ ကြီးထွားလွန်းသဖြင့် ဘောင်းဘီမှာ တော်တော်နှင့် ချွတ်မရဘဲ တစ်နေသည်။ အတင်းဆွဲချလိုက်မှ ဖင်လုံးဖြူဖြူကြီးတ၀က်စီ အတွင်းခံအောက်မှ ပြူးထွက်လာသည်။ ယခုအခါ သီတာ့ခန္ဒာကိုယ်ပေါ်တွင် အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဆပ်စပိုင်တာ အနီရောင်လေးတစ်ထည်သာ ကျန်တော့သည်။ ကျော်စွာမှာ ဒီနေ့ဒီအချိန်တွင် ချစ်သူ၏ ကိုယ်လုံးအလှကို ကိုယ်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်ဟု မထင်ထားခဲ့ပေ။ မြင်ရတော့လည်း အခုလို အဖြစ်မျိုးနှင့်။ ဘာပဲပြောပြော သီတာ၏ လုံးကြီးပေါက်လှ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက ကျော်စွာ၏ လိင်စိတ်တွေကို ရာနှုန်းပြည့် နှိုးဆွနေလေသည်။ သီတာ၏ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး တင်သားများ၊ ဖြောင့်စင်းသန်မာသော ပေါင်တံများက ကျော်စွာကိုသာမက အခန်းထဲရှိ ယောက်ျားများအားလုံးကို ရာဂစိတ်များ ကြွစေရာ အားလုံး၏ လီးများမှာ လုံးဝမတ်တောင်လျက် ရှိတော့သည်။ ထင်လင်းတစ်ယောက်သာ ဘောင်းဘီမချွတ်သေးဘဲ ဆေးလိပ်ခဲပြီး အခန်းထောင့်မှထိုင်၍ ကြည့်နေသည်။ သူလည်း လီးတောင်နေမည်မှာ အသေအချာပင်။ အောင်ဒင်တစ်ယောက် အချိန်ဆိုင်းမနေတော့ဘဲ ဖင်ကုန်းပြီး လီးစုပ်နေသော သီတာ၏ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဖြတ်ကနဲ ဆွဲချွတ်ချလိုက်တော့သည်။ သီတာမှာ မထူးတော့ပြီမို့ ခြေထောက်လေးများပင် ကြွကာ ဘောင်းဘီရော၊ အတွင်းခံရော ကွင်းလုံးကျွတ် အချွတ်ခံလိုက်တော့သည်။ ယခုအခါမူ မင်းသမီး မော်ဒယ် ရှုံးအောင် ချောလှပြီး တက္ကသိုလ်တစ်ကျောင်းလုံးတွင် ထိပ်ထိပ်ကြဲ နာမည်ကြီး ကွင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သော သီတာသည် လူယုတ်မာ မုဒိမ်းကောင်ကြီး လေးကောင်နှင့် အချစ်ဆုံးရည်းစားတို့၏ ငမ်းငမ်းတက် လိုးချင်၊ သူမ၏ ဆူဖြိုးသော သွေးသား အသားစိုင်တို့ကို အရသာခံချင်၍ တောင်မတ်နေသော
အရွယ်စုံ အရောင်စုံ အနံ့စုံ ပုံစံစုံ လီးငါးချောင်း၏ အလယ်တွင် အရှက်မှန်သမျှ အကုန် ဟင်းလင်းပွင့်ပြီး မိမွေးဖမွေးတိုင်း ကိုယ်လုံးတီးနှင့် လီးစုပ်နေရသည့်အဖြစ်သို့ ရောက်နေလေတော့သည်။ ကျော်စွာမှာ သီတာ၏ ကိုယ်တုံးလုံးကို ဘေးတိုက်သာ မြင်နေရသည်။ သီတာ၏ ဖင်လုံးကြီးမှာ အနောက်သို့ ကော့ထွက်နေပြီး အောက်ပိုင်းတွင် သန်မာပြီး ကြွက်သားများသာရှိသော ပေါင်လုံးများက သွယ်ဆင်းသွားရာ ယောက်ျားတိုင်းအတွက် လိုးချင်စရာအတိပြီးနေတော့သည်။ အသားအရေမှာလည်း နေမထိသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်၍ နို့နှစ်လို ဖြူဝင်းစိုပြေနေရာ လက်ဖျားဖြင့်ပင် တို့ရက်စရာမရှိပေ။ ကျော်စွာမှာ ဘေးတိုက်အနေအထားဖြစ်၍ သီတာ့စောက်ဖုတ်ကို မမြင်နိုင်ပဲ ဖြစ်နေရာ အနည်းငယ်ပင် မကျေနပ်သလို ဖြစ်မိလိုက်သေးသည်။ ထိုစဉ်မှာပင် “ဟာ ကြည့်ကြပါဦးဟေ့၊ တကယ်မယုံနိုင်စရာပါပဲ၊ ဘယ်လိုစုံတွဲလဲဟ” ဟု အော်လိုက်သော အောင်ဒင်၏ အသံဆိုးကြီးကြောင့် တင်မြင့်ရော၊ ထင်လင်းရောပါ အောင်ဒင်၏ နံဘေးသို့ အပြေးသွားကြည့်ကြသည်။ သူတို့အားလုံးသည် ကုန်းထားသော သီတာ၏ ဖင်လုံးကြီးနှစ်လုံးကြားကို မယုံနိုင်သော မျက်လုံးများဖြင့် စူးစိုက်ကြည့်နေကြတော့သည်။ ကျော်စွာလည်း သိချင်စိတ်များ အလွန်ပြင်းထန်ပြီး မြင်ရလို မြင်ရငြားပင် ခေါင်းကို အတင်းထောင်ကြည့်နေမိသည်။ သီတာ၏မျက်နှာလေးမှာ ဇီးရွက်ခန့်သာ ရှိတော့သည်။ မျက်လုံးလေးနှစ်လုံးကို စုံမှိတ်ပြီး စောကြီး၏ လီးဒစ်ကြီးကို ငုံထားလျက်က ခေါင်းလေးကို လုံးဝငုံ့ထားလိုက်တော့သည်။ “ဟကောင်တွေ ဘာဖြစ်တာလဲ၊ အလန့်တကြား” စောကြီးကလည်း သိချင်သဖြင့် အော်မေးလိုက်သည်။ သူက ဇိမ်ခံတန်းလန်းနှင့်မို့ ခေါင်းကနေ ဖင်ဘက် ထကြည့်၍ သိပ်အဆင်မပြေဖြစ်နေသည်။ သူ့ကို လီးစုပ်ပေးနေသော ကောင်မလေး၏ ဖင်ကြားတွင် လီးများပေါက်နေရော့သလား။ ရုပ်ကလေးလှသလောက် စောက်ဖုတ်တွင် လိင်အနာကြီးတွေများ ပေါက်နေရော့သလား.... ဟု သတ္တိကြောင် လူယုတ်မာ စောကြီးက လီးအတောင်သားနှင့် တွေးပြီးပူလိုက်သေးသည်။
“ဒီကောင်မ စောက်ဖုတ်လေ၊ စောက်ရေတွေကို ရွှဲနစ်နေတာပဲ၊ ဒီမှာကြည့်” တဏှာရူးတင်မြင့်က ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် သီတာ၏ဖင်နှစ်လုံးကြား စောက်ဖုတ်ရှိရာနေရာကို လက်တစ်ဝါးလုံးနှင့် အုပ်ပြီး ပွတ်ဆွဲကာ လက်ကို မြှောက်ပြလိုက်သည်။ ကျော်စွာ ကိုယ့်မျက်စိပင် ကိုယ်မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်သွားရသည်။ တင်မြင့်၏ လက်ဖ၀ါးပေါ်တွင် ချွဲပျစ်ပျစ်အရည်ကြည်များ ရွှဲနစ်နေသည်။ လက်ဝါးမှပင် အောက်သို့ တတောက်တောက်နှင့် သီတာ့ဖင်ပြောင်ကြီးတွေပေါ်သို့ပင် စီးကျနေလေသည်။ “ကောင်မက ဆရာ့လီးစုပ်ရလို့ စောက်ပတ်ယားပြီး စောက်ရေတွေယိုနေတာ ဆရာရေ့၊ လူကသာ ပဲများပြီး ဟန်လုပ်နေတာ၊ စောက်ပတ်က ဆရာ့လီးကို ကြိုက်လွန်းလို့ စောက်ရေလျှံနေပြီ။ ရုပ်ကလေးလှသလောက် တဏှာ တော်တော်ကြီးတာပဲ။ ဒီလောက်များတဲ့ စောက်ရည် တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး။ အံ့သြစရာ စုံတွဲပဲ။ ဘဲကလည်း ကိုယ့်စော် မုဒိမ်းကျင့်ခံရတာကြည့်ပြီး လီးတောင်၊ စော်ကလည်း လီးမြင်တာနဲ့ စောက်ရည်ထွက်။ ကမ္ဘာမှာ စောက်ရှက်မရှိဆုံး၊ အောက်တန်းအကျဆုံး၊ နှာဘူးအထဆုံး စုံတွဲပါပဲလား၊ ဟားဟားဟား” .............. “ဟေ့ကောင် တင်မြင့်ရ၊ လီးမြင်တာနဲ့လို့ မပြောပါနဲ့၊ ကောင်မက ငါ့လီးကိုမှ ကြိုက်သွားလို့ နေမှာပါကွ။ ငါ့လီးက ကြီးကလဲကြီး၊ အနံ့လေးကလည်း မွှေး၊ အရသာလေးကလည်းကောင်း၊ မင်းတို့ပြောတာနဲ့ ငါ့လီးတောင် စိတ်ကြီးဝင်ပြီး သုက်ထွက်ချင်လာပြီ။ ဟဲ့ကောင်မ ဖြည်းဖြည်းစုပ်၊ အငမ်းမရ လုပ်မနေနဲ့၊ ငါ သုက်မထွက်ချင်သေးဘူး။ အရသာခံချင်သေးတယ်။ စောက်နှာဘူးမရဲ့” ...... မုဒိမ်းကောင်များရဲ့ ပက်ပက်စက်စက် ပြောသံတွေကြောင့် သီတာခမျာ မျက်နှာတစ်ခုလုံးနီရဲပြီး မျက်ရည်လေးများပင် ၀ဲလာရသည်။ ကျော်စွာမှာ အံ့အားသင့်နေသော်လည်း သီတာ့အတွက် သနားဝမ်းနည်းစိတ်တော့ ဖြစ်မိသည်။ သို့သော် နားလည်ပေး၍တော့ တော်တော်နှင့်မရပေ။ ဒီလို လူယုတ်မာ မုဒိမ်းကောင်ရဲ့ လီးညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ကြီးကို စုပ်ပေးရသည့်အတွက် စောက်ရည်ထွက်ရသတဲ့လား။ တကယ်တော့ ကျော်စွာသည် သီတာ၏ ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း သီတာ၏အကြောင်းကို အလုံးစုံသိသူ မဟုတ်ပါချေ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သီတာ့အကြောင်းကို မခြွင်းမချန် အကုန်သိသူဆို၍ သီတာ၏အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း နီလာတစ်ယောက်သာရှိလေသည်။ အခုတော့ သီတာ့အကြောင်းတွေကို မုဒိမ်းကောင်လေးကောင်နှင့် သူ့ချစ်သူ ကျော်စွာတို့ပါ သိရပေတော့မည်။ သီတာငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကတည်းက ယောက်ျားလေး လိင်အင်္ဂါတွေကို စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ လိမ်လိမ်မာမာ နေခဲ့ရသော်လည်း အခွင့်ရလျှင် ရသလို အစ်ကိုမောင်များ၊ ဦးလေးများ ရေချိုးခန်းဝင်လျှင် ချောင်းကြည့်ခဲ့သည်။ သီတာ ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် သီတာ့အစ်ကိုဝမ်းကွဲ ဂွင်းတိုက်သည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ အစ်ကို ၀မ်းကွဲ၏ လီးမာမာတောင်တောင်လေးကို တစ်ပတ်လောက် မျက်စိထဲက မထုတ်နိုင်ခဲ့။ သုက်ရည်ဖြူဖြူများ လီးထိပ်မှ ပန်းထွက်သည်ကို ကြည့်ပြီး အသက်ရှူမှားခဲ့ရသည်။ စောက်ဖုတ်ထဲမှ တမျိုးကြီးဖြစ်ပြီး အရည်ချွဲချွဲများ ထွက်သဖြင့် လက်နှင့် ကိုင်ကြည့် ပွတ်ကြည့်ရင်း အိပ်ရာထဲတွင် အာသာဖြေတတ်ခဲ့သည်။ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော် ဦးလေး လူပျိုကြီး ဂွင်းတိုက်တာတွေ့မှ တကယ့်လီးဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ သိခဲ့ရသည်။ ဦးလေးလီးက အတော်ကြီးသည်။ တုတ်တုတ်မဲမဲကြီး၊ ဂွေးဥကြီး နှစ်လုံးကလည်း အယ်နေသည်။ မိန်းမ မရှိသေးသော ဦးလေးက ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ကျကျနန ပက်လက်လှန်ပြီး စိမ်ပြေနပြေ အကြာကြီး ဂွင်းတိုက်တတ်သည်။ ရေချိုးခန်းနှင့် ကပ်လျက် အိမ်သာမှ ချောင်းသည့် သီတာ့အဖို့တော့ စိတ်ကြိုက်ပင်။ ဦးလေး ပက်လက်လှန်သည်နှင့် သီတာ ထမီလှန်တော့သည်။ ဦးလေး ဂွင်းတိုက်သည့် စည်းချက်နှင့်အညီ သီတာ ကိုယ့်စောက်စိကို ကိုယ်လိုက်ပွတ်တတ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဘယ်အချိန် ဦးလေး သုက်ထွက်တော့မည် ဆိုသည်ကိုပင် သီတာ ကြိုသိနေတတ်သည်။ ဦးလေးနှင့် အချိန်ကိုက်အောင် သီတာလိုက်ပြီးတတ်လာသည်။ ဦးလေး တစ်ခါပြီးလျှင် သုက်အများကြီး ထွက်တတ်သည်။ သုက်ရည်ဖြူဖြူပျစ်ပျစ်တွေ ဖျန်းကနဲဖျန်းကနဲ အပေါ်ပန်းတက်ပြီး သူ့ပေါင်တွေ ဘိုက်တွေပေါ် ပြန်ကျသည်။ ဦးလေးတစ်ယောက် သုက်ရည်တွေ ပေရေပြီး ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ပေါ် လီးမပျော့တပျော့ကြီးနှင့် ခြေကုန်လက်ပန်းကျနေချိန်တိုင်းမှာ သီတာတစ်ယောက်လည်း ပေါင်ကြားမှာ စောက်ရေစီးကြောင်းတွေ ရွှဲနစ်ပြီး အိမ်သာထဲမှာ ပေါင်ကားရားနှင့် ထမီကွင်းသိုင်းပြီး နံရံပေါက်ကို မျက်လုံးအပ်ကာ အမောဖောက်နေတတ်သည်။ တခါတလေ ဦးလေးအခန်းထဲဝင်ပြီး အ၀တ်တွေအကုန် တုံးလုံးချွတ်ပစ်ကာ အလိုးခံပစ်လိုက်ချင်စိတ်တွေ မနည်းထိန်းထားရသည်။ သီတာက ပတ်ဝန်းကျင် ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ စံပြမိန်းကလေးအဖြစ် အားလုံးက အထင်ကြီးလေးစားခံရသောသူမို့ ထိုသို့သော အပြုအမူမျိုးများကို လူကွယ်ရာနှင့် အိပ်မက်စိတ်ကူးထဲမှာသာ တိတ်တဆိတ် သိုဝှက်ခဲ့ရလေသည်။ ဦးလေးနိုင်ငံခြားထွက်သွားသောနေ့က သီတာမှာ ရည်းစားနှင့် ခွဲရသည့်အလား အိပ်ရာထဲမှာ အကြီးအကျယ် ကြိတ်ငိုခဲ့ရလေသည်။
သီတာ ၁၇ နှစ်ခန့်မှာ ဘေးအိမ်သို့ သီတာနှင့် ရွယ်တူ နီလာတို့ မိသားစု ရောက်လာခဲ့သည်။ မော်လမြိုင်မှ မွန်သွေးစပ်သော နီလာသည် အသားညိုညိုချောချော၊ အရပ်မြင့်မြင့်နှင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်လှသူ ဖြစ်သည်။ နို့လုံးကြီးကြီး၊ ဖင်လုံးကြီးကြီးနှင့် နီလာမှာ သီတာနှင့် အဆက်အပေါက်ချင်း ဆင်တူလှသည်။ သီတာက ဖြူဖြူထွားထွား၊ နီလာက ညိုညိုထွားထွားဖြစ်သည်။ နှစ်ယောက်လမ်းထွက်သွားလျှင် ယောက်ျားတိုင်း လည်ပြန်ငေးကြရသည်။ နီလာက မဟုတ်တာ အကုန်သိ အကုန်တတ်သည်။ မိဘချမ်းသာပြီး စီးပွားရေးသာ အာရုံစိုက်နေသဖြင့် သမီးဖြစ်သူကို လွှတ်ထားရာ နီလာမှာ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေသည်။ ရည်းစားကို တစ်လတစ်ယောက်နှုန်းတွဲသည်။ လိင်ကိစ္စပွင့်လင်းလွန်းသည်။ ထားသမျှ ရည်းစားတိုင်းနှင့် အမြဲလိုးသည်။ ရည်းစားအိမ်မှာ လူလွတ်လျှင် ရည်းစားအိမ်၊ သူမ မိဘတွေ နိုင်ငံခြားသွားလျှင် သူမအိမ်၊ တခါတလေ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ ကားနောက်ခန်း၊ နေရာမရွေးလိုးတတ်သည်။ သီတာနှင့် နီလာ သူငယ်ချင်းဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာမီ နီလာက လိင်အကြောင်းတွေ စစပြောတတ်လာသည်။ စောက်ဖုတ်ထဲက ယားပြီး စောက်ရည်တွေ တတောက်တောက်ယိုနေသော်လည်း သီတာတစ်ယောက်မှာ ထုံးစံအတိုင်း စိတ်မ၀င်စားချင်ယောင်ပြခဲ့သည်။ နီလာက အထာနပ်သည်။ သီတာ ပဲကိုင်နေမှန်းသိသည်။ တစ်ရက်တွင်တော့ နီလာ့အိမ်တွင် လူကြီးမရှိချိန် သီတာ့ကို ခေါ်ပြီး အောကားညာပြလိုက်သည်။ နီလာက အင်စီ၊ ဟတ်ဖ်ကားတွေ ဘာတွေ လုပ်မနေ။ တခါတည်း အောကား တန်းပြလိုက်တော့သည်။ အောကားမှ ရိုးရိုးကားမဟုတ်၊ ကောင်မလေး တစ်ယောက်တည်းကို လူအများကြီး ၀ိုင်းလုပ်သည့် ကားမျိုးဖြစ်သည်။ အစတော့ စုံတွဲလုပ်နေသည်။ နောက် ယောက်ျားတစ်ယောက် ရောက်လာသည်။ ပါးစပ်တစ်ယောက်၊ အဖုတ်တစ်ယောက် လိုးကြသည်။ ခဏနေတော့ နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာသည်။ မင်းသမီး ဖင်အောက်က အိပ်ပြီး ဖင်ပေါက်ကို လိုးသည်။ တစ်ယောက်က အပေါ်က ခွပြီး စောက်ဖုတ်ကို လိုးသည်။ ကျန်တဲ့ တစ်ယောက်က ခေါင်းရင်းမှာ မတ်တတ်ရပ်ပြီး လီးအစုပ်ခံ၊ ပါးစပ်ပေါက်ကို လိုးသည်။ ခဏနေတော့ နောက်နှစ်ယောက် ဘေးမှာ လာရပ်ပြီး လက်တစ်ဘက်စီနှင့် ဂွင်းတိုက်ခံသည်။ မင်းသမီးကို အားရပါးရ ဖွတ်ဖွတ်ကျေအောင် ၀ိုင်းလိုးပြီး နောက်ဆုံး ငါးယောက်လုံး ပြိုင်တူ လရေတွေ ပန်းထုတ်ကြသည်။ ဘေးနှစ်ယောက်က နို့တစ်လုံးစီပေါ်တွင် ပန်းသည်။ ပါးစပ်ထဲ ပန်းသည့် လရေကို တစ်စက်မကျန် မျိုချသည်။ စောက်ခေါင်းနှင့် စအိုပေါက်က ပြန်ယိုကျသည့် သုက်ရည်တွေကို မင်းသမီးက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် လက်ဝါးနှင့် ခံပြီး အကုန်ပြောင်အောင် လျက်ပစ်သည်။ နို့ပေါ်က လရည်တွေကိုလည်း လက်နဲ့သုတ်ပြီး အကုန်သောက်ပစ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ လရည်ရွှဲနေသည့် လီးတစ်ချောင်းစီကို အငမ်းမရ လိုက်စုပ်လိုက်သေးသည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်က လီးထပ်တောင်လာသေး၍ လီးထပ်စုပ်ပြီး လရည်လိုက်ပွဲ တစ်ခါ ထပ်သောက်လိုက်သေးသည်။
သီတာတစ်ယောက် တီဗီစဖွင့်လိုက်သည်နှင့် ဖန်သားပြင်နှင့် မျက်စိမခွာနိုင်အောင် ဖြစ်နေရသည်။ နီလာ၏ အိပ်ခန်းထဲတွင် နှစ်ယောက်အတူတူ ကုတင်ပေါ်အိပ်ပြီး ကြည့်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မင်းသမီးမှာ အဖြူမ ဖြစ်သော်လည်း နေလောင်ခံထားသဖြင့် အသားရောင် နီမြန်းနေသည်။ ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်နေသော မင်းသမီးမှာ တကိုယ်လုံး အမွေးအမျှင် အမာရွတ် မှဲ့တပြောက်မရှိဘဲ ချောမွတ်လှပလွန်းလှသည်။ ဖင်ပေါက်၊ စပ်ပပ်ပေါက်များမှာ သန့်ရှင်းပြီး နုဖတ်နေသည်။ စပ်ပပ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများမှာ နှင်းဆီပွင့်ချပ်လေးများလိုပင် ပန်းသွေးရောင်ထပြီး စိုပြေလတ်ဆတ်နေသည်။ မျက်နှာမှာလည်း အင်ဂျလီနာ ဂျိုလီနှင့် ကင်မရွန်းဒိုင်းယက် စပ်ထားသော ပုံမျိုး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလှသည်။ နို့နှစ်လုံးမှာ ဆီလီကွန် မထည့်ထားသော သဘာဝနို့အုံများ ဖြစ်ရာ သိပ်မကြီးသော်လည်း ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွားနှင့် အလွန်ကြည့်ကောင်းနေသည်။ အဆီတစ်စက်မှ မရှိသော ဘိုက်သားမှာ ယောက်ျားတိုင်းအတွက် သုက်ရည်ပျစ်ပျစ်များ ပန်းထုတ်ချင်စရာ အတိပြီးနေလေသည်။ မင်းသားများမှာလည်း အရပ်မြင့်မြင့် ဗလတောင့်တောင့်များချည်းသာ ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးမင်းသား ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်ချိန်တွင် သီတာ၏မျက်လုံးလေးများ ၀ိုင်းစက်သွားရသည်။ အဖြူကောင်၏ လီးကြီးမှာ ပန်းနုရောင်ထနေသည်။ လိင်တံကြီးမှာ ဆယ်လက်မကျော်ပြီး အကြောထူကြီးများ အပြိုင်းပြိုင်းထနေသည်။ လီးဒစ်မှာ သန့်ရှင်းပြီး ပန်းရောင်သန်းနေရာ သီတာမှာ မျက်လုံးမခွာနိုင်အောင် ဖြစ်နေရသည်။ သီတာတစ်ယောက် ထမီလှန်ပြီး စောက်စိကောက်ပွတ်ချင်စိတ်တွေ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်လာသည်။ မင်းသမီးကို လီးငါးချောင်းလုံးဖြင့် ၀ိုင်းလိုးနေချိန်တွင်တော့ သီတာ့ စောက်ပတ်တစ်ခုလုံး ခွေးလယားသီးနှင့် အတို့ခံထားရသလို ယားကျိ စိုရွှဲလာတော့သည်။ ထိုမင်းသမီး၏ နေရာတွင် ကိုယ်တိုင်ဝင် အလိုးခံချင်စိတ်များ တဖွားဖွား ပေါက်လာသည်။ သို့သော်လည်း ထုံးစံအတိုင်း စိတ်ထဲက မပါသော စကားများကိုသာ သီတာပါးစပ်က ပြောထွက်နေသည်။ “ဟာ၊ လူငါးယောက်တောင် ၀ိုင်းလိုးမှတော့ ဒီမိန်းမ တန်ဖိုးက ဘာရှိတော့မှာလဲ၊ တကယ် အရှက်မရှိတဲ့ ဟာမတွေပဲ” ........... နီလာက ရယ်လိုက်ပြီး “သီတာရယ် နင်အလိုးမခံဖူးလို့ပါ။ အဲဒီလို တောင့်တောင့် ဖြောင့်ဖြောင့် ကောင်လေး ငါးယောက်လောက်က တပြိုင်တည်း ၀ိုင်းလိုးတာ ခံရတာလောက် ကောင်းတာ ဘာမှမရှိဘူး” နီလာ့စကားကြောင့် သီတာမှာ တအံ့တသြဖြစ်သွားရသည်။ “ဟယ် နီလာ နင်က အဲဒီလိုမျိုး တကယ် လုပ်ဖူးတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား” သီတာက မမေးစဖူး မေးလာသဖြင့် နီလာလည်း သူ၏ လိင်အတွေ့အကြုံများကို ခရေစေ့တွင်းကျ အသေးစိတ် ပြောပြလေတော့သည်။
နီလာ၏ ပထမဆုံး ရည်းစားမှာ ကျောင်းနေဖက် တစ်တန်းတည်း သူငယ်ချင်း ရဲနိုင်ဆိုသူ ဖြစ်သည်။ အတန်းထဲတွင် အချောဆုံး အလှဆုံး နီလာက အတန်းထဲရှိ ယောက်ျားလေးများထဲ၌ ရုပ်အဖြောင့်ဆုံး ပိုက်ဆံလည်း အရှိဆုံး ရဲနိုင်ကို မိမိအား ပိုးပန်းသူ အများကြီးကြားထဲမှ ခေါင်းခေါက်ပြီး ရွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ရဲနိုင်မှာ အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀၌ပင် သူဋ္ဌေးသားပီပီ ကိုယ်ပိုင်ကားမောင်းပြီး ကျောင်းတက်သူ ဖြစ်သည်။ မိဘနှစ်ပါးလုံးက အမေရိကားတွင် အခြေချဖို့ ကြိုးစားနေခိုက်ဖြစ်၍ သားဖြစ်သူ ရဲနိုင်မှာ မိဘများ၏ တိုက်ကြီးတွင် တစ်ဦးတည်း အစေခံများနှင့် အကျော့သားနေနိုင်လေသည်။ နီလာနှင့် ရည်းစားဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်လောက်အကြာတွင် ရဲနိုင်က နီလာ့ကို ထမင်းစားဖိတ်ခဲ့သည်။ ထမင်းစားရင်းနှင့် နှစ်ယောက်သား အရက်အတူတူ သောက်ဖြစ်ကြသည်။ နီလာမှာ တမင်တကာ အရက်ကို လွန်အောင်ဖိသောက်လိုက်ရာ စားပြီးသောက်ပြီးသည်နှင့် ခေါင်းမထူနိုင်အောင် မူးလေတော့သည်။ ရဲနိုင်ကိုယ်တိုင်လည်း မူးမူးနှင့် နီလာ့ကိုယ်လုံး ထွားထွားကြီးကို ပွေ့ပြီး သူ့အိပ်ခန်းထဲ ခေါ်သွားခဲ့သည်။ အိပ်ခန်းထဲမှ သူ့ဧရာမ ကုတင်ကြီးပေါ် နီလာ့ကို ပစ်တင်လိုက်ချိန်တွင် နီလာ့ထမီပါးလေးမှာ ပြေလျော့ပြီး ကျွတ်ခါနီး ဖြစ်သွားရသည်။ နီလာ၏ ပေါင်သားပြည့်ပြည့်လေးများက လှစ်ကနဲ ပေါ်လာသည်။ အသားညိုသော်လည်း ကိုယ်အတွင်းသားများက နူးညံ့ပြီး စိုဝင်းနေရာ ရဲနိုင်တစ်ယောက် အမူးပင် ပြေချင်ချင် ဖြစ်သွားရသည်။ သို့သော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး နီလာ့ကို ကုတင်ပေါ်တွင် နေရာချပေးပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ဘေးတွင် အသာဝင်အိပ်လိုက်မိသည်။ မူးပြီး သတိလစ်နေသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတော့ အလိုမတူဘဲ ရဲနိုင် မတော်မတရား မလုပ်လိုပေ။ နှစ်ယောက်လုံး အတော်ရေချိန်ကိုက်နေပြီ ဖြစ်ရာ ခဏအတွင်းပင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားကြတော့သည်။
အတော်ကြာတော့ နီလာတစ်ယောက် အိပ်နေရာမှ နိုးလာခဲ့သည်။ ခဏကြောင်နေပြီးမှ မိမိဘယ်ရောက်နေသည်ကို သတိထားမိသွားသည်။ ရဲနိုင်၏ အခန်းထဲတွင် နှစ်ယောက်ထဲ။ ချက်ချင်းပင် နီလာ့ကိုယ်ထဲမှ ကာမသွေးတွေ ဆူကြွလာသည်။ ရာသီဥတုကလည်း ပူ၊ အရက်ကလည်း ပူ၊ တဏှာကလည်း ပူသဖြင့် နီလာ ကိုယ့်အ၀တ်အစားတွေအကုန်လုံးကို တုံးလုံး ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ အိပ်ရာဘေးရှိ ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ကြီးထဲတွင် မိမိ၏ ကိုယ်တုံးလုံး ပုံရိပ်ကို အတိုင်းသားမြင်နေရသဖြင့်လည်း ပိုလို့ ရမ္မက်ထန်မိပြန်သည်။ နီလာ၏ နို့ကြီး ဖင်ကြီးတွေက အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် အယ်ထွက်နေသည်။ စောက်မွေးကို ပြောင်နေအောင် ရိတ်ထားသဖြင့် ကိုယ်တုံးလုံးပေါ်တွင် အမွေးတစ်ပင်မှ မရှိသည့်အလား ပြောင်ချောလွန်းနေသည်။ နီလာက ဆံပင်ကိုလည်း ယောက်ျားလေးလို တိုတိုညှပ်ထားရာ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ လည်ပင်းမှ ခြေဖ၀ါးအထိ အကာအကွယ်မရှိဘဲ လုံးဝကို ဗလာကျင်းနေတော့သည်။ နို့၊ ဖင်တွေကြီးသလောက် ဘိုက်၊ ခါး၊ ကျောပြင်၊ လက်မောင်း၊ ပေါင်သားများမှာ အဆီ တစ်စက်မှ မရှိဘဲ ကျစ်လျစ်သန်မာ ပါးလျားလှသည်။ နီလာမှာ ကုတင်ဘေးတွင် မတ်တတ်ရပ်လျက် မိမိ၏ ဖင်တုံးလုံးအလှကို ဂုဏ်ယူစွာ ရှုစားပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ အိပ်နေသော ရဲနိုင်ကို ကြည့်လိုက်မိသည်။ ရဲနိုင်ဝတ်ထားသော ပုဆိုးမှာ လျော့ကျနေသော်လည်း လီးနေရာကိုတော့ ဖုံးနေသေးသည်။ နီလာတစ်ယောက် ရဲနိုင်၏ လီးနေရာကို စိုက်ကြည့်ရင်း စောက်ဖုတ်ထဲမှ ယားလာသည်။ အပျိုဖော်ဝင်ကတည်းက ငတ်မွတ်တောင့်တခဲ့ရသော လီး၊ ယခုတော့ ကိုယ်တွေ့ လက်တွေ့ စောက်ဖုတ်တွေ့ တွေ့ရတော့မည်။ လီးအမှတ်နှင့် စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ခဲ့ရသော ခရမ်းသီး၊ ငပျောသီး၊ သခွားသီး၊ ဘိုးအေဖြစ်သူ၏ လက်ကိုင်တုတ်ကောက် မရေမတွက်နိုင်သော လီးအရွယ် ရှည်မျောမျော ပစ္စည်းမှန်သမျှကို မေ့ပစ်လိုက်တော့မည်။ ယနေ့မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင် လီးအစစ်နှင့်သာ စခန်းသွားရတော့မည်ဟု ကျေနပ်စွာတွေးရင်း ပြုံးလိုက်မိသည်။
ကုတင်ပေါ်သို့ လေးဘက်ထောက်တက်ရင်း ရဲနိုင်၏ ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ နီလာ၏ မျက်စိရှေ့မှောက်တွင် ရဲနိုင်၏ ဖွားဖက်တော်ကြီးက ဘွင်းဘွင်းကြီး ပေါ်ထွက်လာသည်။ နီလာမှာ အသက်ရှူပင် ရပ်သွားပြီး သက်ပြင်းရှည်ကြီး ချလိုက်မိသည်။ ရဲနိုင်မှာ ရုပ်ချောသလို လီးကလည်း သန့်ပြန့်ပြီး အသားလည်းဖြူသဖြင့် ပန်းသွေးရောင်ပင် ထနေသည်။ အိပ်ပျော်နေသဖြင့် တောင်မနေဘဲ ပျော့ခွေနေသော်လည်း လီးကြီးမှာ ဆင်နှာမောင်းကြီးအလား ကြီးမားတုတ်ခိုင်လှသည်။ နီလာ့စောက်ပတ်ထဲမှ စောက်ရေတွေ ထိန်းမရနိုင်အောင် လျှံထွက်လာသည်။ အိပ်ပျော်နေသော ခြောက်လက်မခန့် လီးပျော့ပျော့ကြီးကို နီလာ လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိသည်။ လီးကြီးက ပူနွေးပြီး ကတ္တီပါသားလို နူးညံ့လွန်းလှသည်။ လီးဒစ်ကြီးကို ဖြဲပြီး နီလာ ကုန်းနမ်းလိုက်သည်။ လီးကို သေချာဆေးထားသော်လည်း အခြားနေရာနှင့် မတူသည့် လီးနံ့သင်းသင်းကို နီလာ နှစ်ခြိုက်စွာ ရှူလိုက်မိသည်။ ကိုယ့်စိတ်ကို လုံးဝမထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ရဲနိုင်၏ လီးလပျော့ကြီးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး စုပ်လိုက်မိသည်။ ပူနွေးပြီး နူးညံ့သည့် လီးကြီးတစ်ချောင်းလုံးကို နီလာတစ်ယောက် အားရပါးရ ငုံစုပ်နေတော့သည်။ အတော်ကြာကြာစုပ်ပြီးသည်အထိ လီးကတောင်မလာသေး။ လီးတစ်ချောင်းလုံးတွင်သာ နီလာ့သွားရည်တွေဖြင့် စိုရွှဲနေတော့သည်။ အမှန်တော့ ရဲနိုင်မှာ အရက်မသောက်တတ်ဘဲ စော်ဖန်ရန် အတွက်သာ အကြံထုတ် ဟန်လုပ်ပြီး သောက်ရခြင်းဖြစ်လေရာ ယခုမူ အရက်မူးလွန်ပြီး လူသေလို အိပ်ပျော်နေခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။ နီလာမှာ လီးစုပ်ရတာ မောလာသဖြင့် ရဲနိုင်၏ ကြွက်သားအပြိုင်းပြိုင်းနှင့် ပေါင်လုံးကြီးတစ်ဖက်ကို ခေါင်းအုံးပြီး ပက်လက်လှန် ပေါင်ကား စပ်ပပ်ကားကာ စောက်စိကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ပွတ်ပြီး မာစတာဘေးရှင်း လုပ်နေမိလေသည်။ ကိုယ့်စောက်ပတ်ကိုယ်နှိုက်ရင်း ရဲနိုင်၏ လီးကြီးကို လှည့်ပြီး နမ်းစုပ်နေသေးသည်။ လက်တစ်ဘက်က စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို ဆွဲဖြဲပြီး ကျန်တစ်ဘက်က စောက်စိကို အငမ်းမရ ပွတ်နေမိသည်။ နီလာ၏ စောက်စိမှာ မွေးကတည်းက ပုံမှန်ထက် သုံးလေးဆကြီးသဖြင့် စိတ်အလွန်ကြွပြီး စောက်စိတောင်နေချိန်များတွင် လီးအငယ်စားလေးနှင့်ပင် တူနေသေးတော့သည်။ စောက်ခေါင်းအတွင်းသားများမှာလည်း လီးဆာလွန်း၍ လှိုင်းထပြီး ရှုံ့လိုက်တွလိုက်ဖြစ်နေရာ စောက်ခေါင်းအ၀နှင့် ဖင်ပေါက်ဝနှစ်ခုမှာ ပြိုင်တူလို ရှုံ့ပွရှုံ့ပွနှင့် တရွရွဖြစ်နေလေသည်။ ခဏအကြာတွင်တော့ ရဲနိုင်၏လီးကြီးကို အာသာငမ်းငမ်း နမ်းရှုပ်ပြီး စောက်စိပွတ်နေရင်း နီလာ၏ ၀မ်းဘိုက်အတွင်းမှ တင်းမာလာပြီး ဖင်ကြော စောက်ပတ်ကြောများ ဓာတ်လိုက်သလို တဆတ်ဆတ်လှုပ်ရင်း ကာမဂုဏ်အာရုံ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်သွားတော့သည်။ ဖင်ကြွက်သားများ တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပင့်ကော့ထိုးနေရင်းက တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးသည့် ခံစားမှုတစ်မျိုး နီလာ့စောက်ပတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာသည်။ ရဲနိုင်၏ ဖင်တုံးလုံး ပေါင်လုံးကြီးပေါ်တွင် ခေါင်းအုံးပြီးမျက်စိကို စုံမှိတ်ကာ သားအိမ်အောက်ပိုင်းနှင့် စောက်ပတ်အုံကြီးဆီမှ ချိုဆိမ့်သော ကာမအရသာ အထွတ်အထိပ်ကို ခံစားနေရင်းက မထိန်းနိုင်အောင်သေးပေါက်ချင်စိတ်က ရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်လာလေသည်။ စောက်ခေါင်းနှင့် စောက်စိကြားရှိ သေးထွက်ပေါက်ထဲမှ တင်းကျပ်သော ဝေဒနာတစ်မျိုးဖြစ်လာပြီး ဘိုက်အောက်ပိုင်း ဆီးအိမ်တစ်ခုလုံး ပေါက်ကွဲတော့မလို ခံစားလာရသည်။ နီလာမှာ စပ်ပပ်နှိုက်ရင်း ပြီးလို့ကောင်းနေဆဲမှာ သေးပေါက်ချင်စိတ် ဖြစ်လာသဖြင့် ရဲနိုင်၏ ကုတင်ပေါ်တွင် စောက်ရှက်မရှိ သေးတွေ ထွက်ကျကုန်မည့်အဖြစ်ကို တွေးပူသွားသောကြောင့် စောက်ပတ်သား ဖင်သားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး ပြီးနေရင်းတန်းလန်းကြီးနှင့်ပင် အိမ်သာဆီသို့ပြေးရန် ကြံလိုက်မိသည်။ စောက်စိငေါက်တောက်လေးကို လက်နှင့် အဆတ်မပြတ်ပွတ်ပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ပြီးနေလျက်က လက်ထောက်ပြီး ထရန် ကြံလိုက်စဉ်မှာပင် စောက်ခေါင်းပေါ်မှ သေးထွက်ပေါက်ကို ဘယ်လိုမှ ညှစ်ထား ရှုံ့ထားပြီး ပိတ်မထားနိုင်တော့ဘဲ တအင်းအင်းတအားအားနှင့် စောက်ခေါင်းရော၊ သေးထွက်ပေါက်ရော၊ စအိုပေါက်ရော ရှိသမျှ လိင်ပေါက်၊ ကျင်ကြီး ကျင်ငယ်ပေါက်တွေကို အထိန်းအကွပ်မဲ့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် စိတ်ရှိတိုင်း လွှတ်ပေးလိုက်မိလေတော့သည်။ ထိုအခါ နီလာ၏ ကျင်ငယ်ပေါက်တွင်းမှ စောက်ရေပဲလား၊ သေးပဲလား မသိသည့် အရည်များ ဖျန်းကနဲ ဖျန်းကနဲ ရေပန်းပမာ ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်။ အရည်တွေ တဖျန်းဖျန်းပန်းထွက်ရင်း နီလာ၏ အ၀တ်မပါ ဗလာကျင်းနေသည့် လုံးကြီးပေါက်လှ ကိုယ်တုံးလုံးကြီးမှာ ကျင်စက်နှင့်တို့ပြီး အနှိပ်စက်ခံနေရသည့်အလား ဟိုဘက်ဒီဘက်လူးလှိမ့်နေရှာသည်။ ချောမောလှပသည့် မျက်နှာလေးမှာလည်း ရှုံ့မဲ့ပြီး စောက်ပတ်တွင်းမှ တစ်ခါမှ မခံစားဖူးသည့် ဝေဒနာထူးများကို ရာနှုန်းပြည့် ခံစားနေရရှာသည်။ အပြင်ပန်းမှ ကြည့်လျှင် သေးတွေ တဖျန်းဖျန်းပန်းထွက်နေပြီး ၀က်ရူးပြန်ကာ အသက်ငင်နေသည့် ၀တ်လစ်စလစ် ဖင်တုံးလုံးနှင့် လိုးချင်စရာ အရူးမလေးတစ်ယောက်ဟုသာ ထင်စရာရှိတော့သည်။ အမှန်တော့ နီလာမှာ တသက်နှင့် တကိုယ် မကြုံစဖူး ထူးကဲလှသော ကာမအရသာထူးများကို တပ်မက်စွာ ခံစားနေရခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။ စောက်ပတ်ထဲ ကျင်ငယ်ပေါက်ထဲမှ စောက်ရေတွေကို တစ်ခါပန်းထုတ်လိုက်တိုင်း နတ်ပြည် ရောက်ရောက်သွားသလိုပင် အရသာက ကောင်းမွန်လှလေသည်။ ချိုမြိန်လှသော တဏှာရေတွေကို တဖျန်းဖျန်းပန်းထုတ်နေရင်း ထိုအရသာများ ကုန်ဆုံးသွားမှာကိုပင် နီလာစိုးရိမ်နေမိလေသည်။ တကိုယ်လုံးမှာ ရှိသည့် သွေးသားများ ခန်းခြောက်သွားသည်အထိပင် ကာမစောက်ရေတွေကို ညှစ်ထုတ်ပစ်လိုက်ချင်တော့သည်။ လူတိုင်းလိုပင် တခါတရံ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဆီးအောင့်ဖူးတတ်ကြသည်။ အလွန်အမင်း သေးပေါက်ချင်ပြီး နောက်ဆုံးမထိန်းနိုင်တော့လောက်အောင် ဆီးအိမ်တစ်ခုလုံး ဆီးတွေပြည့်တင်းနေအောင် အောင့်ပြီးမှ စိတ်ရှိလက်ရှိ ပေါက်ချလိုက်ရသည့် အရသာကို လူတိုင်းခံစားဖူးကြပေမည်။ ယခု နီလာခံစားနေရသည့် အရသာက ထိုအရသာထက် ထောင်သောင်းမက ပိုလှသည်။ ဆီးအိမ်လည်း မတင်းပါဘဲနှင့် စောက်စိပွတ်ရင်း ပြီးနေလျက်က နောက်ထပ်ဆင့်ကဲ အရသာ ခံရသလိုမျိုး ဖြစ်လေသည်။ ထွက်သောအရေမှာ သေးတွေလား၊ ဘာတွေလားတော့ နီလာလည်း မသိတော့ပေ။ ညှစ်ကောင်းကောင်းနှင့် တဖျန်းဖျန်းသာ ပန်းထုတ်နေမိသည်။ တစ်မိနစ်လောက် ဆက်တိုက်ပန်းထုတ်ပြီးနောက်တွင်တော့ စောက်ရေတွေ အားပျော့ကာ ရပ်သွားခဲ့သည်။ တုံးလုံးဖြစ်နေသည့် ကိုယ်လုံးအောက်ပိုင်းကြွက်သားတွေကတော့ ဆက်ပြီး အတော်ကြာကြာ လှိုင်းထသလို တုန်နေသေးသည်။ နီလာမှာ တောင်နေသေးသည့် စောက်စိကို ဇိမ်ခံပြီး ဖြည်းဖြည်းလေး ဆက်ပွတ်ကစားရင်း မျက်လုံးလေးကို အသာမှိတ်ပြီး စည်းစိမ်ယူနေရင်းက ကုတင်ခြေရင်း အိပ်ခန်းတံခါးပေါက်နားဆီမှ ချွတ်ကနဲ အသံတစ်ခု ရုတ်တရက် ကြားလိုက်မိသည်။ ရဲနိုင်၏ ပေါင်လုံးပေါ်တွင် ခေါင်းအုံးအိပ်နေရာက ခေါင်းထောင်ပြီး အသံကြားရာဆီသို့ ပက်လက်လှန် ဖြဲကားထားသော ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ လှမ်းကြည့်လိုက်ရာ အခန်းတံခါးဝတွင် မတ်တတ်ကြီးရပ်နေသော လူနှစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရလေသည်။ နီလာ၏ ဖောင်းကားတင်းမာနေသော သဘာဝလွန် အရွယ်လွန် ဧရာမ စောက်စိကြီးနှင့် ဖြဲကားထားပြီး စောက်ရေတွေနှင့် ပေပွပြဲလန်နေသော စောက်ပတ်ကြီးတို့ကို မျက်လုံးအ၀ိုင်းသားနှင့် စိုက်ကြည့်နေသော လူနှစ်ယောက်မှာ အခြားသူများ မဟုတ်ကြ။ ရဲနိုင်၏ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းများဖြစ်သော အောင်အောင်နှင့် ကျော်ထွန်းလင်းတို့ပင် ဖြစ်ကြလေသည်။ နီလာမှာ ရုတ်တရက်ကြောင်ပြီး ကျောက်ရုပ်ကြီးလို မလှုပ်မယှက် ဖြစ်သွားရသည်။ သတိဝင်လာသည်နှင့် ကုတင်ပေါ်မှ စောင်တစ်ထည်ကို ဆွဲယူကာ ကိုယ်ပေါ်မှာ ခြုံပြီး ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကြားမှ လှစ်ကနဲ ဖြတ်ပြေးကာ တဘက်ကပ်ရပ် အိပ်ခန်းလွတ်ထဲသို့ ပြေးဝင်သွားမိသည်။ ထိုအခန်းထဲရှိ ကုတင်ပေါ်တွင် စောင်လေးခြုံပြီး ငုတ်တုတ်ထိုင်နေမိသည်။ နီလာ့မျက်နှာတစ်ခုလုံး နီမြန်းပြီး တကိုယ်လုံးထူပူနေသည်။ တက်ကြွနေသော လိင်စိတ်များ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်ကြသည်။ သွားပြီ။ မိမိတစ်ကိုယ်လုံးကို ဟိုကောင်နှစ်ကောင် တွေ့သွားပြီ။ တွေ့တာမှ ရိုးရိုးတွေ့တာမဟုတ်။ ရည်းစားလီးကို ခိုးစုပ်ရင်း စောက်ရေတွေ တဖျန်းဖျန်းပန်းနေသည့် အဖြစ်ကိုမှ တွေ့ရလေခြင်း။ နီလာတစ်ယောက်တည်း အရှက်လွန်ပြီး မျက်လုံးမှ မျက်ရည်များ အလိုလို စီးကျလာမိသည်။ နီလာ့တစ်ကိုယ်လုံး နို့တွေ ဖင်တွေ ဘာတစ်ခုမှ ပြောစရာမရှိသော်လည်း အရွယ်လွန် ဧရာမစောက်စိကြီးက သာမန်မဟုတ်ဘဲ ရှက်စရာဖြစ်နေရသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် အခြားလူတွေကို လျှောက်ပြောပြီး နီလာ့ကို လှောင်ကြတော့မည်။ နီလာ့ စောက်စိမှာ ငယ်ငယ်တုန်းက ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်း အပျိုဖော်ဝင်ပြီး နို့တွေ ဖင်တွေ ကြီးလာသည့် အချိန်မှာ စောက်စိက ရက်ပိုင်းအတွင်း ဖောင်းကားတက်လာခဲ့သည်။ နီလာမှာ ကောင်လေးတွေနှင့် လိုးချင်သော်လည်း ထိုစောက်စိကြီးကို သူများတွေ့သွားမှာစိုးသဖြင့် လွယ်လွယ်နှင့် မလိုးရဲခဲ့။ ယခု ရဲနိုင်နှင့်ကျမှ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်ပြီး နားလည်ပေးနိုင်မှာ သေချာသောကြောင့် လိုးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုတော့ သူနှင့် ဘာမှမဆိုင်သည့် ဟိုနှစ်ကောင်က အချောင်တွေ့သွားခဲ့ပြီ။ နီလာတစ်ယောက် နာကျည်းစွာနှင့် စောက်ကြားထဲမှ မိမိစောက်စိကို ငုံ့ကြည့်လိုက်မိသည်။ ချပ်ရပ်သော ဘိုက်သား၊ မို့ဖောင်းပြီး ပြောင်နေအောင် ရိတ်ထားသော ဆီးခုံလေးအောက်ခြေတွင် စောက်စိက အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုကြားမှ ငေါက်တောက်ထောင်ထွက်နေသည်။ နီလာ တစ်ခါတရံ ထိုစောက်စိကြီးကို မုန်းတီးမိသော်လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘာနှင့်မှ မတူသည့် အရသာထူးများကို ဖောင်းကားနေသော စောက်စိကသာ ပေးနိုင်သဖြင့် သူ့ကို အပြစ်မဆိုရက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ “နီလာ မရှက်ပါနဲ့၊ ငါတို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါဘူး” .... အသံကြားသဖြင့် လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ အောင်အောင်နှင့် ကျော်ထွန်းလင်းတို့ နှစ်ယောက်သား သူ့နောက်တွင် ရပ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ “ဘာကို မပြောမှာလဲ” နီလာက ခေါင်းလေးပြန်ငုံ့ပြီး မလုံမလဲ မေးလိုက်မိသည်။ “ဟို...” အောင်အောင်က ထစ်အထစ်အနှင့် “နင့်ကို ငါတို့ အ၀တ်မပါဘဲ တွေ့သွားတာကိုလေ၊ ဘယ်သူ့မှ မပြောပါဘူး၊ ကတိပေးပါတယ်” .. တဖြည်းဖြည်း နှစ်ယောက်လုံး ကုတင်ကို ပတ်ပြီး နီလာ့ရှေ့တွင် လာရပ်ကြသည်။ အောင်အောင်နှင့် ကျော်ထွန်းလင်းတို့မှာ ရုပ်ဖြောင့်သော ရဲနိုင်ဧ။် သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြသော်လည်း ရဲနိုင်နှင့်တော့ တခြားစီပင်။ သူဋ္ဌေးသားများ ဖြစ်သဖြင့်သာ ပေါင်းနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အောင်အောင်မှာ ပိန်ပိန်ရှည်ရှည် အသားဖြူဖျော့ဖျော့နှင့် သေခါနီးရောဂါသည်လေးနှင့်သာ တူတော့သည်။ ကျော်ထွန်းလင်းမှာမူ အောင်အောင်နှင့် ပြောင်းပြန် ၀၀ ပုပု ဗိုက်ပူပူနှင့် နီလာ့ထက်ပင် ပုသေးသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ရသည်မှာ ကာတွန်းရုပ်လေးတွေနှင့်ပင် တူသေးတော့သည်။ နီလာမှာ ယခုမူ တကိုယ်လုံးကို စောင်ခေါင်းမြီးခြုံထားပြီး မျက်နှာကို ငုံ့ထားသည်။ ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်မှာ နီလာ့ရှေ့တွင် ရပ်ပြီး ချော့နေသော်လည်း ခုနကတွေ့လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းကို မျက်စိထဲက မထွက်နိုင်ဖြစ်နေသေးသည်။ စောင်ခြုံကြီး၏အောက်တွင် နီလာတစ်ယောက် ကိုယ်တုံးလုံးကြီးနှင့် ထိုင်နေမည်ဟုလည်း နှစ်ယောက်သား မတိုင်ပင်ဘဲ ပြိုင်တူတွေးနေမိသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမှာ ပုံမလာသော စာဂျပိုးများပီပီ မိန်းမကိစ္စတွင် အဖြစ်မရှိဘဲ အိမ်တွင်းပုန်းပြီး အင်တာနက်မှ အပြာဝက်ဆိုက်များကိုသာ အမြဲကြည့်ပြီး ဂွင်းတိုက်နေရသူများဖြစ်သည်။ သူတို့ သူငယ်ချင်း ရဲနိုင်၏စော်၊ တစ်ကျောင်းလုံး၏ ကွင်းဖြစ်သော နီလာ့ကိုလည်း မှန်းမှန်းပြီး ဂွင်းတိုက်ရသည်မှာ မရေမတွက်နိုင်အောင်ပင်။ ယခုတော့ နှစ်ယောက်လုံး ကိုယ့်အဖြစ်ကို မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်နေရသည်။ အပြာဝက်ဆိုက် ဂျပိုးများ ဖြစ်သောကြောင့် စောက်ဖုတ် စောက်စိ အရွယ်စုံ ပုံစံစုံကို မြင်ဖူးပြီးဖြစ်ရာ နီလာ့စောက်စိကြီးမှာ သူတို့အတွက် အထူးအဆန်းမဟုတ်ဘဲ ပိုပြီးတောင် ဆွဲဆောင်မှု ကောင်းနေသေးသည်။ သို့သော် လက်တွေ့တွင်တော့ အဖြစ်မရှိသောကောင်များပီပီ ဘာပြောရမှန်းမသိ ဖြစ်နေသည်။ “ငါတို့ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ၊ နင် အရှက်ပြေသွားအောင်” ..... ကျော်ထွန်းလင်းက ပြောမိပြောရာ ပြောချလိုက်မိသည်။ ရှက်နေသော နီလာ၏ခေါင်းထဲတွင် အကြံတစ်ခု လက်ကနဲ ထွက်လာသည်။ “နင်တို့ ငါ့ကို အဲဒီလို တွေ့သွားပြီဆိုတော့ ကျေသွားအောင် နင်တို့လည်း ငါ့ကို ပြန်ချွတ်ပြရမယ်” ........... မျှော်လင့်မထားသော နီလာ၏ တုံ့ပြန်မှုကြောင့် နှစ်ယောက်လုံး ကြောင်သွားကြသည်။ နီလာက ဆက်ပြီး “ဘာလဲ မလုပ်ဘူးလား၊ အဲဒါဆို ငါအော်လိုက်မှာနော်၊ နှစ်ယောက်လုံး မုဒိမ်းမှုနဲ့ ထောင်ထဲ ရောက်သွားမယ်။ အခုချွတ်” .... နီလာက အမိန့်သံမာမာဖြင့် ပြောလိုက်သည်။ “ဟာ မအော်ပါနဲ့၊ ချွတ်ချွတ်ပါ့မယ်” ကျော်ထွန်းလင်းက အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့ပြောပြီး အင်္ကျီကို စချွတ်သည်။ ၀တုတ်လေး၏ တကိုယ်လုံး အဆီများဖြင့် တစ်နေသည်။ ပြီးတော့ မျက်နှာကြီးနီပြီး ဘောင်းဘီကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ချွတ်သည်။ အတွင်းခံလေးသာ ကျန်တော့သည်။ ကျော်ထွန်းလင်းကို ကြည့်ရသည်မှာ ရေကူးသင်မည့် ကလေးလေးနှင့်ပင် တူနေသေးတော့သည်။ အောင်အောင်ကလည်း ကြောက်ကြောက်နှင့် လိုက်ချွတ်ရာ ခဏအတွင်းပင် နှစ်ယောက်လုံး အောက်ခံဘောင်းဘီလေးတွေနှင့် ဖြစ်သွားကြသည်။ အောင်အောင်မှာ ပိန်လွန်းသောကြောင့် အရိုးပဒေသာ နံရိုးများ အပြိုင်းပြိုင်းဖြစ်နေသည်။ နီလာမှာ ထိုနှစ်ယောက်၏ ခန္ဒာကိုယ်တုံးလုံးများကိုကြည့်ပြီး စိတ်ကုန်သွားမိသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်မှာလည်း ယင်းကိုသိသဖြင့် ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေကြသည်။ “ဆက်ချွတ်လေ၊ ငါ့ကိုကျတော့ ၀ိုင်းကြည့်ပြီးတော့”.... ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်လုံး အောက်ခံဘောင်းဘီလေးတွေကို ပြိုင်တူချွတ်လိုက်ကြသည်။ လီးနှစ်ချောင်းက အောက်ခံဘောင်းဘီများအောက်မှ လှစ်ကနဲ လှစ်ကနဲ ထွက်လာသည်။ နီလာတစ်ယောက် မျက်တောင်မခတ်ဘဲ လီးနှစ်ချောင်းကို တလှည့်စီ ကြည့်နေမိသည်။ လီးနှစ်ချောင်းစလုံးမှာ တိုင်ပင်ထားသည့်အလား ကိုးဆယ်ဒီဂရီ မတ်တောင်နေကြလေသည်။ အောင်အောင်မှာ ရှက်လွန်း၍ မျက်နှာကို လက်နှင့်ပင် အုပ်ထားသည်။ နီလာမှာ မျှော်လင့်မထားဘဲ သူတို့လီးများ မာတောင်နေသည်ကို တွေ့ရ၍ အံ့သြသွားမိသည်။ သူတို့လီးတွေ တောင်နေရသည်မှာ ဘာကြောင့်လဲ။ အခြားအကြောင်းမရှိ။ နီလာ့ကိုယ်တုံးလုံးကြီးကို တွေ့လိုက်ရသောကြောင့်သာ ဖြစ်ရပေမည်။ ကိုးဆယ်ဒီဂရီ မာတောင်နေသော်လည်း လီးနှစ်ချောင်းလုံးမှာ တိုတိုသေးသေးလေးတွေသာ ဖြစ်ကြသည်။ နီလာ့စိတ်ထင် ကျော်ထွန်းလင်း၏လီးမှာ လေးလက်မခန့် ရှိပြီး အောင်အောင်၏ လီးမှာ ငါးလက်မ သာသာခန့်သာ ရှိပေလိမ့်မည်။ လူတွေကလည်း ပုံမလာ၊ လီးလေးတွေကလည်း လူစဉ်မမီသဖြင့် နီလာစိတ်ပိုပျက်သွားရသည်။ နီလာ့စိတ်ကို လှုပ်ရှားစေသည့် တစ်ခုတည်းသော အချက်ကတော့ လီးနှစ်ချောင်းလုံး အစွမ်းကုန် မာတောင်နေကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ နီလာ တစ်သက်နှင့်တကိုယ် မာတောင်နေသော လီးကို အောကားထဲမှာသာ တွေ့ဖူးပြီး အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပေ။ ကိုင်ကြည့်ချင်စိတ်ကို ထိန်းမရတော့ဘဲ နီလာ ထိုင်နေရာမှ ထလိုက်မိသည်။ ခြုံထားသော စောင်က ကိုယ်ပေါ်မှ ပြေလျော့ကျသွားသည်။ ယောက်ျားနှစ်ယောက်လုံး မျက်လုံးအပြူးသားနှင့် နီလာ့ကို စိုက်ကြည့်နေမိကြသည်။ နီလာမှာ ဂရိနတ်ဘုရားမလို တစ်လှမ်းချင်း သူတို့ရှိရာသို့ လျှောက်သွားသည်။ အခန်းထဲရှိ လူသုံးယောက်လုံး အ၀တ်မပါ ဗလာကျင်းနေကြသည်။ နီလာမှာ အလွန်လှပပြီး မင်းသမီးတစ်ပါးနှင့် တူနေသော်လည်း ကျန်နှစ်ကောင်မှာ လူရွှင်တော်များနှင့်သာ တူနေသေးတော့သည်။ ယောက်ျားနှစ်ယောက်နားသို့ ကပ်သွားပြီး ဘယ်လက်နှင့် အောင်အောင်၏လီးကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်ပြီး ညာလက်နှင့် ကျော်ထွန်းလင်း၏ လီး တိုတိုသေးသေး မာမာတောင်တောင်လေးကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်သည်။ “နင်တို့ လီးတွေကလည်း သေးလိုက်တာ” နီလာ့ပါးစပ်မှ တချိန်တည်း ချိုးချိုးနှိမ်နှိမ် ပြောချလိုက်သည်။ ကောင်လေးနှစ်ယောက်လုံး နီလာ့ လက်နုနုလေးများဖြင့် လီးအကိုင်ခံရ၍ ဖီးတက်သွားသော်လည်. လီးသေးသေးတွေဟု အပြောခံလိုက်ရသဖြင့် သိမ်ငယ်စိတ်တွေက တပြိုင်တည်းလိုလို ဖြစ်သွားရသည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက် အဖို့ မိမိလီးကို သေးသည်ဟု မိန်းမလှလေးတစ်ယောက်က ပြောတာ ခံရတာလောက် နာကျည်းစရာ မရှိပေ။ “ကျော်ထွန်းလင်းလီးက ပိုသေးတယ်၊ ကလေးလီးလေး ကျနေတာပဲ” ..... နီလာက တခစ်ခစ်ရယ်ရင်း ဆက်ပြောနေသည်။ ကျော်ထွန်းလင်းမှာ ပေါ်တင်ကြီး အစော်ကားခံရ၍ ဒေါသ ထောင်းကနဲ ထွက်သွားမိသည်။ “နင်ကျတော့ရော.... နင့် စောက်စိကြီးက မိန်းကလေးတန်မဲ့ ရွံစရာ အကြီးကြီးဖြစ်နေတာ မရှက်ဘူးလား။ နင် မိန်းမ အစစ်ရော ဟုတ်လို့လား၊ စောက်ခြောက်မကြီးရဲ့၊ ငါ့လီးထဲက သေးနဲ့တောင် နင့် ရောဂါသည် စောက်ဖုတ်ကြီးကို မပန်းဘူး.....”.................. “ဖျန်း”................ ကျော်ထွန်းလင်း စကားမဆုံးမီပင် နီလာက လီးကိုင်ထားသော လက်ကိုလွှတ်ပြီး ပါးကို တအားရိုက်ပစ်လိုက်သည်။ “သွား နင် အခုထွက်သွား”..................... ကျော်ထွန်းလင်း ရုတ်တရက် သတိပြန်ဝင်သွားသည်။ ကံကောင်းလို့ ဒီလို အခွင့်အရေးရတာ လက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်။ တစ်သက်လုံး နီလာလို မိန်းကလေးမျိုး နောက်ထပ်ကြုံဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့။ “ဟို ငါတောင်းပန်ပါတယ်ဟာ၊ မသွားပါရစေနဲ့၊ ငါ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ” ကျော်ထွန်းလင်းမှာ အရှက်မရှိဘဲ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး နီလာ့ ခြေသလုံးတွေကို ဖက်ပြီး တောင်းပန်နေမိသည်။ ပြီးလျှင် အ၀တ်မပါသော နီလာ့ခြေသလုံးသားလေးများကို သူ့ပါးစပ်နှင့် နမ်းစုပ်နေသည်။ နီလာမှာ မျက်ရည်တွေကျပြီး နောက်ပြန်လှည့်ကာ ကုတင်ပေါ် ပြန်ထိုင်ပစ်လိုက်သည်။ မျက်နှာကို လက်နှင့်အုပ်ပြီး ကုတင်စောင်းမှာ ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်နေသည်။ ရှက်လွန်း၍ ဘာကိုမှ မသိတော့။ စောက်ပတ်ကြီးမှာ ပေါင်ကားထိုင်နေသဖြင့် ပြဲကားနေပြီး ပက်ပက်စက်စက် အပြောခံလိုက်ရသော စောက်စိကြီးမှာလည်း အရှက်မရှိသည့်အလား ပြူးထွက်နေသေးသည်။ နီလာမှာ ယောက်ျားလေးတွေ၏ စိတ်ကို မသိ၍ လွှတ်ကနဲ ပြောလိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိကို ပြန်အပြောခံလိုက်ရမှ အနာပေါ် တုတ်ကျပြီး ယူကြုံးမရ ဖြစ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အောင်အောင်မှာ လီးအတောင်သားနှင့် နီလာ့ဘေးနားတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်ပြီး ပုခုံးလေးကို အသာဖက်လိုက်သည်။ နှစ်ယောက်လုံး ကိုယ်တုံးလုံးတွေနှင့် ဖြစ်ရာ အောင်အောင်မှာ နတ်ပြည်ရောက်နေသည့်အလား အသက်ပင် မရှူနိုင် ဖြစ်နေသည်။ နီလာ့ကိုယ်သင်းနံ့လေးမှာ ကမ္ဘာကျော်ရေမွှေး အရှုံးပေးရလောက်အောင်ပင် ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ဖြစ်နေသည်။ “ငါတို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ ဟို စောက်ရူးပြောတာ ဂရုမစိုက်ပါနဲ့“ ........... နီလာမှာ ချော့မရအောင် တရှိုက်ရှိုက်ငိုနေတော့သည်။ အောင်အောင်မှာ လီးပင်ပျော့ချင်ချင် ဖြစ်လာသည်။ ကျော်ထွန်းလင်းမှာ ဘာမှ မပြောတော့ဘဲ လေးဘက်ထောက်ပြီး နီလာ့ပေါင်ကြားထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ရောက်လာသည်။ နီလာ့ စောက်ဖုတ်ကြီးနားတွင် မျက်နှာကပ်ပြီး ခွေးအနံ့ခံသလို စောက်ဖုတ်နံ့ကို ရှူနေသည်။ စောက်ဖုတ်နံ့ရှူရင်း လက်တစ်ဘက်က ပေါင်ကြားရောက်သွားပြီး လီးကိုကိုင်ကာ ဂွင်းတိုက်နေသည်။ ပြီးလျှင် မပြောမဆိုနှင့် ထောင်နေသော စောက်စိကြီးကို ငုံ့ စုပ်လိုက်လေသည်။ “အင်း.... အင်း....” တရှုံ့ရှုံ့ငိုနေသော နီလာ ငိုနေရင်း တအင်းအင်း ဖြစ်သွားသည်။ မိမိကို စောက်ရှက်ခွဲခဲ့သော စောက်စိကြီးဆီမှ ပူနွေးစိုစွတ်သော အရသာကို ခံစားလိုက်ရသည်။ နီလာ၏ စောက်စိမှာ သူများထက် ငါးဆလောက်ကြီးသဖြင့် အရသာခံစားမှုမှာလည်း ငါးဆမက ပိုလေသည်။ ကျော်ထွန်းလင်းမှာ ယခုပင် သေးနှင့်တောင် မပန်းဘူးဟု ပြောထားသော စောက်စိကြီးကို သကြားလုံးစုပ်သလို တပြွတ်ပြွတ်နှင့် အငမ်းမရ စုပ်နေတော့သည်။ ခဏကြာလျှင် နီလာမှာ အငိုရပ်သွားပြီး အောင်အောင်ဖက်ထားသည့်ကြားမှ တအင်းအင်း ဖြစ်နေရှာသည်။ ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးကိုလည်း ကျော်ထွန်းလင်းစုပ်ရ အဆင်ပြေစေရန် ကားသည်ထက် တဖြည်းဖြည်း ကားပေးနေမိသည်။ အောင်အောင်လည်း အခြေအနေကောင်းလာသည်နှင့် နီလာ၏ နို့လုံးကြီးတွေကို ကိုင်ဆုပ်ပြီး အရသာခံနေမိသည်။ နီလာ့လက်လေးတစ်ဘက်ကို ယူပြီး မိမိ၏လီးပေါ် တင်ပေးလိုက်သည်။ နီလာက လီးချောင်းလေးကို အလိုက်သင့်ကိုင်ပြီး ဆုပ်ပေး ဂွင်းတိုက်ပေးနေမိသည်။ သုံးယောက်သား တညည်းညည်း တညူညူနှင့် အတော်လေးကို အရှိန်ရလာကြသည်။ နီလာ့စောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရေတွေ စိမ့်ကျလာသည်။ ကျော်ထွန်းလင်းက စောက်စိကို စုပ်လိုက် စောက်ဖုတ်ကို လျက်လိုက်၊ စောက်ခေါင်းကို လျှာနှင့်ထိုးလိုက် မျိုးစုံ ကလိနေသည်။ လက်တစ်ဘက်ကလည်း ကိုယ့်လီးကိုယ်ကိုင်ရင်း ဂွင်းအဆက်မပြတ် တိုက်နေသေးသည်။ အောင်အောင်မှာ အရှိန်ရလာသည်နှင့် မတ်တတ်ရပ်လိုက်ပြီး မိမိလီးကို နီလာ့မျက်နှာနှင့် တေ့ပေးလိုက်သည်။ နီလာက အလိုက်သိစွာ လီးတစ်ချောင်းလုံးကို အလွယ်တကူပင် ငုံပြီး စုပ်ယူလိုက်သည်။ အောင်အောင်မှာ ထိုမျှအထိ မမျှော်လင့်ထားသဖြင့် အငိုက်မိသွားသည်။ နီလာ့ ပါးစပ်တစ်ခုလုံး မိမိလီးကို ငုံလိုက်သည့် အရသာမှာ ဘာနှင့်မှ မတူအောင် ကောင်းလွန်းသဖြင့် တကိုယ်လုံးပင် တဆတ်ဆတ်တုန်သွားရသည်။ နီလာက ငုံထားသော ပါးစပ်ကို ရှေ့ထပ်တိုးပြီး အာခေါင်နှင့် လီးထိပ်ကိုထိအောင် မျိုချလိုက်ရာ အောင်အောင်တစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ “အိုး... အား.... သွားပြီ...... ဆောရီး ဆောရီး နီလာ၊ ထွက်ကုန်ပြီ..” ဟု အသံပြဲကြီးနှင့် အော်ရင်း နီလာ့ပါးစပ်ထဲသို့ သုက်ရည်ပူတွေ ပျစ်ကနဲ ပျစ်ကနဲ ပန်းထုတ်လိုက်မိတော့သည်။ နီလာမှာ အာခေါင်တွင် ရုတ်တရက် ပူကနဲဖြစ်သွား၍ အံ့အားသင့်သွားသော်လည်း ပါးစပ်ထဲရှိ လီးတန်ထိပ်မှ လရည်ထွက်မှန်းသိလိုက်သည်နှင့် အခြားမိန်းကလေး အများစုလို လီးတန်ကို ပါးစပ်မှ ချွတ်မပစ်လိုက်ဘဲ အောင်အောင် အရှိန်ပျက်သွားမှာ စိုးသည့်အလား အလိုက်သင့်ပင် လရည်တွေကို မျိုချပေးနေမိသည်။ အောင်အောင်မှာ မိမိလီးတစ်ချောင်းလုံး နီလာ့ပါးစပ်ထဲ အားမနာပါးမနာ တပ်လျက်က တစ်ကိုယ်လုံး ဓာတ်လိုက်သလို တွန့်ခါပြီး လီးချောင်းနှင့် ဂွေးဥနှစ်လုံးထဲမှ သုက်ရည်တစ်စက်မျှ မကျန်အောင် ဖင်ပိန်နှင့် စအိုဝလေးကို ရှုံ့ရှုံ့ပြီး စိမ်ပြေနပြေ အကြာကြီး ပန်းထုတ်နေမိသည်။ မိမိအရမ်းကို ကောင်းပြီး သုက်တွေ ပါးစပ်ထဲ ဒလဟော လွှတ်နေစဉ်တွင် အရှိန်လုံးဝမပျက်စေဘဲ အလိုက်တသိ မရွံမရှာ မျိုချပေးနေသော နီလာကို အောင်အောင် အရမ်းသနားသွားမိသည်။ တစ်မိနစ်လောက်ကြာအောင် ညှီစို့စို့ ပျစ်ချွဲချွဲ သုက်ရေတွေပန်းလွှတ်ပြီးနောက် လရည်ဆက်မထွက်တော့ဘဲ ရပ်သွားသည်။ သို့သော် လီးထဲတွင်တော့ ပိုးကောင်လေးတွေ သုက်ရည်ပြွန်ထဲတွင် တရွရွသွားနေသလိုမျိုး ကာမအထွတ်အထိပ် ပြီးသည့် အရသာက စွဲကျန်နေသေးသည်။ နီလာက အောင်အောင့် လီးချောင်းထဲတွင် ဖြစ်နေသည့် ဝေဒနာများကို မိမိ၏ မာတောင်ဖောင်းကားနေသော အရသာဖူး စောက်စိနှင့် ကိုယ်ချင်းစာပြီး သိနေသည့်အလား လီးအယားပြေသည်အထိ နူးနူးညံ့ညံ့ ညင်ညင်သာသာလေး ဆက်စုပ်ပေးနေသေးလေသည်။ အောင်အောင်မှာ နီလာ့ ဆံပင်လေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ကာမအရသာထူးကို မြိန်ရှက်စွာ ခံစားနေရင်း ရုတ်တရက်ပင် ရင်ထဲ အသည်းထဲ လီးထဲမှ နီလာ့ကို တကယ် နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတော့သည်။ ခဏကြာတော့ လီးကျဉ်လာသဖြင့် နီလာ့ ပါးစပ်ထဲမှ လီးကို ပြွတ်ကနဲ ဆွဲနှုတ်လိုက်သည်။ နီလာက နှုတ်ခမ်းလေးများကိုပင် လျှာနှင့် သပ်ပြီး အရသာ ခံနေသေးသည်။ “နင်က လီးသေးပေမယ့် လရည်တော့ အများကြီးထွက်သားပဲ” ။ နီလာ လွှတ်ကနဲ ပြောပြီးမှ သတိဝင်သွားကာ “ဆောရီးနော်” ဟု ပြန်တောင်းပန်လိုက်သည်။ အောင်အောင်က နီလာ့ နဖူးလေးကို နမ်းပြီး “ရပါတယ်။ နင့်ကို ငါချစ်သွားပြီ။ နင်ဘာပြောပြော ရတယ်။” ဟု လေသံလေးနှင့် ပြောလိုက်သည်။ နီလာ့စိတ်ထဲမှာ ရယ်ချင်သလို ဖြစ်သွားရသည်။ “နင့် လရည်ကို ငါ့ဘ၀မှာ ပထမဆုံး သောက်ဖူးတာ၊ နင့် လရည်က ချိုသားပဲ၊ ငါကြိုက်တယ်။” နီလာ့စကားကြောင့် အောင်အောင်မှာ ရင်တွေပင် ခုန်သွားရသည်။ သို့သော် ခဏချင်းပင် နီလာ့မျက်လုံးလေးများမှာ မှေးစင်းသွားပြီး ကျော်ထွန်းလင်း စောက်ဖုတ်လျက်ပေးနေသည်ကို ဆက်ပြီး အရသာ ခံနေတော့သည်။ “သြော် ငါချစ်တယ်လို့ ပြောလို့မှ မဆုံးသေးဘူး တခြားတစ်ယောက် စပ်ပပ်လျက်တာ ထိုင်စောင့်ရဦးမယ်” ဟု ကိုယ့်အဖြစ်ကို ကိုယ်တွေးရင်း အောင်အောင် ၀မ်းနည်း ချင်သလို ဖြစ်သွားမိသည်။ “အင်း လိုးတော့ကွာ၊ စောက်ပတ် အရမ်းယားလာပြီ” နီလာ၏ ချွဲပစ်စွာ ပြောလိုက်သံက အောင်အောင်၏ အူထဲ အသည်းထဲကို ကလိကလိ ဖြစ်သွားစေသည်။ သို့သော် မိမိ၏လီးက အခုပဲ ပြီးထား၍ ပျော့နေသည်။ ကျော်ထွန်းလင်းက စပ်ပပ်လျက်နေရာက မတ်တတ်ထရပ်လိုက်ပြီး နီလာ၏ပေါင်ကြားတွင် ၀င်ရပ်လိုက်သည်။ သူ၏ လီးငုတ်တိုလေးက လိုးချင်လွန်းရှာ၍ အသားကုန် မာတောင့်နေသည်။ နီလာက ထိုလီးလေးကို ခေါင်းငုံ့ကြည့်ရင်း ပေါင်လုံးကြီးတွေကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားပေးလိုက်သည်။ နီလာ့စောက်စိကပင် ကျော်ထွန်းလင်းလီး၏ သုံးပုံ တစ်ပုံခန့် ရှိသယောင် ထင်ရသည်။
“ဟေ့ကောင် ကျော်ထွန်းလင်း ၊ နေ.... နေဦး” အောင်အောင်၏ အလန့်တကြား အော်လိုက်သံကြောင့် နီလာရော ကျော်ထွန်းလင်းပါ သူ့ကို လှည့်ကြည့်လိုက်ကြသည်။ ကျော်ထွန်းလင်းလီးက နီလာ့စောက်ခေါင်းဝနား ရောက်နေပြီ။ လက်နှစ်ဘက်က နီလာ့ဖင်လုံးကြီးတွေကို ညှစ်ထားသည်။ “ကျော်ထွန်းလင်း၊ နီလာ့ကို မလိုးပါနဲ့ကွာ။ ငါတောင်းပန်ပါတယ်။ ငါသူ့ကို ချစ်သွားပြီ။ ငါသူ့ကို လက်ထပ်မယ်။” အောင်အောင်မှာ ပြောရင်းဆိုရင်း နီလာ့ဘေးတွင် ၀င်ထိုင်ပြီး နီလာ့ကို ဆွဲဖက်လိုက်သည်။ “နီလာ နင့်ကို ငါချစ်တယ်။ နင့်ကို ငါ လက်ထပ်မယ်။ တသက်လုံး ငါ နင့်ကို လုပ်ကျွေး စောင့်ရှောက်မယ်” အောင်အောင် နီလာ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို မြတ်နိုးစွာ နမ်းရှုပ်လိုက်သည်။
ခုနက မိမိ စိတ်ကြိုက်ပန်းထည့်ထားသော သုက်နံ့က နီလာ့ပါးစပ်မှ ထောင်းကနဲ ထွက်လာသည်။ နီလာ့ မျက်လုံးလေးတွေ ရုတ်တရက် မှေးစင်းသွားသည်။ အောင်အောင်လည်း သုက်နံ့ကို ဂရုမစိုက်တော့ဘဲ နီလာ့ ပခုံးသားလေးတွေကို ယုယစွာကိုင်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း ဆက်နမ်းစုပ်နေမိသည်။ နမ်းနေရင်း နီလာ့ကိုယ်လုံးလေး တသိမ့်သိမ့်လှုပ်နေတာ အောင်အောင် သတိထားမိလိုက်သည်။ “ဟာ..... ဟေ့ ဟေ့ကောင်......” နီလာမှာ အောင်အောင့်ကို နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းနေစဉ် ကျော်ထွန်းလင်းက တေ့ထားသော လီးကို နီလာ့စောက်ခေါင်းထဲ စိုက်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လီးဝင်သွား၍ နမ်းနေရင်း နီလာ့မျက်လုံးလေး မှေးစင်းသွားရခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ကျော်ထွန်းလင်းမှာ နီလာ့ စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားများ၏ နူးညံ့စိုစွတ်ပူနွေးသော အရသာကို ခံစားရင်း အငမ်းမရ ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးနေမိသည်။ နီလာမှာ အောင်အောင်နှင့်နမ်းရင်း အောက်က ကျော်ထွန်းလင်းလိုးတာကို ဇိမ်ခံနေခြင်းဖြစ်သည်။ နီလာမှာ စောက်ပတ်ထဲ ခရမ်းသီး၊ သခွားသီး အကြီးကြီးများ ထည့်လိုးနေကျဖြစ်ရာ ယခု လီးငုတ်တိုလေးနှင့် လိုးခံနေရတာ သိပ်မထိလှသလို ဖြစ်နေသော်လည်း လီးဆိုသောအသိ အလိုးခံနေရသည်ဆိုသော အသိက ကာမစိတ်တွေကို နှိုးဆွပေးနေလေသည်။
အောင်အောင်မှာ တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့် လိုးနေသော မိန်းမကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေမိသည့် မိမိအဖြစ်ကို လွန်စွာ ရှက်သွားမိသည်။ သို့သော် သူ နီလာ့ကို ချစ်သွားပြီ။ ဘာမဆို လုပ်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ “နီလာ၊ နင့်ကို ငါလက်ထပ်မယ်ဆို၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါလုပ်ပေးမယ်၊ နင် ငါ့ကို လက်ထပ်မလားဟင်” .........“အင်း.... အင်း” နီလာမှာ အလိုးခံနေရင်း ညည်းနေခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် အောင်အောင်က သူ့ကို လက်ထပ်ဖို့ သဘောတူလိုက်သည်ဟု မှတ်ယူလိုက်သည်။ ကျော်ထွန်းလင်းမှာ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းကြီးစူကာ နီလာ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို မီးကုန်ယမ်းကုန် တဖွတ်ဖွတ်လိုးနေသည်။ နီလာ့ နို့အုံကြီးတွေမှာ ဆောင့်အားကြောင့် တသိမ့်သိမ့်တုန်နေတော့သည်။ အောင်အောင်တစ်ယောက် ဒီထက်ပို သည်းမခံနိုင်တော့။ မိမိ၏ ဇနီးလောင်းလေးကို ဒီဝက်ပုတ် တက်လိုးနေတာ ဘယ်လိုမှ ရပ်ကြည့်မနေနိုင်တော့။ ချက်ချင်းပင် ကျော်ထွန်းလင်း ကျောဘက်သို့သွားပြီး ဖက်တီး၏ခါးကို ဆွဲကာ ဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားတော့သည်။ သို့သော် ၀က်ပုတ်မှာ တဏှာတွေမွှန်ပြီး ဘယ်ကအားတွေရသည်မသိ၊ နေရာမှ လုံးဝမလှုပ်ဘဲ နီလာ၏ ဖြဲကားထားသော စောက်ခေါင်းကြီးကို တွင်တွင်ကြီးသာ ဆောင့်လိုးနေတော့သည်။ အောင်အောင်မှာ အရိုးပဒေသာထဲမှ ရှိသမျှအားကို ဖျစ်ညှစ်ပြီး ဆွဲဖယ်ပါသော်လည်း အားချင်းမမျှသဖြင့် ကျော်ထွန်းလင်းကို ဆွဲမဖယ်နိုင်ဘဲ ရှိလေသည်။ ထိုသို့ အတင်း ဆွဲဖယ်နေစဉ် ကျော်ထွန်းလင်း၏ တကိုယ်လုံးမှ အဆီပြင်များမှာ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တုန်သွားပြီး ဖင်ပြောင်ကြီး နှစ်လုံးမှာ ရှုံ့ရှုံ့သွားသည်ကို အောင်အောင် တွေ့လိုက်ရလေသည်။ နီလာ၏ ပေါင်လုံးကြီးများမှာလည်း ကားနေရာက ကျော်ထွန်းလင်း၏ ဖက်တီးကိုယ်လုံးကို ဆွဲညှစ်ပြီး ညှပ်ထားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ “ နိုး.... နိုး..... မရဘူး။ မဟုတ်ဘူး။.....” အောင်အောင်မှာ ဘာဖြစ်နေသည်ကို ရိပ်မိသွားပြီး ရှိသမျှအားကို နှစ်ဆတိုးကာ ကျော်ထွန်းလင်း၏ ခါးကို ဖက်ပြီး အတင်းဆွဲဖယ်လိုက်လေသည်။ ကျော်ထွန်းလင်းခမျာ ပြီးနေရင်း တန်းလန်းကြီး ဖြစ်သဖြင့် အငိုက်မိသွားပြီး နောက်သို့ ယိုင်ကျသွားရာ လီးမှာလည်း နီလာ့စောက်ခေါင်းတွင်းမှ ဖလွတ်ကနဲ ကျွတ်ထွက်သွားတော့သည်။ ကျော်ထွန်းလင်းမှာ အောင်အောင်ဆွဲခေါ်ရာသို့ ယိုင်ပါလာစဉ် လီးထိပ်မှ သုက်ရည်ဖြူဖြူများ ပန်းထွက်တုန်းပင် ရှိသေးလေသည်။ ဖက်တီးခမျာ ဆန့်တငင်ငင်ဖြင့် သုက်ရည်များကို ပန်းထုတ်နေရာ သူ့လရည်များမှာ နီလာ၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများ၊ ဆီးခုံများ၊ ပေါင်လုံးကြီးများပေါ်သို့ ဘတ်ကနဲ ဘတ်ကနဲ သွားကပ်ကုန်တော့သည်။ ကျော်ထွန်းလင်းမှာ သုက်များပန်းရင်း အားကုန်ခန်း ချိနဲ့သွားသည့်ပမာ နီလာ့ဘေး ကုတင်ပေါ်တွင် ဘိုင်းကနဲ လှဲချပြီး ခြေကုန်လက်ပန်း ကျသွားတော့သည်။ အောင်အောင်မှာ မြင်လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် အလွန် စိတ်ထိခိုက်သွားမိသည်။ သွားပြီ။ မိမိ လက်ထပ်မည့် ဇနီးလောင်း၏ စောက်ပတ်ထဲတွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက မိမိထက်အရင် လရည်တွေ ပန်းထုတ်သွားခဲ့ပြီ။ “စောက်ကောင်... ဘာစောက်ရူးထတာလဲ၊ သူများပြီးနေတာကို ကိုယ်ချင်းမစာ ဘာလုပ်တာလဲ” နီလာ၏ စူးစူးရှရှ ရန်တွေ့သံကြောင့် အောင်အောင် သတိပြန်ဝင်လာမိသည်။ နီလာမှာ ကျော်ထွန်းလင်း ခဏလေးနှင့်ပြီးသွားသဖြင့် မကျေမနပ်နှင့် ဖြစ်ရသည့်ကြားထဲ အောင်အောင်က လိုးနေသည့် သူများလီးကို ဆွဲနှုတ်သွားသဖြင့် စောက်ခေါင်းထဲမှာ လေဟာနယ်ကြီး ဖြစ်ကျန်ခဲ့သည့်အတွက် ဒေါသတွေထွက်နေမိသည်။ “ဟဲ့ကောင် ဘာလုပ်နေတာလဲ၊ တော်ပြီ၊ လာလိုးတော့၊ ငါစိတ်တိုလာပြီ။” နီလာက ပေါင်ကြီးနှစ်လုံး ဖြဲကားလျက်က အောင်အောင်ကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ အောင်အောင် နီလာ၏ စပ်ပပ်ကြီးကို ကြောင်ကြည့်နေမိသည်။ နီလာ့ စောက်ခေါင်းဝမှာ အလိုးခံချင်လွန်း၍ ဟစိဟစိဖြစ်နေသည်။ ကျော်ထွန်းလင်း စောက်ခေါင်းထဲတွင် တ၀က်တပျက် ပြီးသွားခဲ့သော သုက်ရည်များက နီလာ့စောက်ခေါင်းထဲမှ လျှံထွက်နေသည်။ ပေါင်ခြံများ၊ စောက်ဖုတ်အပြင်နှုတ်ခမ်းသားများပေါ်တွင်လည်း သုက်ရည် ၀ါကျင့်ကျင့် ပျစ်ပျစ်များ ပေကျံနေသည်။ “နင် ငါ့ကို ချစ်တယ်ဆို၊ လာလိုးလေဟာ” နီလာက အပျော့ဆွဲဖြင့် တချက်ချွဲလိုက်သည်နှင့် တွေနေသော အောင်အောင် ဖျောင်းကနဲ လီးတောင်တက်လာသည်။ နီလာ့ပေါင်ကြားသို့ ၀င်လိုက်သည်နှင့် ကျော်ထွန်းလင်း၏ သုက်ညှီနံ့က စူးကနဲ ထွက်လာသည်။ ပုံမှန်ဆိုလျှင် အလွန်ပင် မသတီချင်စရာ ကောင်းသော်လည်း နီလာ၏ ညှို့ဓာတ်က ပြင်းလှသဖြင့် အောင်အောင် မငြင်းနိုင်တော့။ “နင် ရေမဆေးတော့ဘူးလား”.... “ဘာလဲ... နင်က ရွံလို့လား၊ ဒါဆိုလဲ မလိုးနဲ့တော့” နီလာက နှုတ်ခမ်းလေးစူပြီး ပြောလိုက်ရာ ချစ်မိနေပြီ ဖြစ်သော အောင်အောင်မှာ နီလာ၏ သုက်ရည်လျှံနေသော စောက်ခေါင်းထဲသို့ သူ၏ လီးကို လိုးချလိုက်တော့သည်။ စောက်ခေါင်းထဲမှ သုက်ရည်တွေ ပျစ်ကနဲ လျှံထွက်လာပြီး အောင်အောင့် ပေါင်ခြံနှင့် လမွေးများတွင် ပေကပ်ကုန်သည်။ အောင်အောင် နီလာ၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆွဲညှစ်ပြီး မျက်စိစုံမှိတ်ကာ လိုးနေမိသည်။ မိမိလက်ထပ်ယူမည်ဟု စိတ်ကူးထားသော မိန်းကလေး၏ စောက်ဖုတ်ကို ပထမဆုံး လိုးရခြင်းဖြစ်သော်လည်း စပ်ပပ်အရသာ မခံနိုင်ဘဲ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ၏ လရည်ပျစ်ချွဲချွဲများနှင့် လီးအရေပြား ထိကပ်နေရသည်ကိုသာ သတိပြုမိပြီး ရွံရှာစက်ဆုပ်စိတ်ပင် ဖြစ်မိလေသည်။ တခြားသူ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး လိုးပြီးသွားသော စောက်ဖုတ်ကြီးဟူသောအသိကြောင့် ဆက်လိုးချင်စိတ်ပင် မရှိတော့အောင် ဖြစ်လာလေသည်။ လိုးနေရင်း အောက်သို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်ရာ အောင်အောင်၏ လီးပတ်ပတ်လည်တွင် ကျော်ထွန်းလင်း၏ သုက်ရေများမှာ အမြှုပ်များပင်ထပြီး တစိစိနှင့် ချွဲပစ်နေလေတော့သည်။ နီလာ့ပေါင်ခြံမှ သုက်ရည်များမှာလည်း အောင်အောင့် လမွေး ဆီးခုံနှင့် ဗိုက်များပေါ်တွင် ပေကျံကုန်လေသည်။ နီလာမှာ သူ့စောက်ဖုတ်ကို မလိုးချင် လိုးချင်နှင့် လိုးနေရှာသော အောင်အောင်ကို ကြည့်ကာ စိတ်ကုန်လာသည်။ တသက်နှင့် တကိုယ် ယောက်ျားတစ်ယောက်က မိမိစောက်ဖုတ်လေးကို ရွံရှာစွာနှင့် လိုးနေလိမ့်မည်ဟု ဘယ်သောအခါမှ မစဉ်းစားမိခဲ့ပေ။ =========================================================================== Posted by